shwezinu: April 2012
တင်မောင်မြင့် ၏ ဒက်ဒီ အပိုင်း (၁)
နှင်းပွင့်နှင်းဖတ်တွေ အဆုပ်လိုက်အခဲလိုက် သွန်းကျပက်ဖျန်းနေသည်။ မြင်ကွင်းမှာ ကလေးတွေကို ဆာရာ ဖတ်ပြလေ့ရှိသည့် ပုံပြင်စာအုပ်ထဲက အရုပ်ကားချပ်ကလေးများနှင့် တူနေ၏။
ဆာရာ တစ်ယောက် လက်နှိပ်စက် စားပွဲတွင် ထိုင်ကာ ပြတင်းအပြင်သို့ ငေးလျက်ရှိသည်။ အိမ်ရှေ့ မြက်ခင်းပြင် မှာ ဆီးနှင်းတွေလွှမ်းကာ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူလျက် ….. သစ်ပင်များပေါ်တွင်လည်း ဇာပ၀ါဖြူလေး များ ယီးလေးခိုနေကြသည့်နှယ်။
နံနက်ပိုင်းက ခေါင်းထဲက၀င်လာသည့် ဇာတ်လမ်းကို လုံးဝ ပြန်ဖော်လို့ မရတော့။ ဆောင်းကတ္တီပါရှုခင်း သည် လှချင်တိုင်း လှနေ၏။ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အတိ။ ပုံပြင်ဆန်ဆန် လှခြင်းမျိုး။ သည်မြို့ကလည်း ပုံပြင်စာအုပ် ထဲက မြို့တစ်မြို့ပင်ဖြစ်ပါ၏။ မြို့သူမြို့သားများလည်း အလားတူပင်။
ဆာရာ လုံးဝ မျှော်လင့်မထားသည့် ဘ၀မျိုး။ မဖြစ်လိုသည့်ဘ၀မျိုး။ သို့သော် ဆန္ဒမှန်သမျှတို့ ဘယ်အခါ တုန်း ကမှ မပြည့်ဝခဲ့ပါချေ၊ သည်ဝန်းကျင်တွင် သူတို့နှင့် အတူ ရောနှောမျောပါ လှုပ်ရှားနေခဲ့ ရသည်မှာ နှစ် ပေါင်းမနည်းတော့ပြီ။ သည်တစ်သက်တွင် ရုန်းထွက်၍ကော ရနိုင်ပါဦးမည်လားဟုပင် ကိုယ့်ကိုယ် ကို သံသယ၀င်လာသည်။
တစ်ရံရောအခါက ဆာရာမက်ကောမစ်ဆိုသည့်မိန်းကလေးသည် မဟုတ်မခံ ဆတ်ဆတ်ကြဲ၊ ရဲရဲတောက် ကလေးဖြစ်၏။ " ပန်းနုရောင် " မဂ္ဂဇင်းတိုက်မှ လက်ထောက် အယ်ဒီတာမကလေး။ နှစ်စဉ် ထိပ်ဆုံးမှ အတန်းတွေအောင်ပြီး ၁၉၆၉ ခုနှစ် တွင် နာမည်ကျော် ရက်ကလစ်တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ယူခဲ့သူဖြစ်၏။
ပင်ကို အရည်အသွေး တလက်လက်ဖြင့် အများတကာထက် ခေါင်းတစ်လုံး အမြဲသာခဲ့သည့် အကြင် မိန်းကလေး သည် ခုတော့ သူတို့အထဲတွင် ရောနှောမျောပါကာ သူလို ကိုယ်လိုပင် သာမန်ဘ၀တွင် အသက်ရှင် ကျင်လည်နေရ၏။
အချိန်တွေ ဘယ်လိုကုန်သွားကြပါလိမ့်။ ဘာမျှ ကြာလိုက်သည်မထင်။ အင်း … နှစ် နှစ်ဆယ်နီးပါးပင် ရှိခဲ့ပြီကော …
ခုတော့ ဆာရာဝတ်ဆင် ဖြစ်နေပြီလေ။ တစ်နည်း …. မစ္စက်အော်လီဗာ ၀တ်ဆင်ပေါ့။
နယူးယောက်မြို့ ၏ ပါချ့စ် ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်မှ သိပ်လှသည့် အိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ရဲ့ အိမ်ရှင် မလေ။ နှစ်ဆိုင်း စနစ်နှင့် ၀ယ်ခဲ့ပြီး ဆယ့်လေးနှစ်လုံးလုံး ကုန်းရုန်းဆပ်ခဲ့လို့ ခုတော့ အိမ်ကြီးကို ပိုင်လုနီးနေ ပါပြီ။
ကလေးသုံးယောက် ရှိသည်။ ခွေးကတစ်ကောင်။ မွေးထားသည့် ကြွက်မြီးတို ကလေးကတော့ မနှစ် က သေသွားသည်။ ပြီးတော့ အလွန်ချစ်ရသည့် ခင်ပွန်းသည် ရှိပါသေး၏။ သိပ်ကိုချစ်ဖို့ ကောင်း သည့် အော်လီ ….။
ဆာရာ ကျောင်းပြီးသည့်နှစ်မှာပင် အော်လီဗာက ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရသည်။ ဒုတိယနှစ် ကတည်းက သူတို့နှစ်ယောက် ချစ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်၏။ ဆာရာတွင် မရှိသည့် အရည် အချင်းတွေ အော်လီဗာ တွင် အပြည့်ရှိ သည်။
ဆာရာ က ခပ်ရိုင်းရိုင်း လုပ်ချင်တိုင်း၊ သောင်းကျန်းချင်တိုင်း သူက လိမ်လိမ်မာမာထိန်းသည်။ ဗီယက်နမ်ကိစ္စ တွင်တော့ ဆာရာနှင့် အကြီးအကျယ် စကားများကြသည်။ ဒါကိုတော့ ဆာရာ ခွင့် မလွှတ်နိုင်။
နှစ်ယောက်သား ဘွဲ့ရကြပြီးမှ သည်ကိစ္စပေါ်ခြင်းဖြစ်၏။ ဆာရာက သူ့ကို လုံးဝ အတွေ့မခံ ဘဲ ဖြတ်ပစ်လိုက် သည်။ နယူးယောက်တွင် သွားနေပြီး စာပေလောကကို တိုးဝင်ဖို့ ကြိုးစားသည်။
အတ္တလန်တစ် မဂ္ဂဇင်းတွင် နှစ်လဆက်ပါသည်။ ပြီးတော့ …. အင်း ….. ခုနေပြန်တွေးရင်တောင် ရင်တွေ ခုန် တုန်း။ နယူးဟော့ကာမဂ္ဂဇင်းကြီးကလည်း ဆာရာ့စာမူတွေ သုံးသည်လေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပိုမိုခိုင်မာ လာ၏။
ထိုအချိန်တွင် အော်လီဗာကလည်း နယူးယောက် ၇၉လမ်း တွင် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နှင့် အခန်း တစ်ခန်း စုငှားနေပြီး ကြော်ငြာအေဂျင်စီ လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
သူရခဲ့သည့် အမ်ဘီအေဘွဲ့ကြောင့် သူ့အတွက် အလုပ်ရဖို့ မခက်ပါ။ သည်အတွက် ဆာရာ သူ့ကို မုန်းချင်ပါ သည်။ အမ်ဘီအေပုံစံဝင် ခေတ်ပညာတတ်တစ်ယောက် …..သို့သော် မုန်း၍မရပါချေ။ တစ်သက် တွင် တစ်ခါသာ ချစ်ဖူးသည့် အချစ်မျိုးဖြင့် ချစ်ခဲ့ရသည့် ချစ်ဦးသူ မဟုတ်ပါလား။
" မြို့စွန်ရပ်ကွက်တစ်ခုခုမှာ အခြေချမယ်၊ ကလေး လေးယောက်ယူမယ်၊ အမွေး ဖားဖား ခွေးကြီးတစ်ကောင် မွေးမယ်၊ မိန်းမကို ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ခိုင်းဘူး၊ အိမ်ရှင်မပဲဖြစ်ရမယ် "
စသည့်စကားမျိုး သူပြောလာလျှင် ဆာရာက ဟားပစ်သည်။ သည်လိုအခါမျိုးတွင် အော်လီဗာက လူပျိုပေါက် ကလေး တစ်ယောက်လို ပြုံးနေတတ်၏။
သည်အဖြစ်မျိုးကလေးများက ဆာရာ့ကို ရင်ခုန်စေခြင်းဖြစ်ပါ၏။ သည်လိုရင်ခုန်သံများကြားမှပင် ဆာရာ သည် ချစ်သူ အား အမ်ဘီအေဘွဲ့ရ၊ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းထွက်ကြီးတစ်ယောက် မဟုတ်ဘဲ မိမိထက် ပို၍ရှည်သော ဆံပင်များပိုင်ရှင်၊ ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်၊ ဒါမှမဟုတ် ပန်းပု ဆရာ တစ်ယောက် ဖြစ်လိုက်လျှင် ဘယ်လောက် ပျော်စရာကောင်းလေမည်လဲဟူသည့် အတွေးမျိုး လည်း တွေးတတ်လေ သည်။
အော်လီဗာ သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၏ ၁၉၆၀ ခုနှစ်စံဖြင့် ပြောရလျှင် တိုးတက်သော အယူအဆ ရှိ သူမဟုတ်။ ဗီယက်နမ်ပြဿနာ ကို သူရှုမြင်ပုံက ရှင်းနေသည်မဟုတ်လား။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ထွက်၊ ပုံစံကျ ပညာတတ် စက်ရုပ်တစ်ရုပ်သာဖြစ်သည်။
ဆာရာက ဗီယက်နမ်ကျူးကျော်မှု ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြ ချီတက်ပွဲတွေမှာ ရှေ့တန်းက ပါဝင် လှုပ်ရှားခြင်း ကြောင့် အချုပ်ခံရတိုင်း အာမခံရအောင်၊ လွတ်အောင် လိုက်ပေးသူက အော်လီဗာ၊ ဆာရာ သူ့ကို ဘယ်လိုပဲ ဝေဖန်ဝေဖန်၊ ဘယ်လောက်ပဲ နှစ်ပြားမတန်အောင် ပြောပြော၊ သူ့ယုံကြည်ပုံနှင့် သူ့အယူအဆ ကို လေအေးကလေးဖြင့် ရှင်းပြတတ်သည်။
အော်လီဗာ သည် အလွန်သိမ်မွေ့သူဖြစ်၏။ အလွန်ပြည့်ဝသူဖြစ်၏။ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်း ရှိ သူလည်း ဖြစ်၏။ ပြီးတော့ ဆာရာ၏ မိတ်ဆွေကောင်း တစ်ယောက်လည်းဖြစ်၏။
သူနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဆိုးစရာတွေ၊ သဘောချင်းမတွေ့တာတွေ ကြုံနေသည့်တိုင် သူ့ကို မချစ်ဘဲ နေ ဖို့ ခက်လှသည်။
နှစ်ယောက်သားဆုံပြီး စားသောက်ကြတိုင်း သူဘာတွေ လုပ်နေကြောင်း အသိပေးတတ်သည်။ ဆာရာ ဘာတွေရေးနေ သည်ကိုလည်း သူသိချင်သည်။ ဆာရာသည် စာပေ အရေးအသားတွင် ပါရမီဥာဏ်ခံ ရင့်သန်ကြောင်း အော်လီဗာ သိသည်။ စာရေးရင်း အိမ်ထောင်ပြုသူတွေ အများကြီးပါ။ သည်ကလေးမ ဘာကြောင့် လက်ထပ်ဖို့ပြောတိုင်း ခါးခါးသီးသီး ငြင်းနေပါလိမ့်။
" လက်ထပ်တယ် ဆိုတာ အားကိုးအားထားလိုချင်တဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ အလုပ်ပဲ၊ ဆာရာက ဘယ်သူ့ကိုမှ အား မကိုးချင်ဘူး … အော်လီဗာဝတ်ဆင် "
ဆာရာ သည် ပြောသည့်အတိုင်း ဖြစ်အောင်လုပ်သည့် မိန်းကလေးဖြစ်သည်။ ပြတိုက်တစ်ခုတွင် အချိန် ပိုင်း ၀င်လုပ်ပြီး စာတွေရေးသည်။ စားဝတ်နေရေးအတွက် ဘာမှမပူရ။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ၊ ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုး …။
ခုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သံသယဖြစ်လာသည်။ ဟိုတုန်းက သတ္တိမျိုးတွေ ရှိပါဦးမည်လား။ ကိုယ့်ခြေထောက် ပေါ်ကိုယ် ရပ်နိုင်ပါတော့မည်လား။ အိမ်ထောင်သက် ဆယ့်ရှစ်နှစ်လုံးလုံး သူ့ကို မှီခို ခဲ့ရသည်လေ။ မိမိဘ၀ လိုအပ်ချက် မှန်သမျှ အသေးအဖွဲလေးတွေကစ သူက တာဝန် ယူထားသည်မဟုတ်လား။ အရာရာတွင် ရှေ့မှရပ်ပြီး အကာအကွယ်ပေးမည့် လင်သားနှင့်နေရသည့် ဘ၀ သည် လုံခြုံလွန်းလှသည်။
တဖြည်းဖြည်းနှင့် သူ့အပေါ် အားကိုးစိတ်တွေ ကြီးမားလိုက်ပုံမှာ အော်လီဗာ တစ်ခုခုများ ဖြစ်သွားလျှင် ဆိုသ ည့် အတွေးမျိုး ၀င်လာသည့်အခါ ဆာရာတစ်ယောက် အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွားတတ်သည် အထိပင်။
သည်တာဝန်တွေကို မိမိတစ်ယောက်တည်း ယူနိုင်ပါမည်လား။ ကလေးတွေရယ်၊ သည်အိမ်ကြီးရယ်၊ ပြီးတော့ မိမိကိုယ်တိုင် ရယ်။ သည်လိုစိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် ပူပူပင်ပင်ဖြစ်ရကြောင်းပြောလျှင် အော်လီဗာ ရယ်နေ တတ်သည်။ "ပူစရာမရှိ၊ ကြံဖန်ပူရန်ကော မိန်းကလေးရယ်" ဟုဆိုကာ နှစ်သိမ့်တတ်သည်။
အော်လီဗာ သည် သန်းကြွယ်သေဌေးကြီး တစ်ယောက်တော့ မဖြစ်သေးပါ။ သို့သော် သူ့တာဝန်ကို သူယူ နိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စုကို လှလှပပ တည်ဆောက်နိုင်သူဖြစ်ပါ၏။
အသက် အာမခံတွေ အများကြီးထားနိုင်သည်။ မယ်ဒီဆင်ရိပ်သာမှ ကြော်ငြာအေဂျင်စီလုပ်ငန်းမှာ သူ့ အတွက် သီးပွင့်ဝေဆာစွာဖြင့် အမေရိကန်တွင် အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်လာသည်။ အသက်လေးဆယ့် လေးနှစ် အရွယ်တွင် အော်လီဗာသည် ကုမ္ပဏီ၏ တတိယအရေးအပါဆုံး ရာထူး ပိုင်ရှင် ဖြစ်လာ၏။ အသက်အငယ်ဆုံး ဒုတိယဥက္ကဌအဖြစ် နယူးယောက်စီးပွားကုန်သွယ်လောကတွင် ထင်ရှား လျက်ရှိသည်။
လင်တော်မောင်အတွက် ဆာရာဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေသည်။ သို့သော် ….. သူမရှိလျှင်ဟူသည့်စိတ်က ရံခါ တွင် ဆာရာ့ခေါင်းထဲ ၀င်လာစမြဲ။
လက်နှိပ်စက် စားပွဲတွင်ထိုင်ကာ ဆီးနှင်းပွင့်တွေကို ငေးရင်း၊ စာရေးဟန်ဆောင်ရင်း ကလေးတွေ အပြန်ကို စောင့်နေရသည့်အဖြစ် …..။
ဘယ်တော့ မှ စဖြစ်မည်မဟုတ်သည့် ၀တ္ထု၊ ထို့ကြောင့် ဘယ်တော့မှလည်း ဆုံးဖြစ်မည်မဟုတ်သည့် ၀တ္ထု ဖြစ်ပါ၏။ ဤသို့ဖြင့် မရေးဖြစ်သော ၀တ္ထုကိုရေးရန် ကြိုးစားခဲ့သည်မှာ နှစ် နှစ်ပင် ပြည့်တော့မည်။
စာပြန်ရေး ရန် ၃၉ နှစ်မြောက် မွေးနေ့မတိုင်မီ တစ်ရက်အလိုတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘ၀ တွင် အလွန်အရေးကြီးသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါ၏။ ၃၉ သည် ၄၀ နှင့် စာလျှင် အလွန်ပျော်စရာ မကောင်းသည့် မွေးနေ့ဖြစ်ခဲ့ရ၏။ ဆုံးဖြတ်ချက် ကို အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခဲ့ဘူးလေ။
လေးဆယ်ပြည့်မွေးနေ့ ကို ဆာရာက "သင်္ချိုင်းသို့ ခြေတစ်လှမ်းအလို မွေးနေ့" ဟု ၀ိဂြ`ုလ်ပြု သဖြင့် အော်လီဗာ ခွင့်ရက်ရှည်ယူပြီး ဥရောပသို့ ပို့ပေးသည်။ လင်မယားနှစ်ယောက်တည်း ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ၏။ ကလေးနှစ်ယောက်က ကျောင်းပိတ်ရက် "စခန်းချ" ခရီးထွက်သွားကြသည်။ အငယ်လေး ဆမ် ကို အော်လီဗာ့ အမေက လာထိန်းပေးသည်။ ထိုစဉ်တွင် ဆမ်က ခုနစ်နှစ်သား ….. ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ကလေးတွေနှင့် ခွဲဖူးခြင်း …..။
ပါရီရောက်တော့ နိဗ္ဗာန် ဆိုတာ ဒါမျိုးလားဟုပင် အတွေးဝင်မိသည်။ လွတ်လပ်ချင်တိုင်း လွတ်လပ်နေ၏။ အိမ်တာဝန်မရှိ၊ ကလေးတာဝန်မရှိ။ ခွေးတာဝန်မရှိ၊ ဆရာမိဘအသင်း ကိစ္စမရှိ၊ ကျောင်း ရန်ပုံငွေ၊ ဆေးရုံရန် ပုံငွေ ကိစ္စမရှိ။ ဘာဆိုဘာမျှမရှိ။
ဥရောပ ရက်သတ္တပတ် လေးပတ်သည် ဘယ်တော့မှ မေ့၍ရနိုင်မည်မဟုတ်သည့် ဒုတိယ မင်္ဂလာ ခရီး ဖြစ်ပါ၏။ ပါရီ၊ ရောမ၊ ကိန်း၊ စိန်တိုပတ်စ် တစ်ခွင် ကုန်းလမ်းရေလမ်းဖြင့် အနှံ့အပြား လျှောက်သွားကြ သည်။ အကောင်းဆုံး ဟိုတယ်ကြီးများတွင် တည်းခိုဇိမ်ယူကြသည်။ အပြန်တွင် မှ လန်ဒန်ကို လှည့်ဝင်ကြ သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှန်သမျှ လိုက်မှတ်သည်။ မှတ်စုစာအုပ် ခုနှစ် အုပ် ပြည့်သွားသည်။
သို့သော် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဘာမှသုံးမရ။ ဥရောပ နောက်ခံဝတ္ထု ရေးဖွဲ့ကြည့်သည်။ မရ၊ ခရီးသွား ဆောင်းပါး ရေးကြည့်သည်။ မဖြစ်၊ နောက်ဆုံး ကဗျာတစ်ပုဒ်ပင် ထွက်မလာ။
စားပွဲတွင် ထိုင်ကာ မှတ်စုစာအုပ်တွေကို နံဘေးတွင် ဖြန့်ချထားပြီး ငေးနေတတ်၏။ လက်နှိပ်စက်ထဲမှ စာရွက်လွတ်ပေါ် တွင် စာတစ်လုံးမျှ ထင်မလာ။
တစ်နှစ်ကျော် ကြာသည်အထိ ထိုနည်းနှင်နှင်ပင်။ လေးဆယ့်တစ်နှစ်သို့ ရောက်လာသည့်အခါ ဘ၀ဟောင်း သည် ဟိုအဝေးကြီးတွင် ကျန်ခဲ့သလို ၀ိုးတ၀ါးသာမြင်တော့၏။ သည်အကြောင်း အော်လီဗာ ကို ပြောပြသည့်အခါ ရယ်၍သာ နေတတ်သည်။
" အင်း ….. ဆာရာ ….. ဆာရာ၊ မင်းဟာ ကိုယ်နဲ့ တွေ့စက အတိုင်းပဲ၊ ဘာမှ မပြောင်းလဲဘူး "
သူပြောတာ ဟုတ်သလောက် ဟုတ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ဆာရာ ပြောင်းလဲ သင့်သလောက် ပြောင်းခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါ၏။ ရွှေပိုးမျှင်ကလေးတွေနှင့်တူပြီး ကုပ်ပေါ်တွင် ထူထဲစွာ ၀ဲကျနေ တတ်သည့် ဆံပင်တို့သည် အရောင်လွင့်ပြယ်စ ပြုနေပြီ။ ဆံပင်ဖြူကလေးများ ကြိုးကြားကြိုးကြား ရှိနေပြီ။ အမေ လုပ်သူ က မပူမပင်ရဘဲ ကလေးတွေက အမေဆံပင်ဖြူမှာကို ၀ိုင်းပြီး စိုးရိမ်နေကြ၏။
အပြာရင့်ရောင် မျက်လုံးများကမူ ငယ်ငယ်တုန်းကလိုပင် တောက်ပ၀င်းလက်နေဆဲ။ နို့နှစ်ရောင် အသား အရေ မှာလည်း ရွှန်းစိုမွတ်ညက်နေဆဲ။
ဆာရာ သည် မိန်းမကျက်သရေအပြည့်ဖြင့် လှသည့် အလှပိုင်ရှင်မတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကိုယ်နေဟန် ကျစ်လျစ် တင့်တယ် ၏။ ခြေဆံလက်ဆံ ပြေပြစ်နုနယ်၏။ မျက်ဝန်းအစုံကမူ ရွှင်မြူးကခုန်နေတတ်သည်။
သည်မျက်လုံး များနှင့် ပထမဦးဆုံး ရင်ဆိုင်ရစဉ်ကတည်းက အော်လီဗာ ရင်တွေ တဒိုင်းဒိုင်း ခုန်ခဲ့ရခြင်းဖြစ် သည်။ ရွှင်ပျသည့်ရယ်သံ၊ မီးလျှံနှင့်တူသည့် သတ္တိ၊ လုပ်ပြီဆိုလျှင် နောက်မဆုတ်တတ်။ သည် ထူးခြား ချက်တွေကြောင့် ဆာရာ့ကို လူငယ်လူရွယ်တွေက အပေါင်းရ အသင်းရခက်သည့် မိန်းကလေး ဟုဆိုကြ သည်။ သို့သော် သူတို့ထဲတွင် အော်လီဗာမပါ။
အော်လီဗာက ဆာရာတွေးခေါ်ပုံကို သဘောကျသည်။ ပြောပုံဆိုပုံကို နှစ်သက်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက် သည် အပြန်အလှန် လေးစားမှုအပြည့်ဖြင့် ချစ်သူတွေဖြစ်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ အိပ်ရာထဲတွင် ယနေ့ တိုင် ဘယ်တော့မှ မငြီးငွေ့သည့် ချစ်သူများဖြစ်ကြ၏။ အနှစ်နှစ်ဆယ် ကြာလွန်းသည့် တိုင်အောင် ပျော်ပုံသစ်နေဆဲ။
ဆာရာ့ ကို လက်ထပ်ဖို့ အော်လီဗာတစ်ယောက် နှစ်နှစ်တိတိ နားချစည်းရုံးခဲ့ရ၏။ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် တွင်မှ ဆာရာ ခေါင်းညိတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အစဉ်အလာကို ပုန်ကန်ချင်သည့် ဆာရာက ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ကို ကန့်ကွက် ခဲ့ သည်။ အော်လီဗာ့ မိဘများ၏ ခြံထဲတွင်ပင် လက်ထပ်ပွဲကို အကျဉ်းရုံးပြီး ကျင်းပခဲ့သည်။
အနီရောင် ရဲရဲတောက်ဝတ်ထားသဖြင့် ဆာရာသည် သတို့သမီးနှင့် မတူဘဲ မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးမယ် ကလေး နှင့်တူနေ၏။ ဘာမြူဒါသို့ မင်္ဂလာခရီး ထွက်ခဲ့ကြသည်။ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ဆိုးရွားနေမှုကို သူတို့နှစ် ယောက် သတိမထားမိကြ။ ဟိုတယ်ထဲက အပြင်မထွက်ဘဲ မိုးမဆုံး လေ မဆုံး ပျော်တပြုံးပြုံးဖြင့်။ ကလေးနှစ်ယောက် လို ရယ်ကြ၏။ မြူးကြ၏။
ဘ၀ကို ဒုတိယရိပ်သာလမ်း တိုက်ခန်းကျဉ်းကျဉ်းကလေးမှာ စခဲ့ကြသည်။ သုံးပတ်လောက်ကြာတော့ ကြည်နူးမှု များ တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျလာသည်။ အခန်းနီးချင်းတွေက ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆူဆူညံညံ အပျိုလူပျိုတွေ။ ပျော်စရာပွဲတွေ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ဆက်နေအောင် ဖန်တီးကြသည်။
တစ်နေ့ အော်လီဗာ အလုပ်မှ ပြန်လာတော့ ဆာရာ မျက်နှာ မသာမယာနှင့် တွေ့ရ၏။ ဓမ္မတာပေါ်ချိန် မပေါ် သဖြင့် ဆာရာ အထိတ်တလန့် ဖြစ်နေသည်။ မင်္ဂလာဦး ခရီးထွက်စဉ်က ဂရုတစိုက် ကြိုတင် ကာကွယ် ထားသည်။ သို့သော် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အကာအကွယ်ကိစ္စကို ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲ လုပ်တော့ သည်။
သည်လောက်မြန်မြန် ဖြစ်လာမည်လည်း မထင်ဘူးလေ။ ခုတော့ ကလေးရှိနေပြီတဲ့။ ဖျက်ချဖို့ ပြောတော့ အော်လီဗာ အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွားသည်။ ဘယ်လိုများ သည်လိုအတွေးမျိုး ဆာရာ့ခေါင်း ထဲသို့ ၀င်လာပါ လိမ့်။
ဆာရာဘက်က အလေးအနက် အဆိုပြုခြင်းဖြစ်၏။ သည်လောက်မြန်မြန်ကြီး ကလေးမလိုချင်ပါ။
"ဒါလောက် စောစော မလိုချင်သေးပါဘူး၊ ဆာရာ အလုပ်ကလေးဘာလေး လုပ်ချင်သေးတယ်၊ တစ်ခုခုပေါ့ "
ဆာရာ့ လုံးချင်းဝတ္ထုတွေ နောက်ပိုင်းတွင် အရောင်းကျလာသည်။ မဂ္ဂဇင်းကြီးတစ်စောင်တွင် အယ်ဒီတာ ၀င်လုပ် ဖို့ စိတ်ကူးထား၏။ ပြီးတော့ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်တွင် မဟာဝိဇ္ဇာတန်း ဆက်တက် ဖို့လည်း လျှောက်ထားသည်။ လက်ထပ်ပြီးကတည်းက ပြတိုက်မှ အလုပ်ထွက် ထားလိုက်၏။ နေသည့်ရပ်ကွက်နှင့် ပြတိုက်မှာ အလှမ်းဝေးသဖြင့် သွားရေး မလွယ် ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အော်လီ က အမျိုးမျိုးဖျောင်းဖျသည်။
" အလုပ်က အချိန်မရွေး ၀င်လုပ်လို့ရပါတယ် ဆာရာရယ် "
အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့်ပြောပြီး သက်သောင့်သက်သာနေနိုင်အောင် အစစဂရုစိုက်သည်။ သို့သော် ဆာရာ ခေါင်းမာမြဲ မာနေ၏။ အော်လီ ဆောက်တည်ရာမရ ဖြစ်လာသည်။ အလုပ်သွားနေတုန်း တစ်နေရာ ရာသွားပြီး တစ်ခုခု လုပ်လိုက်မှဖြင့် …..
သို့သော် ဆာရာပြောသလို မလုပ်ဖြစ်ပါ။ လုပ်ဖို့ မကြိုးစားချင်လောက်အောင်ကို တစ်ချိန်လုံး ဖျားနေ တတ် သည်။ အားအင်ကုန်းခန်းကာ နွမ်းခွေနေသည်။ စိတ်ဓာတ်ကျလိုက်သည်မှာ ပြောဖွယ်ရာမရှိပြီ။ ဗိုက်ကြီး ကို သယ်ပြီး ကိုးလလုံးလုံးနေရဦးမည့်အဖြစ်။
အော်လီဗာကမူ အပျော်ကြီး ပျော်နေ၏။ သူက ကလေးလေးယောက်တောင် ယူချင်သူ မဟုတ် လား။ ငွေရေး ကြေးရေး ဘယ်လောက်ပင် ကြပ်တည်းစေကာမူ ရင်ဆိုင်မည်တဲ့လေ။ လျှာပေါ် တွင် မြက်ပေါက်ပါ စေဦး၊ အော်လီဗာလို လူစားမျိုးက မိန်းမကို ကလေး ဖျက်ချ ခွင့် ပေးမည်မဟုတ်။ နှစ်ယောက်စလုံး၏ ရင်သွေးကို မည်သို့ ဖျက်ဆီးသတ်ဖြတ်ရက်ပါမည်လဲ။ လူ့လောကကြီး ထဲသို့ ရင်သွေးကလေး မရောက်ခင် အဝေးကြီးကပင် ဖခင်စိတ်တို့ ရင်မှာ ဆွတ်ပျံ့ ကာ အော်လီဗာတစ်ယောက် အချစ်ကြီး ချစ်နေပြီ။
ဤသို့ဖြင့် ဘင်ဂျမင်ဝတ်ဆင်သည် မိဘနှစ်ပါး လက်ထပ်ပြီး ကိုးလနှင့်သုံးရက်အကြာတွင် လူ့လောက ထဲသို့ အံ့သြသည့် မျက်လုံးများ ကလည်ကလည်နှင့် ၀င်ရောက်လာခဲ့လေသည်။
မအေတူ သားကလေးသည် အော်ဟစ်ငိုယိုကာ ချက်ချင်းပဲ လောကကြီးထဲ တိုးဝင်တော့ မလား အောက်မေ့ရ၏။ သားဦးရချင်နေသည့် အော်လီဗာအဖို့ မအေတူကလေးလည်းဖြစ်နေပြန်၍ အရူးကြီး ရူးနေ တော့သည်။
ဘင်ဂျမင်သည် အလွန်အကြီးမြန်သည့် ကလေးဖြစ်သည်။ ရုပ်သာ အမေနှင့်တူသည် မဟုတ်၊ ခေါင်းမာပုံ၊ စိတ်ကြီးပုံ လည်းတူသည်။ လင်မယားနှစ်ယောက် အေးအေးဆေးဆေးနေရသည် မရှိတော့။ တစ်ခါနှစ်ခါ သည်ကောင်ကလေးကို လည်ပင်းညှစ်ဖို့ ဆာရာစိတ်ကူးမိသည်။ သို့သော် ဖအေရောက်လာသည်နှင့် သား အဖနှစ်ယောက် အကြည်ဆိုက်ကာ တ၀ါးဝါး တဟားဟားနှင့် ဖြစ်နေတတ်သည်။
သားကို ပခုံးပေါ်တင်လျက် ခုန်ပေါက်နေသည့် အော်လီဗာကို ကြည့်ပြီး ဆာရာတစ်ယောက် နီးရာကုလား ထိုင်တစ်လုံး တွင် အရုပ်ကြိုးပြတ် ထိုင်ချလိုက်သည်။ ၀ိုင်ခွက်ကို လက်တွင် ကိုင်ကာ သက်ပြင်းတစ်ချက် ချမိ၏။ အင်း ….. ဘယ်လိုများခရီးဆက်ရမှာပါလိမ့်။
မိခင်ဘ၀သည် ဆာရာနှင့် လုံးဝခွင့်မကျသည့်ဘ၀ ဖြစ်သည်။ အခန်းကလေးက ကျဉ်းကျဉ်း ကျပ်ကျပ်။ တွေးရင်း တွေးရင်း ရူးချင်လာသည်။ ရာသီဥတုက သည်နှစ်မှ သိသိသာသာ ဆိုးရွားနေ သည်။ အပြင်မထွက်နိုင်သည့် နေ့များတွင် ကလေးငိုသံက နံရံလေးဖက်မှ စူးစူးဝါးဝါး ပဲ့တင်ပြန် လာလျှင် ဆာရာ တစ်ယောက် ချက်ချင်း ဦးတည်ရာသို့ ထွက်ပြေးချင်စိတ် ပေါက်လာသည်။
အိမ်ပိုင်ရာပိုင်နှင့် ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနေဖို့ အော်လီဗာတွင် အစီအစဉ် ရှိပါ၏။ သို့သော် စီမံချက်မှာ ဟိုအဝေးကြီးမှ အိပ်မက်ပမာ ဖြစ်နေ၏။
ဆာရာ အလုပ်ဝင်လုပ်ဖို့ ကျပြန်တော့လည်း ကလေးထိန်းတစ်ယောက် ထားရမည်ဖြစ်၍ "ဘဲစား ဘဲချေ ဖြစ်နေမည် ဧကန်။ သို့သော် ဆာရာက လုပ်ချင်သည်။ သည်အခန်းထဲက အပြင်ထွက်နေ ရလျှင် တော်ပြီ။ အော်လီဗာက တစ်မျိုး၊ ကလေးကို ပြုစုဖို့က အရေးကြီးဆုံးတဲ့လေ။
" ဆာရာ ဒီအတိုင်းနေသွားရမှာလား အော်လီ၊ သူအော်ငိုနေတာကို တစ်နေ့လုံးထိုင်ကြည့်ပြီးတော့လေ "
ဘယ်လို မှ ဆက်သည်းမခံနိုင်တော့သလို ဖြစ်ရသည့် နေ့ရက်တွေများလာသည်။ သည်လိုချိန်တွင် သူက ကလေးလေးယောက် လိုချင်ကြောင်း သတိရလျှင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေပစ်လိုက်ချင်သည်။
ဆာရာ့ မိဘတွေဆီက ဘာအကူအညီမှမရ။ သူတို့က ဟိုးအနောက်ဘက်ကမ်းခြေ ချီကာဂိုမှာ မဟုတ် လား။ သူ့အမေ အကူအညီလည်း သိပ်မရပါဘူးလေ။ သားတစ်ယောက်ပဲ မွေးဖူးပြီး နှစ်တွေကြာလာတော့ ကလေးပြုစု ပုံတွေ မေ့ကုန်လောက်ရောပေါ့။ ပြီးတော့ မြေးကိုထိန်းဖို့ အဘွားကြီး စိတ်ရှည်ပုံမရ။ သို့သော် မအေနှင့် စာလျှင်တော့ ဘွားအေက ပို၍ စိတ်ရှည်ပါလိမ့်ဦးမည်။
ဘင်ဂျမင် တစ်ယောက် လမ်းလျှောက်တတ်သည့် အရွယ်ရောက်လာသည့်အခါ သိပ်ဂျီမတိုက်တော့။ တဖြည်းဖြည်း အသက်ရှူချောင်လာသည်။ လောင်းအိုင်လင်း ရပ်ကွက်တွင် အိမ်တစ်ဆောင် ငှားနိုင်ခဲ့၏။ နောက်နှစ်ဆိုလျှင် ဘင်ဂျမင်ကို ကလေးထိန်းကျောင်း ပို့နိုင်ပြီ။ နောက် တစ်နှစ်ထပ်စောင့် လျှင် လုံးဝနီးပါး လွတ်လပ်ပြီ။ စာပြန်ရေးမည်။
အလုပ်ဝင်ဖို့ စိတ်ကူးကိုတော့ စွန့်လိုက်ပြီ။ လုံးချင်းတစ်အုပ်ရေးမည်။ အခြေအနေတို့သည် အကောင်း ဘက်သို့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းစပြုနေပြီ။ သည်ချိန်တွင် အအေးမိပြီး အဖျားဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်လကျော် အိပ်ရာထဲလဲသည်။ တစ်ခါမျှ သည်လောက်မဖြစ်ဖူး၍ သူ့ကိုယ်သူ သေမည်ဟု ဆာရာယုံ ကြည်နေ၏။ အဆုတ်နာများဖြစ်နေမည်လား။ တစ်နေကုန် ချောင်းဆိုးသည်။ နောက်ဆုံးတွင်မှ အိမ်စရိတ် ထဲက ဖဲ့ပြီး ဆေးခန်းသွားသည်။ အဖျားက ရိုးရိုးတုပ်ကွေးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီတဲ့။
ပထမ ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်ကလို ဒေါသတွေ၊ ခံပြင်းခြင်းတွေမရှိတော့။ စိတ်အပျက်ကြီးပျက်ကာ အားလျော့ အားငယ် စွာဖြင့် မတိတ်တမ်းငိုနေမိ၏။
ဘယ်လို ရင်ဆိုင်နိုင်ပါမည်လဲ။ ဘယ်လိုကျော်လွှားနိုင်ပါတော့မည်လဲ။ ဘင်ဂျမင် နို့မဖြတ်မီ နောက် ကလေး တစ်ယောက် မွေးထုတ်ပြီး နှစ်ယောက်ကို ထိန်းရမည်ဆိုလျှင် သေပွဲဝင်ရရုံသာ ရှိတော့မည်။
အော်လီဗာ လည်း ဇနီးလုပ်သူ၏ အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး စိတ်ဓာတ်အကျကြီးကျလျက်ရှိသည်။ သူ့ကို သည်လို ပုံစံမျိုးဖြင့် သည်တစ်ခါ သာ တွေ့ဖူးသေးသည်။
ချစ်ဇနီး ကို ဘယ်လိုချော့မော့ စည်းရုံးရမှန်းမသိ ဖြစ်နေ၏။ ဒုတိယ ကလေးလိုချင်စိတ်ဖြင့် ရင်တွေ ခုန်နေပုံ မှာ ဘင်ဂျမင်ကလေး ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်က အတိုင်းပင်။ သည်အကြောင်းပြောမိလျှင် ဆာရာ ရှိုက်ကြီး တငင်ပို ပြန်၏။
" ဆာရာ့ ကို ခွင့်လွှတ်ပါ အော်လီရယ်၊ နော် ….. ဆာရာ မတတ်နိုင်တော့လို့ပါနော်၊ ဆာရာ နောက်ထပ် ကလေး မမွေးပါရစေနဲ့တော့ကွယ်၊ ဆာရာ တောင်းပန်ပါတယ်နော် "
ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချဖို့ကိစ္စဖြင့် စကားများကြပြန်၏။ သူသဘောမတူလျှင် ဆာရာ ရူးသွားမည်လားမသိ။ ဤသို့ ဖြင့် မတင်မကျ ဖြစ်ကာ ရက်တွေကြာလာသည်။ အော်လီဗာက ရှိသမျှ ပိုက်ဆံထုတ်ပြီး ဇနီးသည် သက်သောင့် သက်သာဖြစ်အောင် စီစဉ်သည်။
ဆာရာ့ ကို ကူညီရန် နေ့ဝက် အိမ်ဖော်မိန်းကလေး တစ်ယောက်ငှားထားပေးသည်။ အိမ်သား ၁၃ ဦး ရှိသည့် အိုင်ယာလန် မျိုးဆက်မိသားစုမှ မိန်းကလေးဖြစ်၏။ ဆာရာလိုချင်သည့် ပုံစံဝင် မိန်းကလေး။
ခုမှပင် ဆာရာ အပြင်လေးဘာလေး ထွက်ခွင့်ရတော့သည်။ စာကြည့်တိုက်တွေ ပြတိုက်တွေနှင့် လမ်းပြန် ပေါက်သည်။
ကျန်းမာရေးလည်း သိသိသာသာ ပြန်ကောင်းလာ၏။ ဘင်ဂျမင်ကလေးနှင့်ပင် အလွမ်းသင့်နေ ၏ ပြတိုက်သို့ နှစ်ခေါက်ပို့ပေးပြီးပြီ။
ထုတ် မပြောသော်လည်း ဒုတိယကလေးကို ဆာရာ လိုလိုချင်ချင်မွေးတော့မည်ဟုအော်လီဗာ ယုံကြည်နေ သည်။
ဤသို့ဖြင့် ဘင်ဂျမင် နှစ်နှစ်သားအရွယ်တွင် မယ်လီဆာကလေးကို မွေးခဲ့ရလေသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ မိသားစု ကို တောပိုင်းတွင် ပြောင်းရွှေ့ထားရန် အော်လီဗာ စိတ်ကူးမိခြင်းဖြစ်၏။ ကနက်တီးကတ်သို့ အပတ်တိုင်းလိုလိုသွားပြီး အိမ်ရှာသည်။ နောက်ဆုံး ၀န်နှင့် အားမမျှသဖြင့် လက်လျှော့လိုက်ရ၏။
ရုံးအားရက်တိုင်း အခြားရပ်ကွက်တကာသို့ အိမ်ရှာထွက်ကြပြန်သည်။ တစ်နှစ်လောက်ရှိမှ ယခုနေသည့် ပါးချေစ့်ရပ်ကွက် မှ အိမ်ကို ၀ယ်ဖြစ်တော့၏။
ယာတောအိမ်ဟောင်းကြီးဖြစ်၍ အများကြီးပြန်ပြင်ရဦးမည်။ ထမ်းပိုးထက်လမ်းခကြီးမည့်အဖြစ်။ သို့သော် ခြစ်ခြစ်ခြုတ်ခြုတ် နေထိုင်စားသောက်ကာ ပိုက်ဆံကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်စုပြီး တဖြည်းဖြည်း ပြင်ဆင်သွား သည်။ တစ်နှစ်အတွင်း အလွန်လှပသည့် အိမ်ကြီးတစ်ဆောင် ဖြစ်လာသည်။ သည် အတွက် လင်မယား နှစ်ယောက် ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေတော့၏။
" ဒါပေမယ့် ကလေးတော့ နောက်ထပ်မယူတော့ဘူးနော်၊ ဒါပဲ " ဟု ဆာရာက အော်လီဗာကို ရာဇသံပေး ထား သည်။
ဒုတိယ ရိပ်သာလမ်းက တိုက်ခန်းကို ပြန်လည်မြင်ယောင်ကြည့်မိသည့်အခါ အသက်ရှူ ကျပ်သလို ဖြစ်လာ သည်။ မြို့ထဲတွင် အရာတိုင်း သေးငယ်ပြီး ဈေးတွေကမူ ခေါင်ခိုက်နေ၏။ ခုတော် ကျယ်ကျယ် လွင့်လွင့် နှင့် ကလေးတွေကိုလည်း တစ်ခန်းစီ ထားနိုင်ပြီ။
ဧည့်ခန်း မှာ မီးလင်းဖိုကြီးနှင့် နွေးနွေးထွေးထွေးရှိသည်။ စာကြည့်ခန်းကို စိတ်ကြိုက်မွမ်းမံပြီး စာအုပ်တွေ အပြည့် ထည့်ထားသည်။ မီးဖိုဆောင်ကလည်း ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း။ ရှေးဟောင်းလက်ရာ မီးဖိုကြီး ကိုတော့ ဆာရာ့ဆန္ဒအရ မလဲဘဲထားသည်။ ပန်းခြံကို စီးမိုးမြင်နေရသည့် ဧရာမ ပြတင်းပေါက်ကြီးတွေကို ဆာရာ သဘောအကျဆုံး။
ကလေးတွေ ပန်းခြံထဲမှာ ကစားနေလျှင် ချက်ရင်းပြုတ်ရင်း ဆာရာ လှမ်းမြင်နိုင်၏။ သည်အရပ် ကို ပြောင်း လာသဖြင့် အိမ်ဖော်မလေးဆုံးရှုံးရခြင်းအတွက်တော့ တဖူနာသွားသည်။ သို့သော် တစ်ဖက် ကကြည့်လျှင် လည်း ခပ်ကောင်းကောင်းပင်။ ရှိစုမဲ့စု အိမ်ထဲ ၀င်သွား သဖြင့် ငွေရေးကြေးရေး မှာ လောလောဆယ် တွင် ကြပ်တည်းနေ၏။
ဘင်ဂျမင် ကလေး သုံးနှစ်ပြည့်လို့ မနက်မနက် ကျောင်းမှန်မှန်တက်နေပြီ။ နောက်တစ်နှစ်ကျလျှင်တော့ မယ်လီဆာ မူကြိုကျောင်းသူကြီး ဖြစ်လာတော့မည်။
ဆာရာ စာပြန်ရေး ဖို့ တာစူသည်။ သို့သော် အချိန်က လုံလုံလောက်လောက် မရသေး။ အလုပ်က ရှုပ်မြဲ ရှုပ် လျက်ပင်။
ဆေးရုံတွင် တစ်ပတ်တစ်ခါ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်အားပေးနေသည်လေ။ ကျန်ရက်များတွင်လည်း အိမ် ကိစ္စ၊ လင်ကိစ္စ၊ သားကိစ္စ၊ ခြံရှင်းဖို့ကိစ္စများဖြင့် အားရသည်မရှိ။ တစ်ရံရောအခါက ပန်းနုရောင် မဂ္ဂဇင်း ၏ အယ်ဒီတာမ၏ အဖြစ်မှာ ယုံနိုင်စရာ မရှိအောင် ပြောင်းလဲခဲ့လေပြီ။ သို့သော် အံ့သြစရာ ကောင်း သည်မှာ ဆာရာတစ်ယောက် သည်ဘ၀တွင် လိုလိုချင်ချင် မျောပါနေခြင်းဖြစ်၏။
ပြောင်း လာကတည်းက မပြေလည်စရာ အကြောင်းတို့သည် နယူးယောက်မြို့လယ်တွင် ကျန်ရစ် သလို ဖြစ်ခဲ့၏။ ငြိမ်းချမ်း အေးဆေးသော ကမ္ဘာကလေးတစ်ခု တည်ဆောက်ဖြစ်ပြီဟု ယုံကြည် ထားလိုက် ၏။ ရွယ် တူ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်ချက်ချင်း မိတ်ဆွေဖြစ်သွားသည်။
ရုံးပိတ်ရက် များတွင် တင်းနစ်ကစားကြ၊ ဖဲကစားကြနှင့်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းမှာလည်း ဆာရာမပါ မပြီး သလို ဖြစ်လာသည်။ ရဲရဲတောက် ဗီယက်နမ် စစ်ဆန့်ကျင်ရေးသမား ဆာရာ၏ ဘ၀သည် အိပ်မက် ပမာ ပြယ်လွင့်ခဲ့လေပြီ။ အမြတ်နိုးဆုံး စာရေးဆရာမဘ၀ကိုပင် တမ်းတမ်းတတ ဖြစ်မနေတော့။
ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သလို လင်ကိစ္စ၊ သားကိစ္စနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်လူမှုရေးကိစ္စများနှင့် အလုပ်ရှုပ်နေရလျှင် ဆာရာ ကျေနပ်နေတော့သည်။
အခန်းကျဉ်းကလေးထဲတွင် ဘင်ဂျမင်ကလေး ငယ်သံပါအောင် အော်သည့် အော်သံများသည် ဟိုးအဝေး ကြီးတွင် လွင့်ကျန်ခဲ့ကာ တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်ခဲ့လေပြီ။
ဘင်ဂျမင် ကလေးက သိပ်ကို ချစ်စရာကောင်းသည့် ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီ။ ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါ တွင်သာ မအေနှင့်တူသည်မဟုတ်။ ၀ါသနာနှင့် တန်ဖိုးထားတတ်ပုံခြင်းပါ တူနေသည်လေ။
ဘင်ဂျမင် သည် ဆာရာ၏ ကိုယ်ပွားတစ်ခုနှင့်တူ၏။ အမေ့ဆီမှ ရှိသမျှ အရည်အချင်း နို့ရည်များကို တစိမ့်စိမ့် စို့ယူနေသည့်အလား။
ဖအေကြီး သဘောကျနေသလို ဆာရာကလည်း ကျိတ်ပြီး ဂုဏ်ယူနေ၏။ တကယ့် မအေတူသားကလေး။ မယ်လီဆာ ကလေးက အေးသည်။ ဘင်ဂျမင် ငယ်ငယ်ကလို မဆိုး။ သူက လေးကဖအေတူ။ မျက်နှာ ချိုပြီး ပျော်ပျော်နေတတ်သည်။ ဘယ်တော့မှ နားပူနားဆာမလုပ်။ ကာတွန်းစာအုပ်တစ်အုပ်၊ ဒါမှ မဟုတ် ကစား စရာတစ်ခု၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ဒေါ်လာတန်တစ်ရွက်နှင့် အမေနောက် လိုက်နေရလျှင် သူကျေနပ်နေပြီ။ ဖအေလို ရွှေရောင်ဆံပင်နှင့်၊ မျက်လုံးစိမ်းနှင့်။ ရုပ်ကတော့ သိပ်မဆင်လှ။ တကယ်က သူ့ ဘွားအေ အော်လီ့ အမေနှင့် သွားတူနေ၏။ အဘွားကြီးက မယ်လီဆာကို ပိုချစ်သည်။ ဆာရာ အောင့်သက်သက်နှင့် ခံနေရ သည်။
ဆာရာနှင့် အော်လီဗာတို့အမေသည် ဘယ်တော့မှ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဖြစ်မလာကြပေ။ မစ္စက်ဝတ်ဆင် က ဟော ဟော ဒိုင်းဒိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်သည်။ သူတို့ လက်မထပ်ခင်က အဘွားကြီး က ဝေဖန်သည်တဲ့ လေ။ ဆာရာသည် ခေါင်းမာပြီး ထင်ရာလုပ်မည့် မိန်းကလေး၊ ကိုင်ရတွယ်ရခက်မည့် မိန်းကလေး၊ တစ်ကိုယ် ကောင်းဆန်မည့် မိန်းကလေး။ ထို့ကြောင့် တစ်ဦးတည်းသော သားကလေး တစ်နေ့ ဒုက္ခရောက် မည်ကို အလွန်စိုးရိမ်သည်တဲ့။
အိမ်ထောင်ရေးမှာ ချောမွေ့ ပြေပြစ်ပါ၏။ သို့သော် ဆာရာ့ခြေလှမ်းအမှားကို အဘွားကြီးက စောင့်ကြည့် နေ၏။ တစ်ကွက်မှားသည်နှင့် ငါမပြောလားဟူသည့် စကားမျိုးပြော ဖို့ စောင့်နေသည့်အလား။
မြေးတွေ ကိုချစ်သော အဘွားကြီးနှင့် ဆာရာ စကားပြော၍ အပေါက်အလမ်းတည့်သည်မှာ ကလေးတွေ ကိစ္စတစ်ခု သာရှိသည်။
အော်လီဗာက မအေနှင့်မိန်းမအကြားတွင် ဘာမှ မသိသလိုနေသည်။ သို့သော် အဘွားကြီးက သိပ်ပါး သည်။ သိပ်မျက်စိရှင်သည်။ ဆာရာ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ချင်ကြောင်း ရိပ်မိသည်။ ဘင်ဂျမင်လေး မွေးစက ကျိတ်ဖြစ်ခဲ့ သည့် မပြေလည်မှုများကို အကဲခတ်မိသည်။
အော်လီဗာတို့အဖေ ဂျော့ဝတ်ဆင်က ဇနီးလုပ်သူကို ဖျောင်းဖျသည်။
" ကလေးမလေး က တော်ရှာပါတယ် ဖီးလစ်ရယ်၊ လက်ထပ်စကတော့ သူက ငယ်သေးတာကိုး၊ သားကို သူပျော်အောင် ထားနိုင်သားပဲ "
အဘိုးကြီး က အဘွားကြီးထက် လေးလေးနက်နက် တွေးသည်။
" ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်မလေးမှာ ဒါထက်ကြီးမားတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေရှိနေသလိုပဲ၊ ဘာမှန်းတော့မသိဘူး၊ အဲဒီအတွက် သားကိုထိခိုက်မှာစိုးတယ် "
အဘိုးကြီးက ပြုံးပြီး ခေါင်းယမ်းရင်း …
" အော်လီ ထိန်းနိုင်မှာပါကွာ "
" ကျွန်မတော့ မထင်ဘူး၊ ကောင်မလေးလုပ်ချင်တာကို ရှင့်သားက တားမှာမဟုတ်ဘူး၊ အော်လီက သူ့ဘာသာ သူ ကျိတ်ခံမယ့် ကောင်စားမျိုး "
နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ပေါင်းလာသည့် လင်တော်မောင်ကို မော့ကြည့်ပြီး ခပ်ပြုံးပြုံး ပြောလိုက်သည်။ အဘိုးတို့ အဘွားတို့ ဘ၀ခရီးမှာ ပန်းခင်းလမ်းပမာ မွှေးပျံ့သာမောခဲ့၏။ နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ် ဘ၀မျိုး။
" သား က ဖအေတူသား မဟုတ်လား၊ သိပ်သဘောကောင်းလွန်းတယ်၊ အဲဒီလောက် သဘောကောင်းတဲ့ လူမျိုး ဟာ မဟုတ်တဲ့မိန်းမ လက်ထဲရောက်ရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်ရှင့် "
ဖီးလစ် ၀တ်ဆင်သည် သား၏အိမ်ထောင်ရေး အနည်ထိုင်နေချိန်မှာပင် သားအတွက် စိတ်မအေးနိုင်သေး။ တစ်ပြိုင်တည်းတွင် ဆာရာ့အပေါ်တွင် စိုးစဉ်းမျှသော မယုံကြည်စိတ်ကလေးလည်း ရင်ထဲ တွင် ခိုကပ်နေဆဲ။
ဇနိး၏ အဖြစ်ကို အဘိုးဝတ်ဆင် အကဲခတ်မိ၏။ ငယ်ကချစ်သည့် ငယ်ချစ်တွေအား ပြုံးကြည့်နေ၏။ ယခုတိုင် အဘွားဖီးလစ် ရင်ခုန်ရသောအပြုံးမျိုး။
" ကလေးမလေး ဘက်ကိုလဲ အမှတ်လေးဘာလေး ပေးဦးလေကွာ၊ သူ့ဘ၀တစ်ခုလုံး သားကို ပုံပေးထား တာပဲ၊ ပြီးတော့ တို့ဖို့လဲ ပါတယ်လေကွာ၊ မြေးနှစ်ယောက် သူမွေးပေးထားသားပဲ "
ဟုတ်တော့ လည်း ဟုတ်ပါသည်။ မြေးနှစ်ယောက်စလုံးသားနှင့် ချွတ်စွပ်မတူသော်လည်း တူသည့်နေရာ တွေ အများကြီးပါ။ အော်လီဗာသည် ခံ့ချောချောပြီး အလွန်ယောက်ျားပီသသူဖြစ်၏။ သို့သော် သူ့ကိုယ်သူ မသိ၊ သတိမထားမိ။ ဒါကပင် ပို၍ထူးခြားပြီး ပို၍ဆွဲဆောင်မှုရှိနေ၏။
" သူတို့ နောက်ထပ် ကလေးယူဦးမယ် ထင်သလား ဂျော့ "
သား ကို မမေးရဲသော မေးခွန်း။ ဆာရာကို မေးဖို့တော့ ဝေလာဝေး။
" ဒါတော့ ဘယ်သိမလ ဒါလင်ရယ်၊ ဒီအတိုင်းလဲ သူတို့ ဘ၀ ပြည့်စုံနေတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် ခုခေတ်က ဘာမှ ကြိုပြော လို့ မရဘူးကွ၊ အော်လီဗာရဲ့ ကြော်ငြာ အေဂျင်စီလုပ်ငန်းဆိုတာ ဘဏ်လုပ်ငန်းတို့ ဘာတို့လို သိပ် ခိုင်ခိုင်မာမာရှိတာမဟုတ်ဘူး။ သိပ်ပြီး ပုံသေကားကျ မျှော်လင့်ထားလို့ မရဘူး၊ ကလေးနောက်ထပ် မယူတာ သူတို့အတွက် အကောင်းဆုံးပေါ့ "
ဂျာ့ဝတ်ဆင် သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနှင့် ကုန်သွယ်လောက အတွေ့အကြုံရှိသူမို့ အော်လီဗာတို့ မိသားစုကိစ္စ ကို သည်လိုပင် သဘောထားလေသည်။ ဧရာမလုပ်ငန်းကြီးတွေ နာရီပိုင်းအတွင်း ပြိုကျပျက်စီး တတ် သည့် ခေတ်ကြီးမဟုတ်လား။
စားဝတ်နေရေးကလည်း ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် မြင်နေသည်လေ။ အဘိုးကြီး အဘွားကြီး နှစ်ယောက်တည်း မပူမပင် နေရာကပင် တဖြည်းဖြည်းကြပ်တည်းစပြုလာပြီ။ လွန်ခဲ့သည့် ၁၅ နှစ်ယောက် ကအော်လီဗာ တက္ကသိုလ်မှာ ရှိနေစဉ် ၀င်ချက်စတာတွင် အိမ်လှလှလေးတစ်လုံး ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်း မှ ပင်စင်မျက်မျက်ကလေးရသဖြင့် ဂျော့တို့ လင်မယား မပူမပင် နေနိုင်ခဲ့၏။ ခုတော့ ဂျော့ ၀တ်ဆင် တစ်ယောက် တဖြည်းဖြည်း ပူပင်စပြုလာပြီ။
စစ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲနှင့် စစ်ပွဲကလေးများစွာကို ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးသည့် ဂျော့က သားဖြစ်သူ အော်လီဗာဝတ်ဆင် ကို သည်အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မကြာခဏ သတိပေး စကားပြောသည်။
ဂျော့သည် အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်တွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ကံကောင်းလို့မသေ သည့် စစ်သားကောင်းကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်၏။ ၁၉၂၉ ခုနှစ် အမေရိကန် စီးပွားပျက်ကပ်ကြီးဆိုက်တော့ ဧရာမ လုပ်ငန်းကြီးတွေ နာရီပိုင်းအတွင်း ပြိုကျ ပျက်စီးသွားကြသည်ကို မျက်ဝါး ထင်ထင် တွေ့မြင်ခဲ့ရသူဖြစ် ၏။
ထို့ကြောင့် သားဖြစ်သူအား သတိတရားနှင့်နေရန် အမြဲသတိပေးသည်။
" သူတို့ ကလေးထပ်ယူစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူးကွာ၊ ဘာလို့တော့လို့လဲ "
သည်နေရာ တွင်တော့ အမြင်ချင်း မတူကြသည့် ဆာရာနှင့် ဂျေ့တို့သဘောတစ်ထပ်တည်းရှိကြသည်။
တစ်နေ့ တွင် ကားလျှောက်မောင်းရာမှ တစ်နေရာတွင် ရပ်ပြီး အေးအေးလူလူ လမ်းထွက်လျှောက်ရင်း သည် အကြောင်း စကားစပ်မိတော့ ကလေးထပ်ယူလျှင် မိုက်မဲရာကျမည့်အကြောင်း ဆာရာက လင်တော် မောင်အားပြော၏။
" ဘာလို့ ကလေးထပ်ယူတော့မလဲ မောင်ရယ်၊ သမီးရော၊ သားလေးရော ကြီးလာပြီပဲ၊ မကြာခင် သူတို့ တွေ ခြေနိုင်လက်နိုင်ဖြစ်လာရင် ဆာရာတို့ လုပ်ချင်ရာလုပ်နိုင်ပြီလေ၊ ဘာပြုလို့ စိတ်ညစ် စရာတွေ၊ ခေါင်း ရှုပ်စရာတွေကို အိမ်ထဲဝင်လာခံမလဲ "
ဆာရာ အဖို့ စဉ်းစားမိသည်နှင့် ခေါင်းတွေအုံလာသည့်အဖြစ်။
" ဆာရာရယ်၊ ခုနေ ကလေးရှိလာရင် ဟိုတုန်းကလို ကသီတော့မှာမှ မဟုတ်ဘဲ၊ ထပ် ယူရင် ကောင်းမလား လို့ပါ၊ တစ်နေ့ကျရင် သားသမီးနည်းလို့ နောင်တရနေရင် မခက်လား "
ဇနီး သည် ကို အကြင်နာ မျက်လုံးများဖြင့် ကြည့်လျက် ပြောနေခြင်းဖြစ်၏။ ဆာရာက သူ့မျက်လုံးများကို မသိကျိုးကျွန်ပြုနေ လိုက်ပြီး ….
" ကလေးတွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း နောက်ထပ် ကလေးမလိုချင်ကြတော့ပါဘူး အော်လီရယ်၊ ဘင်ဂျမင် က ခုနစ်နှစ်၊ မယ်လီဆာက ငါးနှစ်၊ သူတို့ ဘက်က ၀င်စဉ်းစားဦးလေ"
ဆာရာ အခိုင်အမာပြောနေခြင်းဖြစ်၏။ အလေးအနက် ပြောနေခြင်းဖြစ်၏။ ထိုအခါမျိုးတွင် ချစ်စရာ အပြုံး ကို ပြုံးလျက် ဇနီးသည်၏ လက်ကို တယုတယ ဆုပ်နယ်ပြီး ကားဆီသို့ ပြန်လှည့်ခေါ်လာသည်။
မကြာသေးခင် က မာစီဒီးအသစ် ၀ယ်စီးနိုင်ခဲ့သည်။ ဆာရာမသိသေးတာ တစ်ခုရှိသေးသည်။ သည်နှစ် ခရစ္စ မတ် တွင် ပေးဖို့ သားမွေး အင်္ကျီအကောင်းစား တစ်ထည် အော်လီဗာ ၀ယ်ထားပြီးပြီး။ ဆာရာ့ နာမည် အတို ကောက်စာလုံးများပါ ပန်းဖောက်ရေးထိုးထားပြီးပြီ။
" တကယ်ပြောနေတာပေါ့၊ ဟုတ်လား "
စိတ်ပျက်သည့် လေသံဖြင့် အော်လီဗာ မေးသည်။
" အိုး … တကယ်ပေါ့ "
ဆာရာ အခိုင်အမာ အတည်ပြုသည်။ အော်လီဗာ လက်လျှော့လိုက်ပါပြီ။ ဘယ်လိုပြော၍မှ ရတော့ မည်မဟုတ် ဟု ယုံကြည်လိုက်သည်။ ဆာရာ သုံးဆယ့်တစ်နှစ်ပြည့်ပြီ။ သည်ဘ၀မျာပင် ပျော်နေပြီ။ ဘာမှ ထပ် မလိုချင်တော့။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်များနှင့် နစ်မြုပ်နေရာမှ မယ်လီဆာ၏ အကသင်တန်းကိစ္စပါဝင်လာသဖြင့် ပို၍ အားလပ်ချိန် နည်းလာသည်။ ဒါကိုပင် ပီတိဖြစ်နေမိ၏။ ဘာလိုသေးလို့လဲ၊ တော်ပြီပေါ့။
အိမ် တစ်လုံး၊ ကားတစ်စီး၊ ကလေးနှစ်ယောက် အိမ်ဖော်တစ်ယောက် (မနှစ်ကစပြီး ထားနိုင်ခြင်းဖြစ်၏) သည် ထက်ပြည့်စုံဖို့ ဘာများလိုပါသေးသလဲ။
ကားထဲရောက်ရောက် ချင်း အော်လီဗာက မေးသည်။
" ဒီ ခရစ္စမတ်မှာ ကလေးတွေကို စကိတ်စီးခေါ်သွားရရင် မကောင်းဘူးလားဟင် "
စင်စစ် ရုံးပိတ်ရက်များတွင် အော်လီဗာက အိမ်မှာပင် နေချင်သည်။ အဖေအမေ အတွက် လည်း မြေးတွေ နှင့် နေချိန်ပိုရသည်။
ဆာရာ့ မိဘတွေကတော့ ဆာရာ့အစ်မနှင့် ကလေးတွေရှိရာ ဂရောစ်ပွိုင့်ကို ခရစ္စမတ်တိုင်း သွားသည်။ ဆာရာ ကလည်း မိဘရပ်ထံ ပြန်ချင်စိတ်သိပ်မရှိလှ။ တစ်ခါပဲ သွားဖြစ်ကြသည်။ အစ်မလုပ်သူကို ဆာရာ သိပ် သဘောမကျ။ အမေနှင့်ကလည်း ဘယ်တုန်းကမှမတည့်။
ထို့ကြောင့် အော်လီဗာ၏ အစီအစဉ်သစ်ကို ဆာရာ ချက်ချင်းသဘောကျသွားသည်။
" ဟာ … သိပ်ကောင်းတာပေါ့၊ ဘယ်သွားမလဲ၊ ဗားမောင့်ကိုလား "
" အက်စ်ပင် ဆို ပိုမကောင်းဘူးလား၊ ပိုပြီး ဝေးဝေးစီးရတာပေါ့၊ ပိုလဲ ပျော်စရာကောင်းတာပေါ့ "
" တကယ်၊ ဘာလဲ ….. ဆုကြေးတွေ အများကြီး ရလာလို့ လား "
အေဂျင်စီ ကို အကြီးဆုံး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦး၏ ကြော်ငြာရအောင် လုပ်ပေးသဖြင့် ဆုကြေး မျက်မျက် ကလေး ရလိုက်ကြောင်း ဆာရာ့ကို မပြောရသေး။ ပြီးခဲ့သည့် တစ်ပတ်လုံး နှစ်ယောက်သား အလုပ်တွေ ရှုပ်နေကြ သည်လေ။
Posted by SHWE ZIN U at 6:17 AM0comments Links to this post
အထောက်တော် လှအောင် ဘာသာပြန် ရဘက်ကာ, အပိုင်း (၃)
မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါး သည် ရာထူးဂုဏ်သိရ်ကြီးသူများ၊ မျက်နှာကြီးသူများကို အထင်ကြီး ကာ စပ်စပ်စုစုပြုလုပ်တတ်သူ မဟုတ်ခဲ့သော် ယနေ့လို အချိန်အခါမျိုးတွင် ကျွန်မ၏ဘဝသည် မည်သို့ မည်ပုံ များ ဖြစ်နေလေမည်နည်းဟု ကျွန်မ စဉ်းစားကြည့်မိပါသည်။
သည်လို အဘွားကြီးမျိုးနှင့် မှ ရေစက်ဆုံကာ ပေါင်းသင်းနေရသည့်အတွက် ရယ်စရာ တော့လည်း တစ်မျိုးကောင်းပါသည်။ အဘွားကြီး၏ စပ်စပ်စုစုနိုင်လှသော စရိုက်မှာ ရောဂါ တစ်မျိုးကောင်းပါသည်။ စိတ်နှင့်ပတ်သက်သော အရူးရောဂါတစ်မျိုးဟု ဆိုသော် ပို၍မှန်ကုန်ပါ လိမ့်မည်။
အစပထမပိုင်းတုန်းကတော့ အဘွားကြီး၏ သည်လိုအပြုအမူမျိုးကြောင့် တုန်လှုပ် ချောက်ချားခြင်း ဖြစ်ခဲ့ ရပါသည်။ လူတွေက သူ့ကွယ်ရာမှာ သူ့ကို သရော်လှောင်ပြောင် နေကြသည့်အတွက် သခင်အတွက် ငဝက် က ကျွန်ခံဆိုသလို ကျွန်မစိတ်အထိခိုက်ကြီး ထိ ခိုက်ခဲ့ရပါသည်။ သူနှင့် လွတ်အောင် ရှောင်ပြေး သွားတတ်ကြသည်။ သူနှင့် ရင်ဆိုင်တိုးမိပြီဟေ့ ဆိုလျှင်လည်း တစ်ကြိုး တည်း နောက်ကြောင်းပြန် လှည့်ကာ အလုပ်သမားများ အသုံးပြုသည့် နောက်ဘေးလှေကားမှ ဆင်းတတ်ကြသည်။
ကိုတေးဒါဇူး ဟိုတယ်သို့ မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါး လာရောက်အနားယူလေ့ ရှိသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပါပြီ။ ဟောလီးဝုင်္ဒဖဲ အရူးအမူး ကစားတတ်သည့် အကြောင်းနှင့် မျက် နှာကြီးများကို ဇန်းတင် ပေါင်းသင်း တတ်သည့် အကြောင်းများမှာလည်း လူတိုင်း မသိချင်အ ဆုံးဖြစ်နေကြသည်။ မွန်တီကာလို အပန်းဖြေစခန်း သို့ လာရောက်လည်ပတ်ကြသည့် နာမည်ကျော် ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှမှာ သူ့ အသိမိတ်ဆွေတွေ ချည်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၀ါကြွား တတ်သည်။
တကယ်ဆိုတော့ ယင်းနာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များကို စာတိုက်တွင် ဟိုဘက်ထိပ် သည်ဘက်ထိပ် တစ်ကြိမ် မျှသာ လှမ်းမြင်ဖူးခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခုတော့ရှိပါသည်။ နာမည် ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးတို့ သို့ကလို လှမ်းတွေ့ လိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်တည်း အရှက်အ ကြောက်မရှိ အူလျားဖားလျားပြေးကာ မိတ်ဆက်လေတော့ သည်။ သူ၏မိတ်ဆက်ခြင်းကို ခံရသောသားကောင်အဖို့ အန္တရာယ်နှင့် ကြုံတွေ့ ရပြီဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်ချိန် မရလိုက်မီကလေးမှာပင် ဟိုတယ်ရှိ သူ့အခန်းသို့ လာရောက် လည်ပတ်ပါ ရန် အဘွားကြီးက ဖိတ်မန္တက ပြုပြီးသား ဖြစ်သွားလေတော့သည်။
သူတိုက်ခိုက်ပုံ မှာ ဗြောင်ကျလွန်းပြီး တုံ့ဆိုင်းမှု မရှိသည့်အတွက် လွတ်မြောက်အခွင့် အရေးရသူမှာ မရှိ သလောက် ရှားပါးလှပါသည်။ ကိုတေဒါဇူး ဟို တယ် တွင်သူတည်းခိုနေ ခိုက်သူ့အတွက် ဆိုဖာတစ်လုံး ကို ဧည့်ခန်းတစ်နေရာရှိ စားသောက်ခန်းမနှင့် ဧည့်ကြိုရုံး ခန်းကူးရာ လမ်းခလယ်ခေါင်တည့်တည့်မှာ ချထားပေး ရသည်။ နေ့လယ်စာနှင့် ညာစာ စားပြီးတိုင်း ထို ဆိုဖာ ပေါ်မှာထိုင်ပြီး ကော်ဖီသောက်လေ့ ရှိပါသည်။ သည်တော့လည်း ဧည့်ကြို ရုံးခန်းနှင့် စားသော်ခန်းမကို ကူးသန်းသွားလာသူများအဖို့ သည် အဘွားကြီး ကို မကျော်ဖြတ်ဘဲ မသွားနိုင်တော့ချေ။ သည်အခါမျိုးတွင် သူ့ထောင်ချောက်ထဲမှာ မိဖို့ပြင်ပေတော့။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် သူ့သားကောင်များကို ဖမ်းမိနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်မကိုတည်ကြညက် အဖြစ် အသုံးချသည်များ လည်း ရှိတတ်သည်။ ကျွန်မကို တစ်စုံတစ်ယောက်အား တစ်စုံတစ် ရာသွားပြောခိုင်း တတ်သည်လည်း ရှိသည်။ စာရွက်ကလေးတစ်ရွက်တလေသော်လည်း ကောင်း၊ စာအုပ်သော် လည်းကောင်း သွားငှားခိုင်းတတ်တာမျိုးလည်း ရှိသည်။ ဈေးဆိုင် တစ်ခုခု၏ လိပ်စာသော်လည်ကောင်း၊ တစ်စုံတစ်ယောက် ၏ လိပ်စာကိုသော် လည်းကောင်း သွားမေးခိုင်းတတ်တာမျိုးလည်း ရှိသည်။ သဘော ကတော့ သူနှင့်လည်းကျွမ်း၊ ဟိုလူနှင့် လည်းကျွမ်းသည့် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ယောက်၏ လိပ်စာကို သူမေးနေ သည့် သဏ္ဌာန်မျိုး။
သည်လိုနည်းဖြင့် နာမည်ကျော် ထိုသူကောင့်သားကို သူအမိဖမ်းလေတော့သည်။ သတင်းစာ တစ်စောင်စောင်တွင် ဓာတ်ပုံလေးကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါ မြင်လိုက်ရုံမျှဖြင့်လည်း သူ မှတ်မိနေတတ်သည်။ စာရေးဆရာ၊ အနုပညာသည်၊ ဇာတ်လိုက်မင်းသား မင်းသမီး၊ အခြာ နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်၊ ယုတ်စွ အဆုံးသာမန် လူသားပင် ဖြစ်ပါစေ၊ သတင်းစာထဲမှာ တစ်ခါပါရုံမျှဖြင့် နှစ်ပေါင်း ဘယ်လောက်ကြာကြာ သူ မှတ်မိနေ တတ်သည်။
ဘယ်လိုနည်းနှင့်မျှ ကျွန်မ မေ့ပျောက်နိုင်တော့မည် မဟုတ်သာ ထိုနေ့ခင်းက အဖြစ် အပျာက်ကို မနေ့တုန်း ကပင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သ့်အလား ယခုကောင်းစွာ ပြန်လည်အမှတ်ရနေမိပါ သည်။ နှစ်ပေါင်း ဘယ်လောက်ပင် ကြာကြာ ထိုနေ့ခင်းက အဖြစ်အပျက် ကိုတော့ မေ့ပျောက် နိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
ထိုနေ့ခင်းက ဧည့်ခန်းထဲရှိ သူ၏ နာမည်ကျော်ဆိုဖာကြီးမှာ ထိုင်ရင်း နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ဘယ်လို ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရမည်နည်းဟု သူ အကြံယူနေသည်။ လက်ထဲကမှန်ပြောင်းနှင့် သူ့သွားများ ကို သာသာထိတို့ရင်း သူ ဆင်ကြံကြံနေခဲ့သည်။
ထိုနေ့က ထမင်း ကို ကသုတ်ကရက် သူ စားသည်။ နောက်ထပ် ရောက်လာသည့် လူသစ်အလျင် သူက ပြီးနှင့်အောင် စားသည်။ အချိုပွဲကလေးမျှပင် မတည်းတော့။ သို့မှသာ သူ၏ နာမည်ကျော် ဆိုဖာကြီး မှာ သွားရောက်ထိုင်နှင့်ပြီး ဖြစ်မည်။ သည်လိုဆိုလျှင် နောက်လာသောသူသည် သူ့ကို မကျော်ဖြတ် ပဲ ဘယ်နည်းနှင့်မျှ သည်အခန်းထဲက ထွက်ပေါက် မရနိုင်တော့ပြီ။ ရုတ်တရက် ကျွန်မ ဘက်သို့ သူ လှည့်လိုက်သည်။ သူ၏ မျက်လုံး ကျဉ်းကျဉ်ကလေးများကလည်း အရောင် တဖိတ်ဖိတ်တောက် လျက်။
"အပေါ်ထပ် ကို မြန်မြန်ပြေးပြီး ငါ့တူဆီက ရေးလိုက်တဲ့စာကို သွားရှာစမ်း။ မှတ်မိတယ် မဟုတ်လား။ သူတို့ လင်မယား ပျားရည်ဆမ်းခရီးသွားရင်း ငါဆီကို ရေးလိုက်တဲ့စာ လေ။ ဓာတ်ပုံလည်းပါတယ်။ အဲဒီစာ ကို အခုချက်ချင်းသွားယူပေးစမ်း.....။"
အစီအစဉ်များကို သူ ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကျွန်မ သိနားလည်လိုက်ပါပြီ။ သူ မိတ်ဆက်ရာတွင် သူ့တူ ကို လက်နက်ကိရိယာအဖြစ် အသုံးချပေတော့မည်။ အဘွားကြီး၏ စီမံ ကိန်းကြနးထဲမှာ ကျွန်မ ပါဝင် လှုပ်ရှားရသည့် အတွက် စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်မနပါသည်။ သည်လို စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ ရသည်မှာလည်း အကြိမ်ကြိမ်။
ဇွတ်အဓမ္မ ကျူးကျော်မိတ်ဆက်ခြင်းကို ဧည့်သည်သစ်အနေဖြင့် နှစ်ခြိုက်လိမ့်မည် ကားမဟုတ်ပါ။ ဒါကိုတော့ ကျွန်မ၏စိတ်ထဲက အလိုလိုသိနေသလို ရှိပါသည်။ ယနေ့ နေ့လယ်စာ စားနေသောသူကို လှမ်းကြည့် ရင်း ကျွန်မစိတ်ထဲ မှာ ထိုသို့ ခံစားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ဆယ်လလောက်က သူတို့ အကြောင်း သတင်းစာ ထဲမှာ ဟိုးလေးတ ကျော်ပါခဲ့သည်။ နောင်တစ်နေ့တွင် အသုံးတည့်ပါက အသုံချနိုင်ရန် အဘွားကြီးက မှတ်မိအောင် မှတ်ထားလိုက်သေးသည်။ ကျွန်မသည် အသက် ငယ်ရွယ် သည်မှာ မှန်ပါ၏။ အတွေ့အကြုံ နုနယ်သည်မှာ မှန်ပါ၏။ သို့သော်လည်း ဧည့်သည်သစ်သည် သူ၏ တစ်ကိုယ် တော် ဘဝကလေး ပျက်စီးသွားရသည်ကိုတော့ ဝမ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်ရှာပေလိမ့်မည်။
မွန်တီကာလို အပန်းဖြေစခန်းရှိ ကိုတေဒါဇူးဟိုတယ်ကိုမှ ဘာကြောင့် ရွေးချယ်ပြီး သူ ရောက်လာ ရသနည်း ဆိုသည်မှာ ကျွန်မနှင့် မည်သို့မျှ မပတ်သက်ပါ။ သူ့ပြဿနာသည် သူနှင့်သာ သက်ဆိုင် ပါသည်။ သည်အကြောင်းကို မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါ နားလည်ဖို့ကောင်းပါ သည်။ သို့သော်လည်း သူတစ်ပါး အတင်းအဖျင်းပြော ဖို့ သည်လို နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပရောပရည်လုပ်ဖို့ ဟူသည်မှာ အဘွားကြီးအဖို့ အသက်ရှူနေရခြင်းလောက် အရေးကြီးပါ သည်။
မစ္စက်ဗန်ဟောပါ ရှာခိုင်းလိုက်သည့် စာကို သူ့စားပွဲပေါ်ရှိ စာခြင်းထဲမှာ အလွယ်တကူပင် တွေ့ပါသည်။ သည့်နောက် အောက်ထပ်ဧည့်ခန်းထဲသို့ ပြန်ဆင်းမသွားမီ ခဏကြာအောင် ကျွန်မ တုံ့ဆိုင်းဆိုင်း ဖြစ်နေမိပါသည်။ တကယ်ဆိုတော့ ယင်းအပြုအမူသည် အန္တရာယ်မှ လွတ်မြောက်လို လွတ်မြောက်ငြား ရတတ် သမျှ အချိန်ကလေးကို ဧည့်သည်အတွက် ဆွဲပေးထားလိုက်ခြင်း သာလျှင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ တမင်တင်ကူး ကြံရွယ်၍ ပြုလုပ်ခြင်းကား မဟုတ်မိရိုးအမှန်ပါ။
အလုပ်သမားများ အသုံးပြုသည့် နောက်ဘေးလှေကားမှ ဆင်းသွားဝံ့သည့် သတ္တိများ ရလိုက်ချင်စမ်းပါဘိသည်။ သို့မှသာ စားသောက်ခန်းဆီသို့ တစ်ဖက်မှ ကွေ့ဝိုက်သွားနိုင်မည်။ သည်လို သွားမှ ရှင်တော့ ချုံခိုအတိုက်ခံရတော့မယ် ဟု ဧည့်သည်ကို ကြိုတင်သတိပေနိုင်လိမ့်မည်။ စကာပြောဖို့ ဆိုသည် မှာ ကျွန်မအတွက် အခက်ကြီးတစ်ခက် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကျွန်မ မသိ။ တကယ်ဆိုတော့လည်း သည်ကိစ္စ မှာ ကျွန်မအဖို့နေသာသပ လေညာက ဖြစ်ပါသည်။ အဘွားကြီး အမိဖမ်းနေသည်ကို ထိုင်ကြည့်နေရုံ သာ ရှိပါသည်။
ထင်သည့်အတိုင်းပင် ကျွန်မ အချိန်ပိုကြာသွားပါသည်။ ဧည့်ခန်းထဲသို့ ပြန်ရောက် သွားတော့ ဧည့်သည်သစ် သည် စားသောက်ခန်းထဲမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားနှင့် ပြီဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထိုအခါ တွင် လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရတော့မည်ကို အကြောက်ကြီးကြောက်သွားသော အဘွားကြီးသည် ကျွန်မ ယူလာသည့် စာကိုပင် မစောင့်နိုင်တော့ဘဲ ဧည့်သည်သစ်ကို မျက်နှာ ပြောင်တိုက်ပြီး အစိမ်း သက်သက်ကြီး မိတ်ဆက်လိုက်ဟန် တူပါသည်။
ဧည့်သည်သစ် သည် အဘွားကြီးနှင့်အတူ ဆိုဖာပေါ်မှာ ယှဉ်တွဲထိုင်နေပြီ။ သူတို့ဆီသို ကျွန်မ ဖြတ်လျှောက် သွားပြီး စကားတစ်လုံးမျှ မပြောဘဲ အဘွားကြီး၏လက်သို့ စာကို လှမ်း ပေး လိုက်သည်။ ကျွန်မကိုမြင်သည်နှင့် တပြိုင်တည်းဧည့်သည်သစ်က ထိုင်ရာမှထသည်။ မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါး ကမူ သွေးရောင်လွှမ်းနေသည်။ ကျွန်မဘက်သို့ မသိမသာ လက်ဝှေ့ယမ်းပြ ရင်း ကျွန်မ၏ နာမည် ကိုလည်း ဗလုံးပထွေး ပြောနေသည်။
"တို့နဲ့အတူ မစ္စတာ ဒီဝင်းတာ ကော်ဖီသောက်လိမ့်မယ်။ ပန်းကန် အပိုထပ်ပေဖို့ စားပွဲထိုး ဆီမှာ တောင်းလိုက်" ဟု မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါးက ကျွန်မကို လှမ်းပြောပါသည်။ ကျွန်မ၏ အဆင့်အတန်း ဘာဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာဒီဝင်းတား ရိပ်စားမိသွားစေရန် သတိပေးသည့် လေသံမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ သဘော ကတော့ ကျွန်မသည် ဘာမဟုတ်သည့် သူငယ်နှပ်စား ကလေးမျှသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အရေးထားနေဖို့ မလိုကြောင်း၊ သည်စကားဝိုင်းထဲမှာလည်း ကျွန်မကို လူရာသွင်းဖို့ မလိုကြောင်း ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သူ့အပေါ် လူတစ်ဖက်သား အထင်ကြီးစေလိုသည့် အခါတိုင်း သည်လို ပုံမှန်လေသံမျိုး ဖြင့် ကျွန်မကို သူ ဆက်ဆံလေ့ ရှိပါသည်။ လူစိမ်းတစ်ယောက်ယောက်နှင့် ကျွန်မကို မိတ်ဆက်ပေးရသည့် အခါများတွင် လည်း သူ့ကိုယ်သူ အကာအကွယ်ယူပြီးသားနည်းမျိုးကို သုံးစွဲလေ့ရှိပါသည်။ တစ်ခါတုန်းက ကျွန်ကို သူ့သမီး အဖြစ် အထင်ရောက်ခံခဲ့ဖူးပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူရော ကျွန်မရော အနေရအထိုင်ရ ကျပ်ခဲ့ဖူး ပါသည်။ ဧည့်သည်နှင့် ကျွန်မကို သံပြတ်ဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်မကို ဖုတ်လေသည့် ငါးပိ ရှိလေ သည်ဟု သဘောမထားတော့ကြောင်း ပြရာလည်း ရောက်ပါသည်။ သည်လို မိတ်ဆက်ပေး ခြင်းခံရသော ယောက်ျားသားများကတော့ ကြီးမားစွာ စိတ်သက်သာရာရကြပါသည်။ သည်လို သံပြတ်ဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီဆိုသည်နှင့် တစ်ပြိုင်တည်း ကျွန်မအပေါ် ယဉ်ကျေးမှု ထုံးစံ အတိုင်း အရေးတယူ ဖော်ရွေပျူငှာပြုစရာ မလိုတော့ဘဲ ကိုယ့်ကုလားထိုင်မှာကိုယ် သက်တောင့် သက်တာ ထိုင်နေကြတော့သည်။
ထိုအကြောင်း များကြောင့်လည်း ယခု လူသစ်ကြီး ပြုမူပုံကို မြင်ရသောအခါ ကျွန်မအဖို့ အံ့သြတကြီး ဖြစ်ရ ပါတော့သည်။ သူသည် မတ်တတ်ရပ်ရာမှ ပြန်မထိုင်။ ထိုမျှမကသေး။ စာပွဲထိုး ကိုလည်း လက်ရိပ်လှမ်းပြလိုက်သည်။
"ပြောင်းပြန်ပဲ လုပ်ပါရစေတော့ဗျာ ..." ဟု သူက မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါးကို လှမ်းပြော သည်။ "ခင်ဗျားတို့ နှစ်ယောက်စလုံး ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ ကော်ဖီ သုံးဆောင်ကြပါ" ဟု ဆက်တိုက်ပြောချလိုက်သည်။ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ ကို ကျွန်မ မသိလိုက်ရမီမှာပင် ကျွန်မ ထိုင်နေကျ ကုလားထိုင်ကြမ်းကြမ်းကြီးပေါ် တွင် သူက အမြိန့်သား ထိုင်လို့။ ကျွန်မကမူ မစ္စက်ဗန်ဟောပါးနှင့်အတူ ဆိုဖာပေါ်မှာ ယှဉ်လျက် သားထိုင်လို့။
အဘွားကြီး စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်သွားပုံရပါသည်။ သည်လို နေရာယူကြဖို့ သူ ရည်မှန်းထားပုံ မရပါ။ သို့သော် လည်း ချက်ချင်း မျက်နှာပိုးပြန်သပ်လိုက်သည်။ စားပွဲနှင့် ကျွန်မကြားသို့ သူ့ခန္ဓာကိုယ် အတ္တဘောကြီး ကို အတင်းတိုးဝင်လိုက်သည်။ တစ်ဆက်တည်း သူ့လက်ထဲကစာကို လှုပ်ကာ ယမ်းကာဖြင့် စိတ်အား ထက်သန်စွာ ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာ ပြောလေတော့သည်။
"စားသောက်ခန်းထဲကို ရှင် ၀င်လာတာနဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း ကျွန်မ ချက်ချင်း မှတ်မိလိုက် တယ်။ သိလား ... ပြီးတော့ ကျွန်မ စဉ်းစားလိုက်မိတယ်။ "ဘယ်နှယ့် ... ဟောဟိုမှာ ဘီလီရဲ့ သူငယ်ချင်း မစ္စတာဒီဝင်းတား ပါလား ... ဘီလီနဲ့ သူ့အမျိုးသမီး ပျားရည်ဆမ်း ခရီးထွက်ကြ တုန်းက ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ သူ့ကို ပြလိုက်ဦးမှပဲ" လို့ စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတယ်။ ဟောဒီမှာ သူတို့ပုံတွေ ကြည့်ပါဦး။ ဟောဒါက ဘီလီ ရဲ့ အမျိုးသမီး ဒိုရာလေ ... ချစ်စရာ မကောင်းဘူး လား။ ခါးကလေးက သိမ်သိမ်ကလေး။ မျက်လုံးကြီးတွေ က ၀ိုင်းဝိုင်းစက်စက်ကြီးတွေ။ ဟောဒီ ပုံကတော့ ပမ်းဘိခ်ျ ပင်လယ်ကမ်းခြေ မှာ နေပူဆာလှုံနေကြတာပေါ့။ ဘီလီတို့များ ဒိုရာကို ချစ်လိုက်တာ တုန်နေတာပဲ။ စဉ်းစား သာကြည့်ပါတော့ရှင် ... ကလားရစ်ဟိုတယ်မှာ ဧည့်ခံပွဲ ကြီးတစ်ပွဲ ဘီလီ တည်ခင်းတုန်းက ဒိုရာကို သူ တွေ့ခဲ့ တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ ဧည့်ခံပွဲ မှာ ရှင့်ကို ပထမဦးဆုံး ကျွန်မ စတွေ့ဖူးတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မလို အဘွားကြီးတစ်ယောက်ကို တော့ ရှင် အမှတ်ရမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်မ ပြောရဲ ပါတယ်ရှင်။ ဟင်း ဟင်း ဟင်း"
အဘွားကြီး သည် မျက်စကို ချီကာချီကာ သွာများကို ဖြီးကာဖြီးကာဖြင့် ပြောဆိုနေခြင်း ဖြစ်သည်။
"ဒီလိုလဲ မဟုတ်ပါဘူး...ခင်းဗျားကို ကျွန်နော် ကောင်းကောင်းမှတ်မိခဲ့ပါတယ် ...." ဟု မစ္စတာဒီဝင်းတာ က ပြန်ပြောသည်။ သူတို့နှစ်ယောက် ပထမဦးဆုံး စတင် တွေ့ကြုံခဲ့ကြသည့် အကြောင်း အဘွားကြီး ပြန်ပြောင်း စကားကြောမရှည်မီ ဒီဝင်းတားက စီးကရက်ဗူးထုတ်ပြီး အဘွားကြီးကို တည်သည်။ တစ်ဆက်တည်း စီကရက်မီးညှိပေးနေခြင်းအားဖြင့် အဘွားကြီး၏ ပါးစပ်ကို ခဏတော့ ပိတ်ထား လိုက်နိုင်သည်။ "ကျွန်တော်တော့ ပမ်းဘိခ်ျ ပင်လယ်ကမ်း ခြေကို" ဟု ဒီဝင်းတားက စကား ဆက်ရင်း မီးခြစ်ဆံမှ မီိကုို မှုတ်ငြိမ်လိုက်သည်။ သူ့ကို လှစ်ကနဲ လှမ်းကြည့်လိုက်မိပါသည်။ ဖလော်ရီဒါ ကမ်းခြေလို နေရာမျိုး၏ နောက်ခံမြင်ကွင်းနှင့် သူ့ရုပ်လွှာမှာ ပနံစာလိမ့်မည်ဟု ကျွန်မမထင်။
သူ့ရုပ်လွှာ သည် ၁၅ ရာစုခောတ်က မြို့ရိုးပတ်လည်ဝိုင်းထားသော မြို့မျိုးနှင့်သာ လိုက်ဖက်ညီထွေ ရှိပေလိမ့်မည် ဟု ကျွန်မထင်ပါသည်။ ကျောက်တုံးများ ခင်းထားသည့် လမ်းကလေးတွေ့ ကျဉ်းကျဉ်း ကလေး။ အဆောက်အအုံတို့၏ အမိုးများက စူးစူးချွန်ချွန်။ မြို့သူ မြို့သားတို့၏ ဖိနပ်များက ဦးချွန်ချွန်။ ပြီးတော့ ဇာကျဲခြေအိတ်များကိုလည်း ဝတ်ဆင်ထားကြ သေးသည်။ ယင်းသို့သော အရပ်မျိုး မှာသာ သူ့ရုပ်လွှာနှင့် ကိုက်ညီပေလိမ့်မည်။ သူ့မျက်နှာပေါက် က ညှို့ယူဖမ်းစားနီုင်သည့် မျာက်နှာပေါက် မျိုး။ ထိခိုက်ခံစားလွယ်သည့်ဟန် ပန် အမူအရာ။ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်က ရှေးရိုးခပ်ဆန်ဆန်ပင်။ ဘယ်လို ရှေးရိုးဆန် သည်ကိုတော့ ကျွန်မ ရှင်းမပြတတ်ပါ။
သူ့ကို ကြည့်နေရင်း ပန်ချီပြခန်းတစ်ခုတွင် ကျွန်မ တွေ့ခဲ့ဖူးသည့် ပန်ချီကားတစ်ချပ်ကို ပြေး၍ အမှတ်ရ မိပါသည်။ ဘယ်မှာတွေ့ခဲ့သည် ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်မ အစဖော်၍ မရတော့ပါ။ ယင်းပန်းချီးကားသည် "မကြားမသိဖူးသော လူကြီးမင်း" အမည်ရှိ လူပုံတူ ပန်းချီကား ဖြစ်ပါသည်။ ယခု မစ်္စတာ ဒီဝင်းတားကို အနက်ရောင်းကွမ်းရိုးစင်း ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီး လည်ပင်း နှင့် လက်ကောက်ဝတ်တွင် ဇာနားများ တပ်ပေးလိုက်မည် ဆိုပါက ကျွန်မတို့၏ ယနေ့ ကမ္ဘာသစ်ကြီးကို ပန်းချီကားဘောင်ထဲမှ တစ်ဆင့် ရှေးပဝေသဏီခေတ်မှနေ၍ ဒီဝင်းတား ကိုယ်တိုင် ငုံ့ကြည့်နေသည်နှင့် တူပေလိမ့်မည်ဟု ကျွန်မ အတွေးပေါက် မိပါသည်။
ထိုရှေးခေတ်သည်ကား သူရဲကောင်းယောက်ျားတို့သည် ဝတ်ရုံကြီးများကို ဝတ်ဆင်ကာ ညအခါမှာ လမ်းထွက်လေ့ ရှိကြသည်။ အိုမင်းသော တံခါးပေါက်ကြီးများ၏ အောက် မည်းမှောင်သော အကျဉ်းထောင်များ ကိုလည်း ကျော်လွန်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြမည်။ အမှောင်ထဲမှာ တီးတိုးစကားသံ များကိုလည်း ကြားခဲ့ကြရမည်။ ဓားသွားက တဖွေးဖွေးနှင့် ဓားရေးလည်း ပြခဲကြရမည်။ ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာ မှုများလည်း ကြီးစိုးခဲ့မည်။ ဒီဝင်းတား၏ရုပ်လွှာ ကား ထိုခေတ်၊ ထိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးနှင့်သာ လိုက်လျော ညီထွေ ရှိပေလိမ့်မည်။
"မကြားမသိဖူးသော လူကြီးမင်း" ပုံတူ ပန်းချီကားရေးဆွဲသူ ပန်းချီဆရာ၏ အမည်ကို ကျွန်မ မှတ်မိချင်စမ်းလှပါ၏။ ပန်းချီးပြခန်း၏ ထောင့်တစ်ထောင့်မှာ ထိုပန်းချီကားကို ချိတ်ဆွဲထားခဲ့သည်။ ပန်းချီကားပေါ် မှ မျက်လုံးများသည် ကြည့်သူနောက်သို့ ညိုမောင်းသော ဘောင်ထဲမှ တစ်ဆင့် အမြဲတစေ လိုက်နေလေ့ ရှိသည်။
သူတို့နှစ်ယောက် စကားကောင်းနေကြသည် မှန်သော်လည်း ဘာအကြောင်းပြော နေကြသည်ကို ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်း မျှပင် ကျွန်မ မသိတော့ပါ။
"မဟုတ်ပါဘူး နှစ် နှစ်ဆယ် မကြာသေးပါဘူး။ အဲဒါမျိုးကလဲ ဘယ်တော့မှ ကျွန်တော့် ကို စိတ်ပျက် သွားအောင် မတတ်နိုင်ပါဘူး" စသည်ဖြင့် မစ္စတာ ဒီဝင်းတား ပြောလိုက်သည့် စကားသံကို ကြားရ ပါသည်။ မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါး၏ ရွှင်လန်းအားရစွာ ရယ်မောသံကိုလည်း ကြားရပါသည်။
"မန်ဒါလေစံအိမ်ကြီးမျိုးသာ ဘီလီတစ်ယောက် ပိုင်မယ်ဆိုရင် ပမ်းဘိခ်ျလို နေရာမျိုး ကို သွားပြီး ဘယ်မှာ သဝေထိုးပါလိမ့်မယ် ရှင်ရယ်... မန်ဒါလေစံအိမ်ကြီးဟာ နတ်ဘုံနတ်နန်း ကြီးအတိုင်း ပါပဲလို့ ပြောသံကြားဖူးတယ်။ အင်း.... နတ်ဘုံနတ်နန်းဆိုတာကလွဲပြီး တခြား အမည်ပေးစရာလဲ မရှိတော့ ပါဘူးလေ"
မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါးက စကားကို ခဏနားလိုက်သည်။ သူ ပြုံးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပုံရပါ သည်။ သို့သော် လည်း ဒီဝင်းတားက စီးကရက်ကိုသာ ဖွာမြဲဖွာနေသည်။ ပိုးမျှင်လောက်သေး ငယ်သည့် အရေးအကြောင်း ကလေးတစ်ခု သူ့မျက်လုံးနှစ်ခု စပ်ကြားတွင် ရှိနေသည်ကို ကျွန်မ သတိထားလိုက်သည်။
"မန်ဒါလေစံအိမ်ကြီးရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ကျွန်မ မြင်ဖူးပါတယ်၊ အမှန်ပြောတာပါ။ သိပ်ကို ကြီးကျယ် ခမ်းနာပါပေတယ်။ ကျွန်မရဲ့ တူတော်မောင် ဘီလီ တစ်ခါပြောဖူးတာကို အမှတ်မိသေးတော့တယ်။ သူက မန်ဒါလေ စံအိမ်ကြီးဟာ တခြား ဘယ်စံအိမ်နဲ့မှ မတူအောင် လှပလွန်းပါတယ်တဲ့။ ဒီလိုစံအိမ်ကြီးမျိုးကို ရှင်ကျောခိုင်း ထွက်လာနိုင်တာဖြင့် ကျွန်မအဖို့ အံ့သြကုန်နိုင်ဖွယ်ပါပဲ" ဟု ဇွတ် ပင် မြှောက်လုံး တွေ ပေးပြန် သည်။
မစ္စတာ ဒီဝင်းတားကား တုံဏှိဘာဝေ ဆိတ်ဆိတ်နေမြဲပင်။ သူ့ တိတ်ဆိတ်မှု သည် ဘေးလူများ ကိုပါ နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်စေလေတော့သည်။ သို့သော်လည်း မစ္စက်ဗန်ဟော့ ပါးကကား အလိုက်ကန်းဆိုးမသိ။ ကြိုးလွတ်ထွက်သွားသည့် ဆိတ်ရိုင်းတစ်ကောင်က သီးသန့် သတ်မှတ် ထားသော နေရာပေါ်သို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ကာ ခုန်ပေါက်မြူးတူးနေဘိ သကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်မ မျက်နှာပေါ်မှာ ရှက်သွေးများ ဖြန်းလာပြီဟု ကျွန်မ ခံစားလိုက်ရပါသည်။ တကယ်ဆိုတော့ မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါး သည် ကျွန်မ၏ အလုပ်ရှင်ဖြစ်နေ လေရာ ကျွန်မပါ သူနှင့် တဂိုဏ်းတည်း လို ဖြစ်နေတော့သည်။
"ရှင်တို့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဟာ ကိုယ်အိမ်အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အတူတူ ချည်းပါပဲ" ဟု မစ္စက်ဗန်ဟောပါးက ဆက်ပြောပြန်သည်။ သူ့ အသံကလည်း စောစောကထက် ပိုလို့ပင် ကျယ်လောင် လာသည်။ "ကိုယ်အိမ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂုဏ်မယူချင်သလို မာန်မဝင်ချင် သလိုချည့်ပဲ။ ပြီးတော့ ဂီတ ခန်းမဆောင်ကြီး တစ်ဆောင်လေ မန်ဒါလေစံအိမ်ကြီးမှာ ရှိတယ် ဆို၊ အလွန်အဖိုးတန်တဲ့ ပုံတူပန်းချီကားတွေလဲ ရှိတယ်မဟုတ်လား" ထိုသို့ပြောရင်း ကျွန်မဘက်သို့ လှည့်ကာ ရှင်းလင်းချက် ထုတ်ပြနေပြန် ပါသည်။
"မစ္စတာဒီဝင်းတားဟာ အင်မတန်သိုသိပ်လွန်းတယ်။ ဒီကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ငါ့ကို သူ ဝန်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အင်မတန် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အဲဒီ မန်ဒါလေစံအိမ်ကြီးကို မစ္စတာဒီဝင်းတားတို့ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ကတည်းက ပိုင်ခဲ့ကြတာဟာ နော်မန်လူမျိုးတွေ ဗြိတိန်နိုင်ငံကို တိုက်ခိုက် သိမ်းယူ တဲ့ ခေတ်ကတည်းကလို့ဆိုတယ်။ ဂီတခန်းဆောင်ဟာလဲ အဖိုးအလွန်ထိုက်တန်သတဲ့။ ဒါထက် မစ္စတာဒီဝင်းတား.... ရှင်ရဲ့ ဘိုးဘေးဘီဘင်များဟာ မင်းဆွေမင်းမျိုးများကို ဖိတ်ပြီး စံအိမ်ကြီးမှာ ဧည့်ခံဖျော်ဖြေခဲ့ကြတယ် ဆို ဟုတ်လား"
မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါး ၏ အကြောင်းကို အတွင်းသိ အစင်းသိဖြစ်သော ကျွန်မသည်ပင်လျှင် ယခုပြောနေသော မြှောက်လုံး ပင့်လုံးများကို နားမခံသာအောင် ဖြစ်လာပါ၏။ သို့သော်လည်း ရုတ်တရက် ပြန်ပြီး နှုတ်ထိုးလိုက်သည့် မစ္စတာဒီဝင်းတာ၏စကားကို မမျှော်လင့်ဘဲ ကြားလိုက်ရပါသည်။
"အီသယ်ရက်ဘုရင် လက်ထက်ကစပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ မဖိတ်တော့ပါဘူး ခင်ဗျာ၊ ဘယ်အခါ မှ အဆင့်သင့်မဖြစ်တဲ့ ဘုရင်လေ... ကျွန်တော်တို့ အိမ်ကြီးကို ဝင်ထွက် သွားလာနေတုန်း အဲဒီနာမည် တစ်လုံး ရသွားတော့တာပဲ။ ညစာစားပွဲဆိုရင် ဘယ်တော့မှ အချိန်မီ မရောက်ဘူး၊ အမြဲ နောက်ကျတော့ တာပဲ။"
မစ္စဗန်ဟော့ပါး သည် သည်လို ပိုးစိုးပက်စက် အပြောခံထိုက်သော အမျိုးသမီး ဖြစ်ပါ သည်။ အဘွားကြီး မျက်နှာ ပျက်သွားလိမ့်မည်ဟု ကျွန်မထင်မိပါသည်။ သို့သော်လည်း ထင်သလိုဖြစ်မလာပါ။ မစ္စတာဒီဝင်တား ၏ စကားလုံးများသည် သူ့အဖို့ ဘာမျှ နာကျည်းစရာ မကောင်းသလို ရှိပါသည်။ ကျွန်မ သာလျှင် ကြားကနေပြီး သူ့အစား နာသာခံခက် ဖြစ်ရပါတော့ သည်။
"သြော်... ဒီလိုလား ကျွန်မဖြင့် မသိပါဘူရှင်။ ရာဇဝင်ဘာသာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျွန်မက အားနည်း တယ်လေ။ အင်္ဂလန်ဘုရင်တွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကျွန်မအဖို့တော့ အားလုံး ရှုပ်ထွေးကုန်တော့တာပဲ။ စိတ်ဝင်စား စရာ ဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းပေါ့လေ။ ကျွန်မ သမီးဆီကို စာရေးပြီး ပြောပြရဦးမယ်။ သမီးက တကယ်ကို ပညာတတ်ကြီးရှင့်"
ခဏမျှ စကားမျှင်ပြတ်သွားကြပြန်သည်။ ကျွန်မ၏ တစ်မျက်နှာလုံး ရှက်သွေးများဖြင့် မွှန်ထူနေပြီ။ ကျွန်မ ၏ အသက်အရွယ် အလွန်တရာ ငယ်နုသေးခြင်းကလည်း တစ်ခက်ပင်။ အကယ်၍များ ကျွန်မ၏ အသက်အရွယ်ကြီးရင်နေမည်ဆိုပါက မစ္စတာဒီဝင်းတားနှင့် မျက်လုံး ချင်းဆိုကြည့်ကာ ပြုံးပြ မိပေလိမ့်မည်။ အဘွားကြီး၏ မယုံကြည်နိုင်စရာ ကောင်းလောက် အောင် မပြောတတ် မဆိုတတ် ဖြစ်နေသည်ကို မစ္စတာ ဒီဝင်းတားကဲ့သို့ပင် ကျွန်မလည်း သိရှိ သဘောပေါက်ပါကြောင်း မျက်ရိပ်ပြမိပေ လိမ့်မည်။ ယခုတော့ သည်လို မဟုတ်ချေပြီ။ ကျွန်မ၏ အသက်အရွယ် ငယ်နုခြင်းကြောင့် အဘွားကြီး ၏ အမြီးအမောက်မတည့်သော စကားများကို နားမခံသာေ အာင် ဖြစ် ကာ ခေါင်းမဖော်ဝံ့တော့ ဘဲ အရှက်ကြီးရှက်နေမိတော့ သည်။
ကျွန်မ စိတ်ဒုက္ခရောက်နေသည်ကို သူ သဘောပေါက်နားလည်သွားသည်ဟု ထင်ပါ သည်။ မစ္စတာ ဒီဝင်းတား က ကျွန်မဘက်သို့ သူ့ကိုယ်ကို ကိုင်ပြီး ကော်ဖီထပ်ယူဦးမည်လားဟု မေးသည်။ သူ့လေသံက အလွန်တရာ နူးညံ့သိမ်မွေ့ပါသည်။ ကျွန်မက မယူလိုတော့ကြောင်း ငြင်းပြီး ခေါင်းခါပြပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်မကို သူ စိုက်ကြည့်နေမြဲ ကြည့်နေပါသည်။ သူ့ မျက်လုံးများက တစ်စုံတရာကို နားမလည် သလို၊ တစ်စုံတစ်ရာကို ပြန်လည်စဉ်းစားနေသလို ထင်ရပါသည်။ အဘွားကြီးနှင့် ဘာမျှမခြာ။ အတူတူ နဲ့ အနူနူပဲဟု တွေးကောင်းတွေးနေပါ လိမ့်မည်။
"မွန်တီကာလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို သဘောရပါသလဲ။ ဘာမှ မထူဆန်းဘူးလို့ရော ထင်မိသလား" ဟု မစ္စတာဒီဝင်းတား က မေးပါသည်။ သည်မေးခွန်း မှာ အဘွားကြီးကိုသာမက ကျွန်မကို ပါမေးသည့် မေးခွန်းဖြစ်နေသည်။ သဘောကတော့ ကျွန်မကိုပါ စကားဝိုင်းထဲသို့ ဆွဲသွင်း လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မအဖို့ အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေသို့ ရောက်အောင် တွန်းပို့ လိုက်သော မေးခွန်းမျိုးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မသည် ကျောင်းမှ ထွက်လာခါစ မနူးမနပ် ကောင်မလေးတစ် ယောက်၊ ကျောင်းထွက်စမို့ တံတောင်ဆစ်တွင် စားပွဲခုံနှင့် ပွန်ရာများပင် မပျောက်သေးသော ကျောင်းထွက်စ အသစ်စက်စက်ကလေး တစ်ယောက် အဖြစ် မစ္စတာဒီဝင်းတား က မြင်နေပုံပေါက် ပါ သည်။
မွန်တီကာလို သည် အတုအယောင်တွေများသည်ဟု ထင်မိကြောင်း ထစ်အထစ်အနှင့် ကျွန်မ ပြန်ပြောမိပါသည်။ ကျွန်မ၏ စကားမဆုံးမီမှာပင် မစ္စက်ဗန်ဟောပါးက ကြားဝင်ဖြတ် တောက် ပစ်လိုက်ပါသည်။
"ဒီကလေးမ ကတော့ ပျက်စီးနေရှာပြီလေ မစ္စတာဒီဝင်းတားရဲ့။ သူ့အဖို့မှာ အဲဒါကလဲ တစ်ဒုက္ခပေါ့။ သူတို့အရွယ် တခြားမိန်ကလေးတွေများ မွန်တီကာလိုကိုသာ ကြည့်ခွင့်မြင့်ခွင့် ရမယ်ဆိုရင် သူတို့မျက်လုံး ကိုတောင် ထုတ်ပေးပါရဲ့"
"အဲဒီလို မျက်လုံးထုတ်ပေးရင် သူတို့ကြည့်ချင်မြင်ချင်လွန်းတဲ့ မွန်တီကာလိုကို ကြည့်ခွင့် မြင်ခွင့် ဆုံးရှုံး မသွားပေဘူးလား ခင်ဗျာ" ဟု အပြုံးကလေးဖြင့် သူက ပြန်ပြောသည်။
မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါး ကတော့ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို တွန့်လိုက်သည်။ စီးကရက်မီးခိုးများကို လည်း အလိပ်လိုက် မှုတ်ထုတ်နေသည်။ မစ္စတာဒီဝင်းတား၏ ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပါယ် ကို သူ သဘောပေါက် နားလည်လိုက်ပုံ မရပါ။
"ကျွန်မကတော့ မွန်တီကာလိုကို ခွဲနိုင်ဖို့ ခပ်ခက်ခက်ပါရှင်။ အင်္ဂလိပ်ဆောင်းရာသီရဲ့ ဒဏ်ကို ကျွန်မ မခံနိုင် ဘူး။ ကျွန်မရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကလဲ အဲဒီဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိ လောက်အောင် မကောင်းဘူး။ ဒါထက် စကားမစပ်… ရှင် ဘာဖြစ်လို့ ဒီကို ရောက်လာတာလဲ။ ရှင်ဟာဒီနေရာကို လာနေကျ လူတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှယ်မီကစားဖို့ လာတာ လား။ ဒါမှ မဟုတ် ဂေါက်သီးရိုက်ဖို့ ဂေါက်တံတွေရော ယူခဲ့သလား" ဟု ဆက်မေးနေ ပြန်သည်။
"ဘာမှ မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူးဗျာ။ အိမ်ကနေပြီး မသောကမျော ထွက်လာခဲ့တာပါ"
သူ့စကား က သူ့ကို ပြန်ပြီး တစ်စံတစ်ရာကို အမှတ်ရစေဟန်တူပါသည်။ သူ့မျက်နှာပေါ်မှာ အုံ့မှိုင်းညို့ဆိုင်း သွားပါသည်။ မသိမသာလည်း မျက်မှောင်ကုတ်လိုက် ပြန်ပါသည်။ အဘွားကြီး ကတော့ အလိုက်ကမ်းဆိုး မသိဘဲ စကားဆက်နေပြန်ပါသည်။
"မန်ဒါလေစံအိမ်ကြီးတစ်ဝိုက်မှာ ကျနေတဲ့ နှင့်ထုကြီးနဲ့တော့ ရှင်လွဲရပြီပေါ့။ ဒါကလဲ တစ် ခြားကိစ္စ ပါလေ။ အနောက်နိုင်ငံ ရဲ့ နွေဦးရာသီဟာ နှစ်မြို့စရာကောင်ပေမှာပဲနော်"
မစ္စတာဒီဝင်းတား က ဆေးလိပ်ပြာခံခွက်ကို လှမ်းဆွဲယူကာ စီးကရက်တိုကို ထိုးခြေနေ သည်။ သူ့မျက်လုံးများထဲမှာ နူးညံ့သိမ်မွေ့သည့် အရိပ်လက္ခဏာကလေးတစ်ခု ယှက်သမ်း သွားသည်ကို ကျွန်မ သတိထားလိုက်မိပါသည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပင် ကျွန်မသည် ကိုယ်နှင့်မဆိုင်သော တစ်ပါးသူ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စကို သတိထားကြည့်မိနေပြီဖြစ် ကြောင်းလည်း ခံစားလိုက်ရပါသည်။
"ဟုတ်ပါတယ်။မန်ဒါလေ မှာ အလှဆုံးအချိန်ပါပဲ" ဟု သူက တိုတောင်းစွာ ပြန် ပြောသည်။
တိတ်ဆိတ်ခြင်းက ခဏကြာအောင် ကျွန်မတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျရောက် လာပြန်သည်။ ယင်း တိတ်ဆိတ်ခြင်းကလည်း ကျွန်မတို့ကို မအီမသာ ဖြစ်စေပြန်ပါသည်။ သူ့ကို ကျွန်မ တိတ်တခိုးကလေး ကြည့်လိုက်မိပါသည်။ သည်လိုကြည့်လိုက်မိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်တည်း ကျွန်မ မြင်ဖူးခဲ့သော ပန်းချီကားထဲက "မကြားမသိဖူးသော လူကြီးမင်း" ကို ပိုလို့ သတိရလာသည်။ ခန်းကူးစင်္ကြံန်များ တွင် မှောင်ရိပ်ခိုကာ သွားလာနေသည့် ၁၅ ရာစုခေတ်လူသားများ၏ ရုပ်သွင်ကို ထင်ယောင်မြင်ယောင်ဖြစ် လာသည်။ ထိုသို့ အတွေး နယ်ကျွံနေစဉ်မှာပင် မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါး၏ အသံက ကျွန်မ၏ အတွေးအိပ်မက်ကို လျှပ်စစ် ခေါင်းလောင်းသံက ဖျက်ဆီးသလို ဖျက်ဆီးပစ် လိုက်ပါတော့ သည်။
"ဒီမှာရှိနေကြတဲ့ လူတော်တော်များများကို ရှင်သိတယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ အခုလို ဆောင်းရာသီမှာ မွန်တီကာလိုဟာ အင်မတန် ငြီးငွေ့စရာ ကောင်းတယ်လို့တော့ ပြောရမှာပဲ။ အထက်တန်းလွှာက နာမည်ကြီးတွေ လဲ အရောက်အပေါက်နည်းနေတယ်။ မစ်ဒယ်လ်ဆက် မြို့စားကြီးကတော့ သူ့ရဲ့ ဇိမ်ခံရွက် သင်္ဘောကြီးနဲ့ ဒီကိုရောက်နေလေ့ရဲ့။ အခုအချိန်အထိ သင်္ဘောပေါ်ကိုတော့ ကျွန်မ မရောက်သေး ဘူးပေါ့လေ။ ဟဲ…ဟဲ…."
ကျွန်မ သိရသလောက်ကတော့ နောင်လည်း သင်္ဘောပေါ်သို့ ဘယ်တော့မှ သူ မရောက် ခဲ့ပါ။
"မစ်ဒယ်လ်ဆက်မြို့စားကြီး ကတော်ကို ရှင်သိမှာပေါ့နော်" ဟု သူက စကားဆက်ပြန် သည်။ "အင်မတန် ချစ်စရာ အင်မတန်စွဲမက်စရာကောင်းပေတာပဲ။ သူ့ရဲ့ ဒုတိယကလေးဟာ မြို့စားကြီးနဲ့ ရတာ မဟုတ်ဘူး လို့ ပတ်ဝန်းကျင်က ဝိုင်းပြောနေကြတယ်။ ကျွန်မတော့ မယုံကြည် နိုင်ပါဘူးရှင်။
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ယောက်ဟာ ချောမောလှပလာပြီ၊ ချစ်စရာကောင်းလာပြီ ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာမျိုးက ဒီလိုပဲ အမနာပ အတင်းအဖျင်းတွေ ပြောကြတော့တာပဲ။ မဟုတ်ဘူး လား။ မြို့စားကြီးကတော်ကလဲ တကယ့်ကို ချစ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါနဲ့ တစ်ခုပြော စမ်းပါအုံး။ ကက်စ်တန် နဲ့ ဟစ်လာ့တို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေ ဖြစ်နေကြတယ်ဆို ဒါ အမှန်ပဲလား"
မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါးက ရှုပ်ထွေးပွေလီလှသော အတင်းအဖျင်းစကားများကို ဆက်တိုက် ပြောနေတော့ သည်။ သူပြောနေသော နာမည်များနှင့် မစ္စတာဒီဝင်းတားတို့ ကျွမ်းဝင်ခြင်း ရှိပုံမရ သည်ကိုလည်း သူ အကဲခတ်မိဟန် မတူ။ သိမ်ဖျင်းသော အတင်းစကားများကြောင့် မစ္စတာ ဒီဝင်းတား၏ အမူအရာ မှာ စောစောကထက် ပိုမိုအေးစက်လာပြီး ရေငုံနှုတ်ပိတ် လုပ်နေသည်ကို လည်း သူ ရိပ်မိဟန်မတူ။
မစ္စတာဒီဝင်းတားကမူ စကားလည်း ဝင်မထောက်။ အဘွားကြီး လေကြောပြတ်စေရန် အတွက် သူ့လက်မှ လက်ပတ်နာရီ ကိုပင် မြှောက်မကြည့်။ အတတ်နိုင်ဆုံး သူ ဣနြေ္ဒဆည်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
စောစောတုန်း က ကျွန်မ၏ ရှေ့မှောက်မှာပင် အဘွားကြီးကို သူ အရူးလုပ်ခဲ့ပြီ။ ထို့ကြောင့်လည်း သူ သိက္ခာ ထပ်မကျရလေအောင် အစွမ်းကုန်သူ ဣနြေ္ဒဆည်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ သည်လို ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲမှာ သူ ဒုက္ခရောက်နေသည်ကို ဝင်ရောက်ကယ်တင်ပေးလိုက်သူကား ဟိုတယ်မှ လက်တိုလက်တောင်း ခိုင်းစေ သည့် လူငယ်လေးပင် ဖြစ်သည်။ အဝတ်ချုပ်သည့် အမျိုးသမီးက မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါးကို အခန်းတွင်း မှ စောင့်နေကြောင်း လာရောက်အကြောင်းကြား ခြင်းဖြစ်သည်။
မစ္စတာဒီဝင်းတား က ထိုင်ရာမှ ရုတ်တရက် ထလိုက်သည်။ ကုလားထိုင်လည်း နောက်ဘက်သို့ တွန်းဖယ် ပစ်လိုက်သည်။
"ကျွန်တော့်ကြောင့်တော့ အနှောက်အယှက် မဖြစ်ပါစေနဲ့ခင်ဗျာ၊ ဖက်ရှင်ဆန်း တွေဟာ ဒီကနေ့ ခောတ်မှာ အပြောင်းအလဲမြန်လွန်းပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အပေါ်ထပ်ကို ရောက်သွားတဲ့ အချိန် မှာ ကို နောက်ထပ် ဖက်ရှင်ဆန်းက ထပ်ပေါ်လာပြီး အခု ဖက်ရှင်က ခောတ်နောက်ကျသွားနိုင်ပါ တယ်" ဟု သူက ပြောသည်။
မစ္စတာဒီဝင်းတား ပစ်လွှတ်လိုက်သည့် ထိုမြှားတစ်စင်းသည်လည်း အဘွားကြီးကို ထိမှန်ပုံမရ။ အပျော်အပျက်ပြော သည့် စကားလုံးအဖြစ်ပင် သဘောပေါက်လက်ခံ လိုက်ပုံ ရသည်။
"ရှင်နဲ့ အခုလို ကြုံကြိုက်ရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာ ရှင်။ ကျွန်မသတ္တိ ကောင်းကောင်းနဲ့ ရှင့် ကို စကားဝင်ပြောမိပေလို့ အခုလို စကားလက်ဆုံကျသွားတာပါ။ ကျွန်မအခန်းကိုလဲ တစ်ခါ တစ်ခေါက်လောက် ကြွပြီး တစ်ခုခုသုံးဆောင်ပါဦး။ မနက်ဖြန် ညနေဆိုရင် ဧည့်သည် တစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက် လာကောင်း ပါရဲ့။ ဒီတော့ ကျွန်မတို့နဲ့ လာပြီး ဝိုင်း လိုက်ပါဦးလား ရှင်" ဟု ဓာတ်လှေကားသို့အသွား စကားဆက် ပြန်သည်။
တစ်ဖက်သို့ ကျွန်မ မျက်နှာလွဲပစ်လိုက်မိသည်။ သို့မှသာ မစ္စတာဒီဝင်းတား၏ အကြောင်းရှာငြင်းဆန် မည့် အမူအရာကို မမြင်မတွေ့ရဘဲ ရှိပေလိမ့်မည်။
"ဝမ်းနည်းပါတယ်ဗျာ။ မနက်ဖြန်တော့ ဆော့စ်ပင်လယ်ကို ကျွန်တော်သွားစရာ ရှိနေပါတယ် ဘယ်အချိန်ပြန်ရောက်မယ် ဆိုတာ မသေချာသေးပါဘူး"
မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါး သည် စိတ်မပါ့တပါဖြင့် ထိုအကြောင်းကို လက်လျှော့ လိုက်ရတော့သည်။ ပြီးတော့ ဓာတ်လှေကား အဝင်ဝမှာ ကျွန်မတို့ယောင်ချာချာ ဖြစ်နေကြ ပြန်သည်။
"ရှင့်ကို ဟိုတယ်က လူတွေ အခန်းကောင်းကောင်းတော့ ပေးကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ ထင်ပါတယ်။ဒီမှာကလဲ လူတစ်ဝက်လောက်ပဲ ရှိသေးတော့ အခန်းလွတ်တွေက အများကြီး မဟုတ်လား။ တကယ်လို စိတ်တိုင်းမကျရင်တော့ များများသာ နားပူနားဆာ လုပ်ပေးပေ တော့။ ရှင့် အဝတ်အစားသေတ္တာတွေ လဲ ဖွင့်ပြီး နေရာချထားမပေးရသေးဘူး မဟုတ်လား"
မမေးသင့်သော စကားကို မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါးက မေးလိုက်ပြန်ချေသည်။ သူစိမ်း ယောက်ျား သားတစ်ယောက် ၏ အဝတ်အစားများနေရာချထားပြီး မပြီးကို သူစိမ်းအမျိုးသမီး တစ်ယောက်က ဝင်ရောက် စပ်စုခြင်းမှာ အလွန်တရာ မလျော်ကန်သည့် အရာပင်ဖြစ် ချေသည်။ မစ္စတာဒီဝင်းတား ၏ မျက်နှာပေါ် တွင် လှစ်ကနဲ အမူအရာပြောင်းသွားသည်ကို ကျွန်မ မြင်လိုက်ရသည်။
"ဝတ်ကြီး ဝတ်ငယ်လုပ်ပေမယ့် တပည့်သားမြေးများ ကျွန်တော့မှာ မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျား ကများ တာဝန်ယူပြီး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါမလား"
မှတ်ကရော။ သူ လေးအေးကလေးနှင့် ပြန်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
သည်တစ်ချီတော့ ပစ်ချက် ကို တည့်တည့်ကြီး ထိမှန်သွားချေပြီ။ အဘွားကြီး၏ မျက်နှာပေါ်မှာ ရဲကနဲ ရှက်သွေးဖြန်း သွားသည်။ ပြီးတော့ မနေတတ် မထိုင်တတ်ဖြင့် တစ်ချက်ရယ် လိုက်သည်။
"အိုး မဖြစ်နိုင်တာ" ဟု ပြောပြီး ကျွန်မဘက်သို့ ရုတ်တရက် လှည့်လိုက်သည်။
"မင်းကတော့ မစ္စတာဒီဝင်းတား အတွက် အသုံးဝင်နိုင်ကောင်းပါရဲ့နော်။ သူ့အတွက် လိုအပ် တာတွေ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ် မဟုတ်လား။ မင်းကတော့ ဘာမဆိုတတ်နိုင်တဲ့ မိန်ကလေးပေပဲ" ဟု ဆက် တိုက်ကြီး ပြောချလိုက်ပါတော့သည်။ နားနှင့် ဆတ်ဆတ်ကြားလိုက်ရ ပါလျက်နှင့် အဘွားကြီးပါးစပ် မှ ထိုစကားမျိုး ထွက်ရက်သည်ဟု မယုံကြည်နိုင်အောင် ဖြစ်သွားရ ပါတော့သည်။
ခဏမျှ တိတ်သွားကြသည်။ ကျွန်မလည်း ကြက်သေသေကာ ရပ်နေမိသည်။ ဘယ်လို အဖြေမျိုးကိုများ သူ ပြန်ပေးလိမ့်မည်နည်း ဟု အသည်းတထိတ်ထိတ်ဖြင့် စောင့်နေမိသည်။ ကျွန်မ တို့နှစ်ယောက်ကို သူက ငုံ့ကြည့်သည်။ သူ့ အမူအရာမှာ သရော်တော်တော် အမူအရာမျိုးနှင့် မျက်နှာ အနည်းငယ်မဲ့သည့် အမူအရာမျိုး ရောစွက်နေသည်။ နှုတ်ခမ်းအစုံ မှာလည်း အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုး ပေါက်သည့် အပြုံးတစ်မျိုး ရှိနေသည်။
"အင်မတန် ကောင်းမြတ်တဲ့ အကြံပေးချက်ပါပဲ ခင်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုမှာ ဆိုရိုးစကား တစ်ခုရှိပါတယ်။ ခရီးမြန်မြန်သွားချင်ရင် အဖော်မမင်နဲ့တဲ့။ ခင်ဗျားက တော့ ကြားဖူး မယ် မဟုတ်ပေ ဘူး"
ထိုစကားကို ပြောပြီး အဘွားကြီး၏ အဖြေကိုမျှ မစောင့်တော့ဘဲ နောက်ဘက်သို့ ချာကနဲ လှည့်ကာ ထွက်သွားလေတော့ သည်။
"ဘယ်လောက် ရယ်စရာကောင်းသလဲ" ဟု ကျွန်မတို့ ဓာတ်လှေကားနှင့် အပေါ်ထပ်သို့ တက်လာကြခိုက် တွင် မစ္စကဗန်ဟော့ပါးက ပြောသည်။
"အခုလို ရုတ်တရက် သူ ထွက်သွားတာဟာ အသောကလေး ဖောက်သွားတာလို့များ မင်း မထင် မိဘူးလား။ ယောက်ျားတွေဟာ ဒီလိုပဲ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ လုပ်တတ်တယ်ကွယ့်။ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာတစ်ယောက်နဲ့ ကြုံခဲ့ရပုံကလေးကို သတိရသေးတော့တယ်ကွယ်။ အဲဒီ စာရေးဆရာဟာ ငါ့ကို တွေ့တိုင်း နောက်ဘေးလှေကားက ဆင်းဆင်းပြေတတ်တယ်။ သူက ငါ့ကို ချိတ်တိတ်တိတ် ရယ်လေ.. သူ့ကိုယ်သူလဲ သေချာပုံ မပေါ်ဘူး။ ဒီတုန်းက ငါကလဲ ငယ်တုန်း ရွယ်တုန်း လှတုန်းပတုန်း ကိုး... "
ဓာတ်လှေကားက တုံကနဲ ရပ်သွားသည်။ ကျွန်မတို့တည်းခိုနေသည့် အခန်းရှိသော အထပ် သို့ ရောက် လာပြီ။ အလုပ်သမားကလေးတစ်ယောက်က တံခါးဖွင့်ပေးသည်။
"ဒါနဲ့ စကားမစပ်ပြောရဦးမယ်။ မှိုချိုးမျှစ်ချိုး ပြောတယ်လို့တော့ မထင်လေနဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီကနေ့ စကားဝိုင်း မှာ မင်းဟာ နည်းနည်းတော့လူတွင်ကျယ် လုပ်ချင်တယ်။ စကားဝိုင်းကို မင်းတစ်ယောက် တည်း မောင်ပိုင်စီးဖို့ ကြိုးစာခဲ့တာဟာ ငါ့အဖို့ အနေရ အထိုင်ရ တော်တော် ခက်သွားတယ်။ မစ္စတာဒီဝင်းတာ လဲ ဒီအတိုင်းဖြစ်မှာ သေချာတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာမျိုးကို ယောက်ျားတွေက အင်းမတန်း ရွံတယ်။ မှတ်ထား.. "
ကျွန်မ ဘာမျှပြန်မပြောပါ။ ဖြေစရာစကားလည်း ရှိနိုင်မည့် စွပ်စွဲချက်မျိုး မဟုတ်ပါ။
"ကဲ.. လာပါလေ... ကောက်တေးလုပ်မနေစမ်းပါနဲ့... "
ရယ်ရွှန်းပတ်ရွှန်းဖြင့် သူက ပြောပြန်သည်။ ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုလည်း တွန့်လိုက်သည်။
"ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မင်းရဲ့ အပြုအမူ အနေအထိုင် အပြောအဆိုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငါ့မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ မင်းရဲ့ အမေအရွယ်ဖြစ်တဲ့ ငါ့လို မိန်းမတစ်ယောက်ဆီက အကြံဉာဏ်ကို တော့ မင်း ယူသင့်တယ်"
စကားဆုံး သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း အင်္ကျီချုပ်သူ စောင့်နေသည့် အခန်းတွင်းသို့ ဝင်သွားလေတော့ သည်။
ပြတင်းပေါက်နားမှ ကုလားထိုင်မှာ ကျွန်မ ဒူးညွတ်ထိုင်ချလိုက်မိပါသည်။ ပြီးတော့ အပြင်က မွန်းလွဲပိုင်း၏ မြင်ကွင်းများကို ငေးကြည့်နေလိုက်မိသည်။ အပြင်ဘက်တွင် နေရောင်က အလွန် မတန်တောက်ပနေဆဲဖြစ်သည်။ လေရူးကလးကလည်း ဝေ့ဝဲနေပါသည်။ နောက် နာရီဝက်လောက်ကြာ လျှင် ဟောလီးဝုဒ်ဝိုင်းမှာထိုင်ပြီး ဖဲကစားကြရပါဦးမည်။ ထိုအခါ တွင် ပြတင်းပေါက်များကို အလုံပိတ်ထားမည်။ အပူငွေ့ပေးသည့်စက်ကိုလည်း အခန်းထဲမှာ အာဏာကုန် ဖွင့်ထားသည်။ ဆေးလိပ်ပြာခံခွက်များ ရှင်းလင်းပေးရဦးမည့် အကြောင်းကိုလည်း ကျွန်မ စဉ်းစားနေ မိသည်။ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးဆေးစွန်းနေသည့် ဆေးလိပ်တို များသည် ချောကလက်ပတ် စက္ကူများနှင့် ရောထွေးနေလိမ့်မည်။
ကျွန်မသည် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက ရိုးရိုးကစားနည်းလောက်ကိုသာ သင်ကြား တတ်မြောက် ခဲ့ပါ၏။ ဟောလီးဝုဒ်ဖဲကစားနည်းကို ကျွန်မ ကောင်းစွာ ကျွမ်းကျင်ခြင်း မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါး ၏ မိတ်ဆွေများက ကျွန်မနှင့်အတူ ဖဲကစားရမည်ကို လက်တွန့်တတ်ကြပါသည်။
ကျွန်မ လို အသက်အရွယ်နုသူ မိန်မပျိုးလေးတစ်ယောက် သူတို့ ဖဲကစားသည့် အနီးအဝိုက်တွင် ရှိနေခြင်းအားဖြင့် သူတို့အဖို့ တစ်နည်းတစ်ဖုံတော့ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေ တတ်ပါသည်။ ထမင်းစားပြီး အချိုပွဲ ကလေး ရောက်မလာမီ ထွေရာလေးပါးပြောမည် ကြံတုန်း စားပွဲထိုးအမျိုးသမီးက ထမင်းဝိုင်းနားမှ မခွာသည့် သဘောမျိုး ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်မရှိ နေသည့်အတွက် ပေါက်ကရလေးဆယ်များကို သူတို့ ထင်တိုင်းပြောဆိုနိုင်ကြခြင်း မရှိတော့ပါ။ မစ္စက်ဗန်ဟော့ပါး၏ ယောက်ျားမိတ်ဆွေများကတော့ ထိုသို့ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်မအပေါ် စိတ်ဝင်စားသယောင် အပင်ပန်းခံကာ ဟန်ဆောင်တတ်ကြပါသည်။ ပြီးတော့ ရာဇဝင် ဘာသာ ရပ်အကြောင်းကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပန်းချီအကြောင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မကို မေးလားမြန်းလား လုပ်ကြ သည်။ သဘောကတော့ ကျွန်မသည် ကျောင်းမှထွက်စ မနူးမနပ်ကလေးဖြစ်သောကြောင့် ရာဇဝင်နှင့် ပန်းချီအကြောင်း မှလွဲပြီး ဘာမျှမသိသေးဟု အထင်ရောက်ကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါ သည်။
သက်ပြင်းတစ်ချက် ရှိုက်လိုက်မိပါသည်။ ပြီးတော့ ပြတင်းပေါက်ကို ခွာခဲ့သည်။ နေရောင်ကလည်း ကျဲကျဲတောက်တောက် ကြည်လင်နေဆဲ။ ပင်လယ်ပြင်ပေါ်တွင် လေပြည် လေညှင်း ကလေး က မြူးတူးစွာ သုတ်ဖြူးနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ပင်လယ်ပြင် မှာ ဖွေးဖွေးဖြူကာ လှုပ်ရှားနေသည်။
လွန်ခဲ့သည့် တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်က ကျွန်မ လမ်းဖြတ်လျှောက်ခဲ့မိသည့် မိုနာကိုနယ်မှ လမ်းထောင့်ချိုးတစ်ခုအကြောင်းကို ပြန်တွေးနေမိသည်။ ထိုလမ်းထောင့်တွင် အိမ်တစ်ဆောင် ရှိပါသည်။ ကျောက်တုံးများခင်းထားသည့် မြေကွက်လပ်ဘက်တွင် ပြိုတော့မလို ထိုင်နေသည်။ အိတွဲကျနေ သည့် ခေါင်မိုးတစ်နေရာတွင ချောင်းကြည့် ပေါက်ကလေးလို ပြတင်းပေါက်ကျဉ်းကျဉ်း ကလေးတစ်ခု လည်း ရှိပါသည်။ ထိုအထဲတွင် ခောတ်ဟောင်းက ဝိညာဉ်တစ်ခုခု ရှိနေသယောင် ကျွန်မ ထင်မြင်မိပါသည်။
စားပွဲပေါ် မှ စက္ကူနှင့် ခဲတံကို လှမ်းယူကာ စိတ်မှတ်မထင်ပင် လူပုံတစ်ခုကို ရေးခြစ်နေမိပါ သည်။ တည်ငြိမ်သော မျက်လုံး၊ ချွန်ထက်သော နှာတံ၊ မာန်မာနကြီးပုံရသည့် အထက်နှုတ်ခမ်း စသည်များ ကိုလည်း ရေးဆွဲလိုက်သည်။ တစ်ဆက်တည်း မုတ်ဆိတ်မွေး ချွန်ချွန်တစ်ချောင်းနှင့် ဇာလည်စည်း ကိုပါ ရေးဆွဲပေးလိုက်သည်။ ရှေးခေတ်ပန်းချီရေးဆွဲနည်း အတိုင်း ရေးဆွဲလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
တစ်စုံ တစ်ယောက်က တံခါးလာခေါက်သည်။ ပြီးတော့ ဓာတ်လှေကားမောင်းသည့် သူငယ် ကလေး စာရွက် တစ်ရွက်ကိုင်ပြီး ဝင်လာသည်။
"မေမေကြီး အခန်းထဲမှာ... " ဟု ကျွန်မက ဆီးပြောသည်။ သို့သော်လည်း သူက ခေါင်းခါပြပြီး ကျွန်မ အတွက် စာဖြစ်ကြောင်း ပြောပါသည်။ စာအိတ်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက သောအခါ စာရွက် ကလေးတစ်ရွက် သာ ထွက်လာသည်။ ကျွန်မ မမြင်ဖူးသေးသည့် လက်ရေးဖြင့် စာလုံး အနည်းငယ် ရေးခြစ် ထားသည် ကို တွေ့ရသည်။
(ကျုပ်ကိုခွင်လွှတ်ပါ။ ဒီနေ့ခင်း သိပ်ကိုရိုင်စိုင်းလိုက်မိပါတယ်)
စာက ဒါပဲဖြစ်သည်။ အောက်တွင် လက်မှတ်လည်း ရေးထိုးမထား။ အစတွင်လည်း တစ်စုံ တစ်ရာ အမည်တပ် ထားခြင်းမရှိ။ သို့သော်လည်း စာအိတ်ပေါ်တွင်မူ ကျွန်မ၏ နာမည်ကို စာလုံးပေါင်း မှန်ကန်စွာ ရေးထားသည်ကိုတော့ တွေ့ရသည်။ ထူးခြားချက်တစ်ခုပင်။
"ဘာပြန်မှာ ဦးမလဲ ခင်ဗျာ" ဟု လူငယ်ကမေးသည်။
"မမှာတော့ ပါဘူး။ ဘာမှ မှာစရာမရှိပါဘူး" ဟု စာလုံးကလေးများကို ငုံ့ကြည့်နေရာမှ ကျွန်မ ပြန်မော့ဖြေလိုက် သည်။
သူ ထွက်သွားတော့ စာတိုကလေးများကို အိတ်ထဲမှာထည့်ပြီး သိမ်းထားလိုက်သည်။ ဆွဲလက်စ လူရုပ်ပုံ ဘက်သို့ ပြန်လှည့်သည်။ သို့သော်လည်း သည်ပုံကို ကျွန်မ သဘောမကျ တော့ပါ။ မျက်နှာက တင်းမာ လွန်းသည်။ အသက်ကင်းမဲ့လွန်းသည်။ ဇာကော်လာနှင့် မုတ်ဆိတ် မွေးတစ်ချောင်းကလည်း ဇာတ်ထဲမှ စကားထာ ဝှက်ရာတွင် အဖော်ရလွယ်စေရန် နှပ်ကြောင်းပေး သည့် သဘောမျိုးဖြစ်နေတော့သည်။
Posted by SHWE ZIN U at 5:37 AM0comments Links to this post
ဝိဇ္ဇာပြောင် နှင့် လူသူတော် တို့၏ အလှူတော်မှတ်တမ်း
မဟာစည်ပင်မြိုင်စခန်းအမည်ရ ဧရာနန္တတောအုပ်ကြီး အတွင်းဝယ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ထိပ် တတာခေါင် ဖြစ်နေလေသော အာဂ အကျွန်ုပ် ဝိဇ္ဇာပြောင် သည် မိုကာလသို့ ဝင်ကာ နီးပြီဖြစ် လေသောကြောင့် ဆေး ကလေး၊ ဆားကလေး၊ ဆန်ကလေး အလှူခံရန်အလို့ငှာ လက်သုံးတော် တပည့်ကျော်ကြီး စင်စစ် ဧကံ ဖြစ်လေသော မောင်ရွှေဖားအား မဟာဖွက်ကလိကုန်း အမည်ရ ရွာကြီးဆီ သို့ စေလွှတ်ရလေ၏။
“ဒီလိုရှိတယ် မောင်ရွှေဖားရေ… ငါတို့က အစကတည်းက ငတ်မယ့်ပြတ်မယ့် နေရာမျိုး ကိုမှ ရွေးပြီးလာ နေကြတာ ဆိုလေတော့ ငတ်နေကြပြီးသားကွဲ့…။ မိုးတွင်းကာလမှာ အစာရေစာ ဆန်ကလေး၊ ဆေး ကလေး ပါးရှားတတ်တယ်ဆိုပေမယ့် ရှားတော့လည်း ရှားဇာတ်ခင်းရုံပေါ့ကွယ်။ သိပ်ခက် မှာတော့ မဟုတ်လှပါဘူး။ သို့ပေမင့် ချောင်စရာ ရှိတော့လည်း ချောင် တာလေး က ကောင်းတာပေါ့ကွယ်၊ အဲဒါ ကြောင့် မင့်ကို ဖွတ်ကလိုကုန်း ကို ဆန်အလှူခံ၊ ဆေးအလှူခံ လွှတ် လိုက်တာနော်။
တစ်ခုတော့ ရှိပါလေရဲ့…၊ ဖွတ်ကလိကုန်း ရွာသားတွေ အင်မတန် ဆင်းရဲနေ၊ ကြပ်နေ၊ မချောင်မ လည်ဖြစ်နေကြရင်တော့ သူတို့ အငတ်ခံပြီး လှူတန်းလိုက်ကြတဲ့ မသဒ္ဓါရေစာ ပစ္စည်းလေးတွေကို ယူ မလာခဲ့ ပါနဲ့ကွယ်။ မြွေပူရာကင်းမှောင့်၊ နူရာဝဲစွဲ၊ လဲရာသူခိုးထောင်း၊ မွဲရာ အလှူခံကလာတောင်းဆိုသ လို ဖြစ်နေ ပါဦးမယ်..” ဟူ၍လည်း မှာကြားရလေ၏။ တပည့်ကျော်မောင်ရွှေဖားက
“အဲသလောက် လည်း… ဖွတ်ကလိကုန်းသားတွေ မွဲမနေ၊ ငတ်မနေလောက်ပါဘူး အာစရိရယ်…။ အခု ဟာ က ဖွတ်ကလိကုန်းမှာ သူကြီးမင်းပြောင်းသွားပြီလို့ ကြားတယ်။ သူကြီးမင်း အသစ်က တော်လည်း တော်တယ်။ ရှေ့နောက်လည်း ကြည့်တတ်တယ်၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာလည်း ဝင်ဆံ့ တယ် လို့ ကြား ပါတယ်။
အရင်သူကြီးမင်းတွေတုန်း ကသာ ထင်ရာစိုင်းခဲ့ကြလို့ မထင်ရာတွေဖြစ်ပြီး ဖွတ်ကလိကုန်း ရွာပျက်မ တတ် မွဲပြာကျသွား ခဲ့တာပါ။ အရင်သူကြီးတွေတုန်းကတော့ တော်တော်ဆိုးတာပဲ အာစရိရဲ့…။ သူကြီး မင်း တောက်တိုမယ်ရ ဟူစိန် တို့၊ ငါ့မြင်းငါ့စိုင်း က ဒါဖီ တို့ ဘယ်သူ့မှ လူမထင် ဘင်လာဒင်တို့… မျိုးစုံ ပါပဲ အာစရိရယ်…၊ သဘောလေးကောင်းတဲ့ သူကြီးမင်းလက်ထက်ကျတော့ ရွာမွဲပြာကျတယ်။ ထမင်း လေး မဝတဝ စားရတဲ့ သူကြီးမင်းလက်ထက်ကျတော့လည်း သေးထွက်ကျမတတ် ကြောက်ကြရ တယ် ဟိုသူကြီးမင်း လက်ထက်တုန်း ကလည်း သူ့သား ကို မောင်ရွာသား လို့ နာမည်ပေးတယ်။
သူ့သမီး ကိုကျ တော့ မရွာသူ လို့ နာမည်ပေးတယ်။ တူတစ်ယောက်ကိုကျတော့ မောင်လုပ်သားကို မပြည်သူ ဆိုတဲ့ အ ဘွားကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ဇွတ်အတင်းပေးစားတယ်၊ ပြီးတော့ ရွာထိပ်မှာ“ရွာသူရွာသား လုပ်သားပြည် သူတို့ ချမ်းသာရေးဦးစားပေး”ဆိုတဲ့ ဧရာမဆိုင်းဘုတ်ကြီး ချိတ်ပြီး ရွာသူနဲ့ ရွာသားကောင်းစား ဖို့ လုပ် သားနဲ့ပြည်သူ ချမ်းသာဖို့ နေ့မနား ညမနား ကြိုးစားလိုက်တာ ကမ္ဘာကခေါင်းဆောင် အချို့ကတောင် အဲဒီဖွတ်ကလိကုန်း သူကြီးမင်းဆီမှာ ဝိုင်းကျူရှင် လာတက် ရသတဲ့ အာစရိရေ…။
ဒါပေမဲ့ အခုတော့ စနစ်တွေလည်း ပြောင်း၊ ခေတ်တွေလည်း ပြောင်းပြီး၊ ဖွတ်ကလိကုန်းမှာလည်း လူကြီးမင်း အသစ်နဲ့ ရွှေလမ်းခရီးကို လျှောက်နေကြပါပြီ အာစရိရဲ့…”ဟု ပြန်၍ ပြောလေ၏။ ထို့ကြောင့် အကျွန်ုပ်က “အိမ်းလကွယ်… အဲသလို သတင်းဟာ အမှန်ဆိုရင်တော့ ကောင်းပါလေရဲ့… သာဓုခေါ်ရမှာပေါ့ ကွယ်…”ဟု ပြန်၍ပြောမိလေ၏။ ထိုသောအခါ တပည့်ကျော် မောင်ရွှေဖားက ဆက်လက် ၍ “သေချာတဲ့သတင်း၊ ရွာက ကြားရဲတဲ့ သတင်းတွေပါ အာစရိရယ်…။ အရင်သူကြီး တစ်ယောက် တုန်း က သူ့သမက်တစ်ယောက်က တိုင်းတစ်ပါးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး ဂျုံမျိုးစေ့သွင်းတဲ့ ကုန်သည် လုပ်တတ်။
အဲဒီ တော့ သူကြီးမင်းက ရွာသူရွာသားတွေကို မောင်းထုလူစုပြီး ဂျုံစိုက်ရင် ဘယ်လောက်အကျိုးထူးစေ မယ့်အကြောင်း မစားရ ဝခမန်း ဂျုံတရားဟော တယ်။ ပြီးတော့ ရွာထိပ်ဇရပ် မှာ ဧရာမစာလုံးကြီးတွေ နဲ့-
“ငွေအပုံ လိုက်ရချင်ရင် ရွှေဂျုံစိုက်ကြ…” လို့ ဆိုင်းဘုတ်အကြီးကြီးရေးတယ်၊ တစ်ရာသီ လည်း စိုက်ပြီး ရော ရွာသူရွာသားတွေလည်း ကြွေးအထပ်ထပ်တင်ပြီး သူကြီးမင်းရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်အောက်ကနေ-
“အသေယုံ လို့ အမေပါ ကုန်သွားပြီ…” ဆိုပြီး မီးသွေးခဲနဲ့ စာဖြည့်ပြီး ရေးလိုက်ကြလို့ သူကြီးမင်းရဲ့ ဂျုံ မဟာ စီမံကိန်းကြီး ရပ် သွားခဲ့ရတယ်။ နောက်သူကြီးတစ်ယောက် လက်ထက်ကျတော့လည်း-
“တစ်အိမ်တစ်ကောင် တောက်တဲ့ဆောင်…”ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးနဲ့ တောက်တဲ့မွေးမြူရေး ဦးစားပေး ဆိုပြီး လုပ်ပြန် တယ်။ ရွာသားတွေက အဲဒီစာအောက်ကနေ-
“ရှိတဲ့နွားကလေးတောင် ပေါင်လိုက်ရသေး…”လို့ စာဖြည့်ပြီး ရေးလိုက်ကြလို့ အဲဒီလူကြီးမင်းလည်း သူရဲ့ မူလလက်ဟောင်း ကြက်မွေးမြူရေးဘက်ကို ပြန်လှည့်သွားရတယ်။ နောက်သူကြီးတစ်ယောက် ကျတော့ လည်း ဘယ်လိုစိတ်ကူးပေါက်လည်း မသိပါဘူး။
“ချမ်းသာချင်ရင် ပန်းတမာစိုက်ကြ…”လို့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးချိတ်ပြန်တယ်။ သူကြီးကိုကြောက်လို့ စိုက် လိုက်ကြရတဲ့ ပန်းတမာတွေ ဆိုတော့ နည်းနည်းနောနောမဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့လည်း ဘာမှမဟုတ်ဘဲ ပြီး သွားတယ်။ အဲဒီတော့ ရွာသားတွေက သူကြီးမင်းရဲ့အဲဒီဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာ-
“သွားမလုပ် နဲ့၊ နွားပြုတ်သွားမယ်…”ဆိုပြီး မီးသွေးခဲနဲ့ ဖြည့်ရေးခဲ့ကြတယ်။ အခုတော့ ခေတ်တွေလည်း ဟောင်းလို့ စနစ်တွေလည်း ပြောင်းသွားပါပြီ အာစရိရယ်။ သူကြီးတွေ လည်း ပြောင်း လို့ ဖွတ်ကလိကုန်း မှာ မီးတွေ၊ ရေတွေတောင် ကောင်းစပြုနေပြီလို့ သတင်းကြား ရပါတယ်…”ဟု ကြားသိသမျှ အဝဝကို အကျွန်ုပ်အား ဖောက်သည်ချလေ၏။
ထို့နောက် တွင်ကား တပည့်ကျော်မောင်ရွှေဖားသည် ဖျင်ကြမ်းလွတ်အိတ်ကြီး နှစ်လုံးကို ဟိုဘက်တစ် လုံး ဒီဘက်တစ်လုံး စလွယ်သိုင်းလျက် လွယ်ကာ မဟာဖွတ်ကလိကုန်းရွာဆီသို့ အလှူခံကြွချီတော်မူ သွားလေတော့၏။
ရတ်သတ္တနှစ်ပတ်ကျော် သုံးပတ်ခန့်မျှ ကြာသောအခါအနှီ မောင်ရွှေဖားလည်း ရှေ့သွားကြီးများပင် အအေး ပတ်လောက်အောင် ပြုံးဖြီးပြုံးပြီး မျက်နှာကြီးနှင့် မဟာစည်ပင်မြိုင်စခန်းဆီသို့ တစ်နာရီလျှင် မိုင်တစ်သန်း အလျင်နှုန်းကိုဆောင်ကာ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာလေတော့၏။ သို့ဖြစ်၍လည်း အကျွန်ုပ် က-
“ဘယ့်နှယ်ဖြစ်လာတာတုံး မောင်ရွှေဖားရဲ့ …၊ မင်းရဲ့မျက်နှာကြီးကလည်း ချိုလိုက်တာ…၊ ပုရွက်ဆိတ် တွေ အပုံလိုက်တက်ပြီး ခွေးတွေ တစ်အုပ်လုံး လာလျက်မှာတောင် ကြောက်ရတယ်”ဟု အမေး ရှိလျှင် တပည့်ကျော်မောင်ရွှေဖားက-
“ချိုရတယ် အာစရိရေ… ချိုရတယ်၊ ဒီတစ်ခေါက် ဖွတ်ကလိကုန်းကို အလှူခံရောက် သွားတာ တော် တော်ကို အဆင်ပြေတယ်။ ရွာကလည်း တော်တော်ကိုပြောင်းသွားပြီဗျ…။ ရွာသူရွာသားတွေ လည်း တော်တော်ပျော်နေကြတယ်။
အခုတက်လာတဲ့ သူကြီးက တော်တော့်ကို ရည်ရည်မွန်မွန်ကလေးဆိုပဲ အာစရိရဲ့…။ သူက ဘာအခွင့်အာဏာ မှ ယူမထားဘဲ အားလုံးကိုခွဲဝေပေးထားသတဲ့…”ဟု ပြောရာ အကျွန်ုပ်က-
“ခေသူမဟုတ် ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကွာ… အဲဒီရွာမှာ ဆရာတော်ကြီး တစ်ပါးရှိခဲ့ဖူး တယ်။ ထေရ်ကြီးဝါကြီး ကျောင်းထိုင်ကြီးကွ…။ အသက် ၉၀ တန်းရောက်မှ “ငါ လူထွက်ချင်တယ်…”လို့ ဇွတ်အတင်း ပူဆာပါ လေရော…။ တစ်သက်လုံး သာသနာတော်မှာ ပျော်မွေ့လာခဲ့ပြီးမှ ကလေး မုန့်ပူဆာသလို လူထွက်ချင် တယ်ဖြစ်လာတော့ ဒကာ၊ ဒကာမတွေလည်း စိတ်မကောင်းကြဘူးပေါ့ကွာ၊ ဇွတ်အတင်း တားကြပေ မယ့် ဆရာတော်ကြီးက ဇွတ်အတင်း လူထွက်ပစ်လိုက်တယ်။ လူထွက်ပြီးတော့… “တစ်သက်လုံး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲ နေလာတော့ လူထွက်လိုက်ပေမယ့် ငါ့မှာ ပြန်စရာ အိမ်လည်း မရှိ ပါဘူးကွာ…၊ အဲဒီတော့ ဒီကျောင်းမှာပဲ ဆက်နေ ပါရစေ…”ဆိုပြီး ကျောင်းမှာပဲ ဆက်နေသတဲ့…။ ဒကာ၊ ဒကာမတွေက လူထွက်ဆရာတော်ကြီးအတွက် လူဝတ်လူစားတွေ ဝယ်ပေးကြတယ်။
“တစ်သက်လုံး အဝါရောင်ကိုပဲ ဝတ်လာလေတော့ အခြားအရောင်တွေ၊ ကြောင်ကြောင်ကျားကျားတွေ ဝတ်တဲ့အခါ မနေတတ်ဘူး…”ဆိုတာနဲ့ အင်္ကျီအဝါစစ်စစ်၊ ပုဆိုးအဝါစစ်စစ်တွေပဲ ဆင်ပေးကြရသတဲ့။
“တစ်သက် လုံး အဝတ်အစားဆိုတာ ကောက်ခြုံပြီး ရုံလိုက်ရုံပဲဆိုတာမျိုးနဲ့ ပြီးလာလေတော့ ခေါင်းက စွပ်တဲ့ အကျီ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကြယ်သီးတွေ ဘာတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင် ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူးကွ…၊ အဲဒီ တော့ အင်္ကျီအဖြစ် မချုပ်နဲ့ကွာ…”ဆိုပြီး ပိတ်စအဝါကြီးကိုပဲ သင်္ကန်းခြုံသလို ခြုံသတဲ့…။
“ပုဆိုး ဆိုတာကလည်း တစ်သက်လုံး နှစ်ပေါင်း ၉၀ လောက် ဝတ်လေ့မရှိတော့ မဝတ်တတ်ပါဘူး ကွာ…” ဆိုပြီး အောက်ပိုင်းက ပုဆိုးစကိုလည်း သင်းပိုင်းဝတ်သလိုပဲ ခါးမှာပတ်ပြီး လိပ်ပြီးဝတ်သတဲ့…၊ ပြီးတော့-
“တစ်သက်လုံး မနက်အရုဏ်တက်ဆိုရင် ဆွမ်းစားနေကျ… ဆိုတော့ မနက် မနက်ဆို မနေနိုင်ဘူး ကွ…” လို့ ဆိုလို့ မနက်အရုဏ်တက်ဆိုရင် ဆွမ်းကပ်နေကျအတိုင်း စီစဉ်ပေးကြရသတဲ့…။ အဲသလို ပဲ နေ့ဆွမ်း ဘုဉ်းနေကျ အချိန်ရောက်ရင်လည်း အရင်လိုပဲ စီစဉ်ပေးရတယ်။ တစ်သက်လုံး စားလေ့စားထ မရှိလို့ ဆိုပြီး ညစာလည်း မစားဘူး၊ ပြီးတော့ ရှိသေးတယ်။ တစ်သက်လုံး ခေါင်းတုံးနဲ့နေလာခဲ့တာ၊ ဆံပင်လေး နည်းနည်း ထွက်လာရင် ခေါင်းယားတယ် မနေတတ်ဘူးဆိုလို့ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ခေါင်း ရိတ်ပေးကြ ရတယ်။
သူ့ဥစ္စာက ငါလူထွက်လိုက်ပြီဟေ့ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကလွဲရင် ကျန်တာက အရင်အတိုင်းဖြစ်နေ တယ်။ ဒဏာ၊ ဒကာမတွေက တွေ့တဲ့အခါ အရင်လိုပဲ ကန်တော့ကြ၊ ပြောဆိုဆက်ဆံကြသတဲ့…။ ကျောင်း မှာလည်း သူ့တပည့် တစ်ဦး က ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး ဖြစ်လာ ခဲ့ပေမယ့် တစ်ကျောင်းလုံးရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အဆုံးအဖြတ်တွေကတော့ သူ့ဆီမှာပဲ ရှိနေသတဲ့…။ တစ်ခုရှိတာက ကျောင်းမှာ ဘယ် ပြဿနာဖြစ်လို့ဆိုရင် နောက်ကိုယ်တော်ရှင်းပေါ့…။ ကျောင်းမှာ မီးလန့်ရင် လည်း နောက်ကိုယ်တော် တာဝန်ပေါ့…။ ဒါပေမဲ့ စားဦးစားဖျားရောက်လာရင်တော့ သူ့ကို အရင်ကပ် ရတာ ပဲပေါ့…။ တကယ် တော့ လောကကြီးမှာ လုပ်ရပ်ကသာလျှင် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို အဲဒီ ဆရာတော်ကြီး က တရားပြ ခဲ့တာပဲကွ…”ဟု မှတ်သားဖူးသမျှကို ပြန်ပြောင်းပြောပြရလေ၏။ မည်သို့ ပင်မြူး ၍ အပျော်ကြီးပျော်နေ ကြကြောင်း သတင်းစကားကောင်းကို ကြားရသောကြောင့် အကျွန်ုပ် လည်း ပီတီသောမနသ ပွားမိလေ ၏။ ထို့နောက် တပည့်ကျော်မောင်ရွှေဖားက မည်သို့ မည်ပုံ၊ ရေရှည် ခံအောင် ဖန်တီးလာသည်မသိ သော မကြုံစဖူး၊ စားကောင်းသောက်ဖွယ်များကို လွယ်အိတ် အတွင်းမှ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ထုတ်လေ၏။
“ဟဲ့… ဆားရောပါရဲ့လား…၊ မိုးအခါမှာ ငါတို့ဆီမှာ ဆားက ခက်တယ်ကွယ့်” ဟု မေးလျှင် မောင်ရွှေ ဖားက-
“ဆား က အသာထားပါ အာစရိရယ်…”ဟု ပြန်၍ ပြောလေ၏။ အကျွန်ုပ်က
“ဆေးတွေ ဝါးတွေရော လှူလိုက်ကြရဲ့လား…”ဟု မေးပြန်လျှင် မောင်ရွှေဖားက
“ဆေးတွေဝါးတွေ အသာထားပါ အာစရိရယ်…”ဟု ပြန်၍ ပြောပြန်လေ၏။
ထို့ကြောင့် အကျွန်ုပ်လည်း ခေါင်းကိုကုတ်ရင်း-
“မင့်ဟာက ဆန်ဝယ်ခဲ့ပါ ဆိုတော့ ဆီတွေ ဝယ်လာတယ်၊ ဆားဝယ်ခဲ့ပါဆိုတော့ သကြားတွေယူလာ တယ်… ဆိုတာမျိုးတော့ ဖြစ်နေပြီထင်တယ်…”ဟု ပြောလိုက်ရာ တပည့်ကျော် မောင်ရွှေဖားက-
“မဟုတ်သေးပါဘူး အာစရိရယ်… ဟောဒီမှာကြည့်…။
ရေခဲမုန့် လို့ ခေါ်တယ်၊ မြန်မာပြည်မှာ ဘုရင်လုပ် သွားတဲ့ အနော်ရထာမင်းကြီးတောင် ဘုရင် သာဖြစ်သွားတာ ရေခဲ့မုန့် စားမသွားဖူးဘူးနော်…၊ အာစရိ က တောကြီးမျက်မည်းထဲမှာ ကံကောင်းလို့ စားရတယ် မှတ်…”ဟု ပြောလေ၏။ ထို့နောက် တစ်စုံတစ် ခုကို ထုတ်ပြန်ကာ-
“ဟော့ ဒါက ဖာလူဒါလို့ခေါ်တယ်၊ မြန်မာပြည်မှာ ဘုရင်လုပ်သွားတဲ့ သီပေါမင်းကြီးတောင် သူ့ခမျာ ထီးနန်းစည်းစိမ်ခံစားသွားရတယ် ဆိုပေမယ့်၊ ဖာလူဒါတော့ သောက်ဖူးမသွားရှာဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဆရာတပည့် က ဘုရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဖာလူဒါဆိုတာကြီး သောက်ခွင့်ရတာ… နည်းတဲ့ ကုသိုလ်လား၊ အဲဒီတော့ ရှေးကျတဲ့ ဘုရင်ထက်စာရင် ခေတ်နောက်ကျတဲ့ သူတောင်းစားမှ ရှေးက ဘုရင်ထက်သာ ဦးမယ် ထင်တယ်။ အဲဒါကြေင့် ကျွန်တော်တော့ ဆုတောင်းတယ်။ နောက်နှစ်တစ်ရာလောက်မှာ ဖွတ် ကလိကုန်း မှာ သူတောင်းစားဖြစ်ရပါလို၏လို့ ဆုတောင်းတယ်
နောင်လာမယ့် နှစ်တစ်ရာလောက် အကြာက သူတောင်းစားဟာ ဒီခေတ် ရွာသူကြီးထက်တော့ ပိုပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်မယ် ထင်တယ်…”ဟု ပြောလေရာ အကျွန်ုပ် လည်း ခေါင်းကို တဗျင်းဗျင်း ကုတ်ရင်း တောက်တီးတောက်တဲ့ မောင်ရွှေဖားရယ်… ဟု ရေရွတ်မိလေ၏။
“တောက်တီးဆိုရင်တော့ ရေထဲလွှင့်ပစ်လိုက် အာစရိရေ… တောက်တဲ့ဆိုရင်တော့ မွေးထား။ ဖွတ်က လိကုန်းမှာ တောက်တဲ့တစ်ကောင်ကြီးကြီးရရင် ချမ်းသာပြီဆိုပြီး တောက်တဲ့ရူး ရူးနေကြတယ်။ အရင် တုန်း က သွားမပါရင်နေ၊ ကားပါရင်တော်ပြီဆိုပြီး လင်ရွေးကြတယ်။ အခု ဖွတ်ကလိကုန်းမှာ ဘွဲ့ မရရင် နေ၊ တောက်တဲ့ရရင် တော်ပြီဆိုပြီး တောက်တဲ့ခေတ်ဖြစ်နေတယ်…” ဟု ပြောပြန်လေ၏။
ထို့နောက် တပည့်ကျော် မောင်ရွှေဖားသည် သူ၏လွယ်အိတ်ကြီးနှစ်လုံးအတွင်းမှ ပစ္စည်းများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ထုတ်လေ၏။ ထို့အတူ စနစ်ကျလှစွာသော အကျွန်ုပ်၏တပည့်ကြီးသည် စာရင်းစာရွက် တစ်ရွက်ကိုပါ ထုတ်၍ အကျွန်ုပ်၏လက်သို့ အသေအချာ အပ်နှံလေတော့၏။ ထိုသို့အပ်ရင်းလည်း…
“ကျွန်တော် တို့ ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်အတွက် ဖွတ်ကလိကုန်းက လှူလိုက်တဲ့ လှူဖွယ်ပစ္စည်းတွေ က အများကြီးပဲ အာစရိရဲ့၊ ဆန်တွေ ဆီတွေဆိုရင် လှည်းနှစ်စီးတိုက်စာလောက်ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီပစ္စည်းတွေကို လှည်းကူညီမယ့်အလှူရှင်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး မှာထား ခဲ့တယ်။ နောက်နှစ်ရက် လောက် ဆိုရင် လှူဖွယ်ပစ္စည်းလှည်းတွေ ကျွန်တော်တို့ ဆီကို ရောက် လာပါလိမ့်မယ်။ အလှူရှင်တွေက လည်း တော်တော်ကို စိတ်အားထက်သန်ကြတာ အာစရိရဲ့။ အရမ်း ဝမ်းသာဖို့ ကောင်းတာပဲ၊ နောက် နောင်လည်း အဲသလို အဲသလို လှူခွင့်ကြုံချင်ပါတယ်လို့ မှာလိုက်ကြတယ်…” ဟု အာဘောင်အာရင်း သန်သန်ဖြင့် ပြောလေ၏။
ထို့နောက်တွင်ကား အကျွန်ုပ်သည် မောင်ရွှေဖားဆောင်ကျဉ်းလာသည့် အလှူရှင်စာရင်းကို ဖတ်ကြည့် မိလေ၏။ ဖတ်ပြီးနောက် လွယ်အိတ်ကို ကောက်၍လွယ်ကာ လက်သုံးတော် တောင်ဝှေးကိုလည်း လှမ်း၍ ဆွဲရင်း ထိုတောင်ဝှေးဖြင့်ပင် မောင်ရွှေဖားအား လှမ်း၍တို့လိုက်လေ၏။ မောင်ရွှေဖားက နားမ လည်နိုင် စွာဖြင့် အကျွန်ုပ်အား မော့၍ကြည့်လေ၏။
“ဘာရမှာလဲ… ငါတို့အခုပဲ စခန်းပြောင်းကြရအောင်…”
“ဆိုင်းမဆင့် ဘုံမဆင့် ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ အာစရိရဲ့…”
“ဘယ်လိုဖြစ်ရမှာ လဲ… မင်းရဲ့အလှူပစ္စည်းတွေရောက်မလာခင် ငါတော့ ဒီကလွတ်အောင် ပြေးမယ်…”
“ဘာဖြစ် လို့လဲ အာစရိရဲ့…”
“ဘာဖြစ်ရမှာလဲ… မင်းရဲ့အလှူရှင်စာရင်းကိုလည်း သေသေချာချာ ဖတ်ကြည့်ပါဦးကွာ… ဝိဇ္ဇာပြောင် ဘယ်ဘဝ ကို ရောက်သွားမလဲ…”
အကျွန်ုပ် လည်း အနှီသို့လျှင် တိုတိုပြတ်ပြတ်ပင် ပြောပြီးနောက် ထိုနေရာမှ ထွက်လာခဲ့လေ၏။ တပည့် ကျော် မောင်ရွှေဖားမှာမူ အကျွန်ုပ်အား နားမလည်နိုင်စွာဖြင့် ခေါင်းကိုကုတ်ရင်း အလှူရှင် စာရင်းစာ ရွက်ကိုဖတ်လျက် နောက်ပါးဆီမှ ယောင်ပေယောင်ပေဖြင့် လိုက်လာလေ၏။
အကျွန်ုပ်၏တပည့်ကျော်မောင်ရွှေဖား ဆောင်ကြဉ်းလာသည့် အလှူရှင်စာရင်းစာရွက်ကို ဖောက်သည် ခါရပါမူ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါလေတော့သတည်း။
၁။ အရက်ပုန်းဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးမဲ+ဒေါ်ပု ဆီ ၂ ပုလင်း
၂။ ဦးမီးတောက်+ဒေါ်ပြာ (လောင်စာဆီပုန်းပိုင်ရှင်) ကြက်ဥ ၂ လုံး
၃။ ဦးနှစ်လုံး (ထီပုန်းရောင်းဝယ်ရေး) ဆီးဖြူသီး ၁၂ လုံး
၄။ ဦးလေးကောင် (လောင်းကစားပုန်းသူဌေးကြီး) ဆီ ၂ ကျပ်သား
၅။ ဒေါ်လည်ဝယ် (လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ အကျိုးတော်ဆောင်) ရှောက်သီး ၃ လုံး
၆။ ဒေါ်ကူးကူး မိသားစု (အခွေပုန်းဖြန့်ချိရေး) ရေသန့် ၂ ဘူး
၇။ ဦးလာဘနှင့် ညီများ (လိုင်စင်ရ လူရောင်းဝယ်ရေး) ထန်းလျက် ၅ ခဲ
၈။ ဒေါ်ဒေါ်လာကြီး (ငွေပုန်းရောင်းဝယ်ရေး) လျှာပွတ်ဆေး ၂ ထုပ်
၉။ ဒေါက်တာပေါက်ပြား (အပ်ပုန်းစပယ်ရှယ်လစ်) သွေးဆေး ၃ ထုပ်
၁၀။ ဦးဘော်ဒီမိသားစု (ကားပုန်းအကျိုးတော်ဆောင်) ဒီဇယ် ၁ ပုလင်း
၁၁။ ဒေါ်ကလေးမနှင့်ညီမများ (အပြာစာအုပ်ဖြန့်ချိရေး) တစ်သျှူး ၃ ထုပ်
၁၂။ ဦးဖိုးရှပ် မိသားစု (ဘိန်းချေးရောင်းဝယ်ရေး) ဆား ၁၀ သား
၁၃။ ဒေါ်ပုပ် (မိန်းမရွှင်ဒိုင်) အာလူး ၁၀ သား
၁၄။ ကိုတာတီးနှင့် ညီများ (ခိုးရာပါပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး) ဆန် ၂ ပြည်
၁၅။ ဦးဂွတို (နေ့ခင်းလယ်သမား၊ ညဓားပြ) ဆီ ၁၀ သား
၁၆။ ကိုထိပ်ကွက် မိသားစု
(မှတ်ချက် - လူလိမ်အလုပ်လုပ်ရာတွင် ယခင်ကလောက် ငွေမရွှင် သောကြောင့် ယတြာကောင်းတောင်း လိုက်ပါသည်။ လူကြုံနှင့် ပြန်ပို့ ပေးပါ။) ဆန် ၃ လုံး
၁၇။ ကိုအချောင် မိသားစု (ခွေးသားကို ဆိတ်သားအဖြစ် အသွင် ပြောင်းရေး ကုမ္ပဏီ) ပြောင်းဖူး ၃ ဖူး
joke magazine 2012 may
Posted by SHWE ZIN U at 5:04 AM 1 comments Links to this post
အထောက်တော် လှအောင် ဘာသာပြန် ရဘက်ကာ, အပိုင်း (၂)
ဘယ်နံရောအခါတွင် မှ မန်ဒါလေစံအိမ်ကြီးသို့ ကျွန်မတို့ ပြန်သွားနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။ သည်လောက် ကတော့ အလွန်သေချာပါသည်။ အတိတ်၏ဖြစ်ရပ်တို့သည် ကျွန်မ တို့နှင့် လက်တစ်ကမ်း အကွာ တွင် ရှိနေသေးသည်မှာ မှန်ပါသည်။ ကျွန်မတို့ မေ့ဖျောက်ပစ် ချင်ပြီး အတိတ်ကာလမှာပင် ထားခဲ့ချင် သည့် အရာဝတ္ထုတို့သည် တပြန်တကျော့ ပေါ်ကောင်း ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။
သည့် အတွက်ပင် ကျွန်မတို့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရပါသည်။ သည်အတွင်ပင် စိတ်ထဲမှာ မငြိမ်းမချမ်း ဖြစ်နေကြရှုပါသည်။ အကြောင်းမဲ့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများမှ လွတ်မြောက်အောင် ကျွန်မ တို့ ကြိုးစား ရုန်းကန် ထွက်မိခဲ့ကြပါသည်။ ယခုတော့ အားလုံး ပြီးငြိမ်းသွားပေပြီ။ ဘုရားသခင် ကို ကျေးဇူးတင် ပါသည်။ ရှေးယခင်ကအတိုင်းပင် အပြန်အလှန် အဖော်ပြုကာ ကျွန်မတို့လင်မယား ရိုးမြေကျ ပေါင်းကြ ပါမည်။
ကျွန်မ၏ခင်ပွန်းသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပင် သည်ခံနိုင်စွမ်းရှိနေပါ သည်။ ဘယ်သော အခါ မျှလည်း ပစိပစပ် မများ။ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ရသည်ကို သူ ပြန်လည်အမှတ်ရ သည့် အခါမျိုး မှာပင် သူ ခံနိုင်စွမ်း ရှိနေပြီ။ ယခုတလောတွင် အတိတ်ကာလအကြောင်းများကို ကျွန်မ ပြန်ပြောင်း အမှတ်ရ သည်ထက်ပင် သူက ပိုကာ မကြာခဏ အမှတ်ရနေသည်ဟု ကျွန်မထင်ပါသည်။
ရုတ်တရက် သူ့ အမူအရာပြောင်းပြီး သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားပုံကို မြင်ရခြင်းအားဖြင့် ဘာတွေကို သူ အမှတ် ရနေပြီဖြစ်ကြောင်း ကျွန်မ အတပ်ပြောနိုင်ပါသည်။ မမြင်တွေ့နိုင်သော လက်ဖြင့် သပ်ချ လိုက်သလို သူ့မျက်နှာပေါ်မှ ချစ်စရာကောင်းသော အမူအရာအားလုံး မှာ ပြယ်လွင့်ပျောက်ကွယ် သွားတတ်သည်။ ထိုနေရာတွင် မျာက်နှာဖုံးတစ်ခုက အစားထိုးဝင် ရောက်လာတတ်သည်။
အေးတိအေးစက်နိုင်သော အမူအရာမျိုးပေါ်လာသည်။ သူ့မျက်နှာ သည် ချောမောလှပနေသည်ကား မှန်ပါ ၏။ သို့သော်လည်း အသက်ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့သူလို၊ ခံစားချက်ကင်းမဲ့သူလို၊ ဖြစ်နေသည်။ ပြီးတော့ စီးကရက် များကို တစ်လိပ်ပြီးတစ်လိပ် အဆက်မပြတ်သောက်တော့သည်။ ပြာတွေ၊ စီးကရက်တိုတွေ ကိုလည်း စနစ်တကျ မခြွေ။ ပန်းပွင့်ဖတ်များ ကြွေကျနေသလို ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပွစာကျဲနေသည်။
ပြီးတော့ ဘာအဓိပ္ပါယ်မျှ မရှိသည့် အကြောင်းအရာများကိုလည်း စိတ်အားထက်သန်စွာ ဖြင့် သွက်သွက် လက်လက်ကြီး ပြောချနေတတ်သည်။ ကိုးဆယ့်ခြောက်ပါးသော ရောဂါဝေဒ နာအပေါင်း ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်သည့် ဆေးတစ်လက် လက်ကိုင်ရထားသူလို မည်သည့် အကြောင်းအရာ ကိုမဆို သူပြောလေတော့ သည်။
ဘေးဒုက္ခ တစ်စုံတစ်ရာနှင့် တွေ့ကြုံပြီးသောအခါတွင် ယောက်ျားမိန်းမပါ ပိုမိုပြီးရင့် ကျက် တည်ငြိမ် လာကြသည်ဟု ကျွန်မယုံကြည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ယခုဘဝမှာသာမက ဘယ်ဘဝ ဘယ်ကမ္ဘာရောက်ရောက် ကျွန်မတို့အဖို့တော့ ကောင်းစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိလာပါပြီ။ ဘယ်လို အပူမီးနှင့်ပဲ ကြုံရကြုံရ အကြောင်း မဟုတ်တော့ပြီ။ အဆိုးဆုံးအဖြစ်အပျက်ကို ကျွန်မတို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပြီ မဟုတ် ပါလား။
စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခြင်း၊ အထီးကျန်နိုင်လှခြင်း၊ ကြီးမားသည့် သောကမီး လောင်မြိုက် ခြင်းများကို ကျွန်မတို့ လင်ရောမယားပါ ခံစားခဲ့ကြရပြီ။ မသည်သူမဆို လောကဓံတရားများကို တစ်နေ့မဟုတ်တစ်နေ့ ကြုံတွေ့ခံစားကြရမည်သာ ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်မယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်မတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်အဖို့မူ မကောင်းဆိုးဝါးပေးသမျှ ဘေးဒဏ်ကိုလည်း ခံစားခဲ့ ကြရပြီ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်ဆုံး တစ်နေ့ မှာတော့ ကျွန်မတို့ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ကြရမည် သာဖြစ်ပါသည်။ သည်တိုက်ပွဲမှာ ကျွန်မ တို့ အောင်ပွဲခံရမှာ သေချာပါသည်။ မလွဲမသွေ အောင်ပွဲခံရမသည်ဟုလည်း ကျွန်မတို့ယုံကြည် ထား ပါသည်။
ယခုဆိုလျှင် မည်သည့်ဘေးအန္တရာယ်မျိုးကိုမျှ မကောင်းဆိုးဝါးက ဆက်လက်မပေးနိုင် တော့ပြီ။ အကျပ်အတည်းကြီးတစ်ခုလုံးကို ကျွန်မတို့ ဖြတ်သန်းလွန်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်မတို့ မှာ မည်သို့သော ဒဏ်ရာအနာတရ မှ မဖြစ်ပေါ်ခဲ့။ ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုနှင့် ကြုံတွေ့ရတော့ မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်မ၏ ခင်ပွန်း က အစကတည်းက ကြိုတင်မှန်းဆခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ သူ မှန်းဆခဲ့သည့် အတိုင်းလည်း မှန်ခဲ့သည်။
ကြုံရာပြဇာတ် တွင် ချီကောက်လိုက်ပြီး ကပြအသုံးတော်ခံရသော ပြဇာတ်မင်းသမီး၏ အဖြစ်မျိုးနှင့်ပင် တူနေသေးတော့ သည်။ လွတ်မြောက်မှုအတွက် စွန့်လွှတ်မှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့ရ ပါသည်ဟုတော့ ဆိုရ ပါမည်။ သို့သော်လည်း ဘဝဇာတ်ခုံပေါ်တွင်မူ ကျွန်မကောင်းစွာ ကပြ အသုံးတော်ခံပြီးပါပြီ။ အတွေ့အကြုံ များလည်း ရင့်ကျက်လာပါပြီ။ ထို့်ကြောင့်လည်း ကျွန်မတို့ ၏ ဘဝငြိမ်းချမ်းသာယာမှုနှင့် ဘဝလုံခြုံမှု အတွက် အာမခံချက်များ ရရှိနိုင်မည်ဆိုလျှင် ကျွန်မ၏ အာရုံငါးပါးခံစားချက်များကို လိုလို လားလား ပေးအပ်ပါမည်။
ပျော်ရွှင်ခြင်းတရားဟူသည်မှာ တန်ဖိုးထားအပ်သော ပိုင်ဆိုင်မှုကား မဟုတ်။ စိတ်နှင့် သက်ဆိုင်သော အတွေးအခေါ်နှင့် သက်ဆိုင်သော အရာသာလျှင် ဖြစ်ချေသည်။ ကျွန်မတို့ လင်မယားအနေဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲ ရသော အချိန်ကာလများကို အမှန်တကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါ သည်။ သို့သော် အခြားအချိန် ကာလများလည်း မုချဆက်ဆက်ရှိရပါဦးမည်။ နာရီလက်တံနှင့် တိုင်းထွာမှု မပြုအပ်သော အချိန်ကာလ ဟူသည်မှာ ရှိရပါဦးမည်။ ကျွန်မ၏ ချစ်လင်ပြုံးသည့် အချိန်ကာလကို မုချမသွေ ရောက်ရဦးမည်။
ကျွန်မတို့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်မှာ အတူတကွ လက်တွဲပြီး တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း ရပ်တည်နေ မိပြီဖြစ်ကြောင်း ကျွန်မသိပါသည်။ လက်တွဲမပျက်ကျောချင်းကပ် ရင်ချင်းအပ်ကာ ဘဝခရီးကို ကျွန်မတို့ ချီတက်ကြ ရပါမည်။ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုဟူသည် မရှိ။ အမြင်းချင်းမတူ ဆိုသည် မရှိ။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ကြား တွင် အကာအဆီး အနှောက်အယှက်ဆိုလို့ ဘာဆို ဘာမျှမရှိ။
ကျွန်မတို့ လင်မယားကြားမှာ လျှို့ဝှက်ဖုံးကွယ်ထားသည့် အရာဆိုလို့လည်း လုံးဝမရှိ။ အရာအားလုံးကို မျှဝေ ခံစားကြသည်။ ကောင်းတူဖိုးဖက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မတို့ ယခုတည်းခိုနေ သည့် ဟိုတယ်သေးသေး ကလေးသည် အလွန်တရာ ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည်မှာ မှန်ပါသည်။ အစားအသောက်များ ညံ့သည်မှာ မှန်ပါသည်။ တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက်ကြုံတွေ့ရသည့် ပတ်ဝန်း ကျင်နှင့် အဖြစ်အပျက်များအားလုံး အတူတူဖြစ်နေ သည်မှာလည်း မှန်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်မတို့အတွက်ဘာတစ်ခုမျှ အရေးမကြီးတော့ပါ။
ခမ်းနားကြီးကျယ်လှသော မည်သည့် ဟိုတယ်ကြီးများထဲမှာမဆို ကျွန်မ၏ခင်ပွန်းသိ ကျွမ်းသော လူပေါင်းများစွာကိုလည်း ကျွန်မတို့ တွေ့ရဦးမည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျတော့လည်း ကျွန်မ တို့ ငြီးငွေ့မိ သည်မှာအမှန်။ သည်လို ငြီးငွေ့မှုဆိုသည်ကလည်း တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ စိုးရိမ် ထိတ်လန့် မှုများ ကို ပြေပျောက်စေတတ်ပါသည်။
ပုံမှန် အဖြစ်အပျက်လေးများ ဖြစ်ပျက်နေကြသည့်အတိုင်း ကျွန်မတို့ ကျေကျေနပ်နပ် ကြီး နေထိုင် ပစ်လိုက်ကြပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် ကျွန်မ၏ယောက်ျားကို အကျယ်ကြီး စာဖတ်ပြ ရသည့် အလုပ်မှာ ကျွန်မ အလွန်တရာတိုးတက် ကျွမ်းကျင်နေပြီ။ ယခုလို ရိုးရိုးဘဝကလေးမှာ နေရသည်ကို ကျွန်မယောက်ျား လည်း အသားကျနေပြီ။
စာပို့သမားမလာသည့် အခါများတွင် သာ သူစိတ်လက်မရှည်နိုင်ဘဲ ၇ှိတတ်သည်။ စာပို့သမား အလာ နောက်ကျခြင်း သည် သတင်း စာများကို တစ်ရက်နောက်ကျပြီး ဖတ်ရတော့မည်ဆိုသည့် သဘောဖြစ် သည်။ သညလိုအခါမျိုး တွင် ကိုယ်သိချင်သည့် ခရစ်ကက်ကစားပွဲ အနိုင်အရှုံးသတင်း ကို ရေဒီယိုဖွင့်ပြီး နားထာင်နိုင်သည်ကား မှန်ပါ၏။ သို့သော်လည်း ရေဒီယိုသံက ကျွန်မတို့ စိတ်ကို အနှောင့် အ ယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ သည်တော့လည်း အရှုံးအနိုင်သတင်း သိချင်စိတ်ကလေးကို အသာမျို သိပ်ထားလိုက် ရပါတော့သည်။ ရက်နောက်ကျပြီးမှ သိရသော်လည်း ကိုယ်မသိသေးသည့် သတင်းသည် ကျွန်မ တို့အတွက် သတင်းဦးပဲ မဟုတ်ပါလား။
အစမ်းယှဉ်ပြိုင်ကြသည့် အားကစားပွဲများ မပြောပလောက်သည့် လက်ဝှေ့သတင်းများ ဘိလိယက် အမှတ်များသည်ပင် ကျွန်မတို့၏ ငြီးငွေ့မှုကို ပြေပျောက်စေနိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။ တကယ်ဆိုတော့ ကျွန်မ တို့သည် ကြိတ်ခွဲရန် စပါးပြတ်နေသည့် ဆန်စက်ကြီးတစ်လုံးနှင့် တူညီ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းသားငယ်တို့၏ အားကစားသတင်းများ ခွေးပြိုင်ပွဲ သတင်း များ တောရွာကလေး များတွင် ကျင်းပသည့် အားကစားသတင်း ကလေးများသည်ပင်လျှင် ကျွန်မတို့၏ ဆာလောင် မွတ်သိပ်နေသော ဆန်စက်ကြီး အတွက် ကြိတ်ခွဲစရာ စပါးများသဖွယ် ဖြစ်နေပါတော့သည်။
ကျွန်မတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တည်း မွေရပ်ဌာနေ အင်္ဂလန်မြေနှင့် ဝေးကွာရာသည် ကျွန်ကလေး တစ်ခုပေါ် က ဟိုတယ်ကလေးထဲမှာ ရောက်ရှိနေကြပါသည်။ သည်လိုနေရသည့် အချိန်မျိုးတွင် မဂ္ဂဇင်းနှင့် သတင်းစာဟောင်းများကို ဖတ်ရှုရသောအခါ ကျွန်မတို့အဖို့ ကိုယ်ဌာနေ သို့ ပြန်ရောက်သွားသလို ခံစား ရပြန်သည်။ စာရွက်ဟောင်းများကို တစ်ရွက်ချင်း လှန်လှောရင်း မန်ဒါလေ စံအိမ်ကြီး ကို လည်းကောင်း၊ စံအိမ်ဝင်းအတွင်းရှိ သစ်တောကြီးကို လည်းကောင်း ပြန်လည် အမှတ်ရ မြင်ယောင်နေမိပါသည်။ ဖုန်ဆိုးတော မှ သစ်ဆွေး သစ်ပုပ်နံ့ ကလေးများကိုပင် နှာခေါင်းမှာ ရူရှိုက် ရသလို ခံစားမိပါသည်။
တစ်ကြိမ်တွင်မူ ချိုးလင်းပြာများအကြောင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါလာသည်။ ထိုဆောင်း ပါးကို ကျွန်မယောက်ျားကြားလောက်အောင် အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် ဖတ်ပြနေရင်း မန်ဒါလေစံ အိမ်ကြီး ရှိ တောနက်နက်အတွင်း သို့ ကိုယ်တိုင် ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသလို ကျွန်မ၏ စိတ် ထဲမှာ ခံစားနေ ရပြန်ပါသည်။
မန်ဒါလေစံအိမ် ၏ တောနက်အတွင်းမှာ ချိုးလင်းပြာများက ကျွန်မ၏ ခေါင်းပေါ်တွင် အတောင်ပံ တဖျတ်ဖျတ်ခတ် လျက်။ သူတို့၏ နူးညံ့ပျောင်းနွဲ့သော မဖိုခေါ်သံများကိုလည်း ကျွန်မ၏နားထဲမှာ ကြာယောင် လျက်။ သည်ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားကြောင့် နွေကာလ၏ မွန်လွဲပိုင်း အပူဒဏ် သည်ပင်လျှင် လျော့ပါးသွားကာ ချမ်းမြငြိမ်းအေးလာသည်ဟု ကျွန်မ ထင်မိပါသည်။ ကျွန်မတို့၏ အချစ်တော်ခွေး ကလေး ဂျက်စ်ပါ ရောက်လာတော့မှပင် ချိုးလင်း ပြာတို့၏ သာယာငြိမ်းအေးသော ကမ္ဘာကလေး မှာ ပျက်ပြားသွားရလေတော့သည်။ ခွေးက လေး ဂျက်စ်ပါက မြေကြီးကို အနံ့ခံရင်း ကျွန်မ ကို လိုက်ရှာနေသည်။
ဂျက်စ်ပါရောက်လာသည်နှင့် တပြိုင်တည်း ချိုးလင်းပြာကလေးများမှာ သူတို့ ပုန်း အောင်းနေသည့်နေရာ များမှ ချောက်ချောက်ချားချားဖြင့် ထပျံ ပြေးသွား ကြလေသည်။ ကျွန်မ တို့ လှမ်းမမြင်နိုင်သည့် အတောင်ပံ ခတ်သံများကိုလည်း မကြားရသည့် နေရာများသို့ ပျံပြေးကြ လေတော့သည။ ချိုးလင်းပြာ ကလေးများ မရှိတော့သောအခါတွင် သည်နေရာတွင် တိတ်ဆိတ်မှုအသစ်တစ်ခုက ဖုံးလွှမ်းကြီးစိုး လာသည်။
ကျွန်မလည်း နေမထိနိုင်မသာဖြစ်လာသည်။ နေရောင်လည်းနည်းသွားပြီ။ သစ်ကိုင်း သစ်ခက်များ ကလည်း ညိုမှောင်လာပြီ။ အရိပ်များကလည်း ရှည်လျားလာပြီ။ ယခုအချိန် လောက်ဆိုလျှင် စံအိမ်ကြီး အတွင်း မှာ လတ်ဆတ်သော ရပ်စ်ဗယ်ရီသီးများနှင့် လက်ဖက်ရည် ပွဲက အသင့်ပြင် ဆင်ပြီး လောက်ပြီ။ မြေပြင် ပေါ် မှာ လဲလျောင်းနေရာမှ ကျွန်မ ထထိုင်မိပေလိမ့် မည်။ ဂါဝန် မှာ ကပ်နေ သည့် ရွက်ဟောင်းကလေး များကို ခါချမိပေလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ ဂျက်စ်ပါ ကို လေချွန်ခေါ်ကာ အိမ်ကြီး ဆီ သို့ ဦးတည်လျှောက်လာမိပေလိမ့်မည်။ နောက်ဘက်သို့ သမင်လည်ပြန် တစ်ချက် လှမ်းကြည့်ရင်း ခပ်သုတ်သုတ်လျှောက် လာမိပေ လိမ့်မည်။
ချိုးလင်းပြာ အကြောင်း ဆောင်းပါးကို ခပ်ကျယ်ကျယ် ဖတ်ပြနေခိုက်မှာပင် အတိတ်ဆီ သို့ ပြန်ရောက် သွားရသည်မှာ ထူးဆန်းပေစွ။ ကျွန်မယောက်ျား၏ မျက်နှာပေါ်တွင်လည်း ညို့ မှိုင်းသွားသည်ကို ကျွန်မတွေ့ လိုက်ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆောင်းပါးကို ဆက်မဖတ်တော့ဘဲ ရုတ်တရက် ရပ်ပစ် လိုက်မိသည်။ ပြီးတော့ ခရစ်ကက် အားကစားပြိုင်ပွဲသတင်း ဖော်ပြထားသည့် စာမျက်နှာ အရောက် တစ်ရွက်ချင်း လှန်လှောသွားမိသည်။ အားကစား သတင်းက ခြောက်ကပ်ကပ်နိုင်လှပါသည်။ သို့သော် လည်း သူ့မျက်နှာအမူအရာမှာ မိနစ် အနည်းငယ်အတွင်း နဂိုနေရာ သို့ ပြန်ရောက်လာသည် ကို တွေ့ရပါသည်။
ကျွန်မတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး အတိတ်၏ လွှမ်းမိုးမှုမှ လွတ်မြောက်လာကြ ပါပြီ။ ကျွန်မအဖို့လည်း သင်ခန်းစာကောင်းကောင်းရခဲ့ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်သတင်းများကို ကျွန်မ ဆက်ဖက်နေ လိုက်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်အားကစားသတင်းများ နိုင်ငံရေးသတင်းများနှင့် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသည့် သတင်းများ ကို ဖတ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မကတော့ မန်ဒါလေစံအိမ်မှ အကြောင်းများကိုသာ တိတ်တခိုးဦး စားပေးပြီး စဉ်းစားနေ မိပါသည်။ အရောင်စုံသော သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊ ထုံပျံ့သည့် ရနံ့များ၊ အသံပေါင်းစုံများ၊ မိုးရေစက် များ၊ စမ်းရေစီးသံများ၊ ပင်လယ်ပြင်မှ လှိုင်းပုတ်သံများကို ကြား ယောင်နေမိပြန်ပါသည်။ ယင်းအရာများ အားလုံးသည်ကား မန်ဒါလေစံအိမ်ကြီး၏ မမေ့ ပျောက်နိုင်စကောင်းသော အရာ များပင်ဖြစ်ကြောင်း ငြင်းကွယ်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
အင်္ဂလန် ကျေးလက်ဒေသများအကြောင်းကို နောကျေနေအောင် ကျွန်မသိပါသည်။ ဘယ်မြေတွေကို ဘယ်သူ ပိုင်ကြောင်း၊ ဘယ်ဖုန်းဆိုးတော များသည် ဘယ်သူ့လက်ဝယ်ရှိ ကြောင်း၊ ဘယ်သူ တွေ တောလည် တုန်းက ခါ အကောင်ပေါင်း မည်မျှရခဲ့ကြောင်း၊ မည်သည့် အရပ်တွင် မည်သည့် ငါးတွေ ပေါများနေကြောင်း ခရေစေ့တွင်းကျလောက်အောင်ပင် ကျွန်မ သိနေပါသည်။ သတင်းတွေ ကို ဖတ်နေရင်းမှာပင် အင်္ဂလန်၏အနံ့အသက်များကို ရှူရှိုက်နေရ သလို ရှိလာပါသည်။
မြင်တွေ့နေရသည့် စပျစ်ခြံများနှင့် ကျောက်တုံးကျောက်ခဲများမှာ ကျွန်မအဖို့ ဘာမျှ အဓိပ္ပာယ် မရှိတော့ပါ။ ဖြစ်နိုင်မည်ဆိုလျှင် ကျွန်မ၏စိတ်ကူးယဉ်မှုများကို ချွန်းအုပ်လိုက်ချင်ပါ သည်။ တစ်ခုတော့ ရှိပါသည်။ သည်လို စိတ်ကူးယဉ်မှုကလေးများကြောင့်လည်း ခါးသီးမှုနှင့် ၀မ်းနည်းမှုများကို ခံနိုင်ရည် ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ကူးယဉ်မှုကလေးများကြောင့်လည်း မွန်း လွဲပိုင်းအချိန်မှာ ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်စွာ ကျွန်မ နေနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ မရှိသော လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းကလေးမှာ ကျွန်မ ပျော်ရွှင်လန်းဆန်းစွာဖြင့် အပြုံးမပျက် ထိုင်နေနိုင်ခြင်းဖြစ် ပါသည်။ ကျွန်မတို့၏မွန်းလွဲပိုင်း လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းကလေးမှာ တကယ်ပင် ဘာမျှ ဖွယ်ဖွယ် ရာရာမရှိပါ။ ကျွန်မတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အတွက် ပေါင်မုန့် နှစ်ချပ်နှင့် ထောပတ်၊ ပြီးတော့ တရုတ်ခြောက်နှင့် ဖျော်ထားသော လက်ဖက်ရည်။ ဒါပဲ ဖြစ်ပါ သည်။ အင်္ဂလန်မှာတုန်းကတော့ ဒီလို မဟုတ်။ ယခုတော့ ကျွန်တော့ ကျွန်တော်တို့ဇနီှးေမာင် နှံ လူသူ ကင်းဝေးရာ တွင် ရှောင်ပုန်း ရင်း ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရှာဖွေနေခိုက် ဖြစ်ပါသည်။
ယခု လသာဆောင်ကလေးပေါ်မှာထိုင်နေရင်း မန်ဒါလေစံအိမ်ကြီး၏ ညနေလေးနာရီခွဲ အချိန်ကို ကျွန်မ စဉ်းစားနေ မိသည်။ စာကြည့်ခန်းထဲရှိ မီးလင်းဖိုရှေ့မှာ စားပွဲကို ခင်းကျင်းပြင်ဆင်ထားသည်။တံခါးက ပွင့်နေ သည်။ ထူးခြားသည့် အပြောင်းအလဲလည်းမရှိ။ ငွေလင်ပန်း၊ လက်ဖက်ရည်ပန်းကန် ၊ခရား ၊ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသော စားပွဲခင်း၊ နားရွက်ဖားဖား ကျနေသော အချစ်တော် ခွေးကလေး ဂျက်စ်ပါက ထုံးစံ အတိုင်း ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ရှိနေသည်။ ကျွန်မတို့လင်မယားကတော့ တို့ကနန်း ဆိတ်ကနန်း သာ စားကြသောက်ကြပါသည်။ သို့သော် စားပွဲပေါ်မှာ ခင်းကျင်းပြင်ဆင်ထားသည့် အစားအစာတွေက များလွန်းလှသည်။ ယခုပင် ကျွန်မ၏ မျက်စိထဲမှာ ပြန်လည်မြင်ယောင်နေမိပါသည်။
နူးညံ့သည့် ပေါင်မုန့်၊ ဌာပနာနှင့် မုန့်ကြွပ်၊ ပူနွေးသော အကြော်ပေါင်းစုံ၊ အရသာထူးကဲလှသော ဆင်းဒဝစ် များ ၊လျှာပေါ်တင်လိုက်ရုံနှင့် အရည်ပျော်သွားသည့် ကိတ်မုန့် စသည်ဖြင့် နတ်သုဒ္ဓါတမျှ အရသာ ရှိသော စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေ စုံလင်လှပါသည်။ စားရမဲ့ သောက်ရမဲ့ ဖြစ်နေသော အိမ်ထောင်စု တစ်ခုအဖို့ ရက်သတ္တတစ်ပတ်စာတော့ ကောင်းစွာလုံလောက်သော အစားအစာ များ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မတို့ မကုန်နိုင်သောအခါတွင် ယင်းအစားအစာများ ဘယ်ရောက်ကုန်သည်ကို ကျွန်မ လုံးဝ မသိရှိ ခဲ့ရပါ။ သို့ကလို အလဟသ ဖြစ်ကုန်ရသည့်အတွက် တစ်ခါတစ်ရံတော့လည်း ကျွန်မ ပူပင်သောက ရောက်မိခဲ့ပါသည်။
သို့သော်လည်း ထိုကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး မစ္စက်ဗင်ဗာကို ဘယ်တုန်းကမျှ ကျွန်မမမေးရဲခဲ့။ သည်မိန်းမကြီး က ကျွန်မ ကို မထီလေးစားကြည့်ပေလိမ်မည်။ သူ ပြုံးနေကျအတိုင်း နိုင့်ထက်စီးနင်း အပြုံးမျိုး ကို ပြုံးပေလိမ်မည်။ အေးတိအေးစက် အပြုံးမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပြီးတော့ သူပြောမည့် စကားလုံး များကိုလည်း ကျွန်မ စိတ်ကူးကြည့်နေသည်။
"မစ္စက်စ် ဒီဝင်းတား အသက်ရှင်နေတဲ့ အခါတုန်းက တောင်မေး မြောက်မေး ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး" ဆိုသော စကားမျိုး။
မစ္စကဒင်ဗာ။ ယခုဆိုလျှင် ဒီမိန်းမကြီး ဘာတွေလုပ်နေသလဲဟု ကျွန်မ စဉ်းစားကြည့်မိသည်။ သူနှင့် ဂျက်ဖေဗယ် တို့ ဘာတွေလုပ်နေကြသနည်း။ သူ့မျက်နှာအမူအရာကို မြင်ရခြင်းအားဖြင့် ကျွန်မ မနေတတ် မထိုင်တတ် ဖြစ်ခဲ့ရသည်ကိုလည်း ပြန်စဉ်းစားကြည့်နေမိသည်။
"ဒီမိန်းမကြီး က ငါ့ကို ရဘက်ကာ နဲ့ နှိုင်းနေပါပေါ့လားဟုလည်း စိတ်ထဲက တွေးမိ သည်။ သည်လို တွေးလိုက်မိ'' သည်နှင့်တစ်ပြုိုင်တည်း ကျွန်မတို့လင်မယားနှစ်ယောက် ကြား သို့ ထက်လှ စွာသော ဓါးသွားကဲ့သို့ အရိပ်ကြီးတစ်ခုက ထိုးကျလာတော့သည်။
ရှိပါစေတော့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ယခုအခါမှာတော့ အားလုံးပြီးသွားပါပြီ။ အားလုံး ပြည်ဖုံး ကားချပြီးသွားပါပြီ၊ ကျွန်မ အဖို့ ဘာမျှ သောကရောက်စရာ မရှိတော့။ ကျွန်မတို့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက် စလုံး ဘေးအန္တရာယ် အပေါင်းတို့မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ကြပါပြီ။ ကျွန်မအပေါ်မှာ အလွန် သစ္စာရှိ သည့် ခွေးကလေး ဂျက်စ်ပါသည်ပင်လျှင် တောထဲမှာ ဆော့ကစားဖို့ ပြေးထွက်သွားချေ ပြီ။
မန်ဒါလေစံအိမ် ဆိုသည်မှာလည်း မရှိတော့ပြီ။ တောအုပ်အလယ်မှာ အနှစ်အကာကင်းမဲ့ သော ဥခွံကြီး လို ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ အိပ်မက်ထဲမှာ ကျွန်မမြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်း ဖြစ်ချေသည်။
ချုံနွယ် ပိတ်ပေါင်းတို့ ရှုပ်ထွေးနေသည်နေသည်။ ကျေးငှက်သရကာအပေါင်းတို့ မင်းမူ နေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတော့ ကျွန်မ၏ ချစ်လင်သည် ထိုတောအုပ်ထဲမှာ လမ်းလျှောက်နေပေ လိမ့်မည်။ ထိုစဉ် ရုတ်တရက် မိုးရွာချလိုက်သောကြောင့် မိုးခိုစရာကို ရှာလိမ့်မည်။ တကယ်လို့ သာ သူ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်နေ မည် ဆိုပါက အပြစ်အနာအဆာကင်းမဲ့သူလို ဆက်ပြီး လမ်း လျှောက်နေပေ လိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း မန်ဒါလေစံအိမ်ကြီးထဲမှ သစ်တောငယ်သည် ကား သူနှင့် ဘာမျှ မသက်ဆိုင်တော့ပြီ။
ပင်လယ်ကွေ့ ကလေးမှာရှိနေသည့် တိုက်အိမ်ကလေး၏ အမိုး အောက်မှာ နားခိုရမည် ဆိုလျှင်လည်း သူ ပျော်ပိုက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ အာရုံတင်းကျပ်စွာ ခံစားခဲ့ရသည့် အကြောင်း များကို သည် ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ပြန်ပြောင်း အမှတ်ရစရာ ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သစ်ကိုင်းတွေ အုပ်ဆိုင်း ထားသည့် မော်တော်ကားလမ်းချိုးကလေး၏ ထောင့်တစ်နေရာသည်လည်း ထိုနည်း လည်းကောင်း ပင် ဖြစ်ပါသည်။ သည်နေရသည် ခေတ္တခဏရပ်နားရန်နေရာ မဟုတ်ပါ။ နေဝင် ချင်လျှင် ဝင်ပါစေတော့။ ရပ်နား မည် မဟုတ်ပါ။
ညောင်ရွက်များကြွေကျလာသောအခါတွင် ညဉ့်ဦးဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသော အမျိုး သမီးတစ်ယောက်၏ လှုပ်ရှားသံ များနှင့် တူလှပါသည်။ ညောင်ရွက်များ ကြွေကျလာပြီးမြေပြင် ပေါ်မှာ ရှပ်တိုက်ပြေးကြသော အခါ တဖျောက်ဖျောက်အသံကို ကြားနေရသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ခပ် သုတ်သုတ် လျှောက်သွားသည့် ခြေသံများနှင့် တူသေးတော့ သည်။ ကျောက်စရစ်ခဲ ရောပြွမ်း သည့် မြေပြင်ပေါ်မှာ ခွာမြင့်ဖိနပ်ရာကလေးများပင် ထင်ကျန်ရစ်ခဲ့ သယောင်။
ထိုအကြောင်းများကို ပြန်လည် အမှတ်ရမိသောအခါတွင် လက်ရှိ ကျွန်မတို့ထိုင်နေကြ သည့် လသာဆောင် ကလေးပေါ်မှ ဘဝကိုပင် သတိပြန်လည်လာသည်။ စိတ်သက်သာရာ လည်းရမိသည် အမှန်။ သည်ပေါ်မှာ အရိပ်ဟူ၍ မရှိ။ နေအလင်းရောင်အောက်မှာ စူးရှ လှသည်။ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲများ ပေါများလှသည့် စပျစ်ခြံကလည်း နေရောင်အောက်မှာ ကျဲကျဲ တောက်ကြည် လင်နေသည်။ ယာတဲ ကလေးကလည်း ဖုန်အလိမ်းလိမ်းဖြင့် ဖြူဖွေးနေသည်။
တစ်နေ့သော အခါတွင် သည်မြင်ကွင်းကလေးကို မြတ်နိုးသော ခံစားချက်အပြည့်ဖြင့် ကျွန်မ ကြည့်မိကောင်းကြည့်မိပါလိမ့်မည်။ ယခုတော့မူ သည်မြင်ကွင်းကလေးက ကျွန်မကို အတွေး ကွန်ယက် ဖြန်ကျက်စေပါသည်။ နှစ်သက်မြတ်နိုးခြင်းကား မဟုတ်။ အနည်းဆုံး ယုံ ကြည်ချက်ဖြင့် အတွေး ကွန်ယက် ဖြန့်ကျက်မိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်ချက်ကို အရည်အချင်း တစ်ခုအဖြစ် ကျွန်မ တန်းဖိုး ထားပါသည်။ ယုံကြည်ချက်ကို ရရှိသည့် အချိန်ကား အတန်ငယ် နောက်ကျနေသည်မှာ မှန်ပါ၏။
ကျွန်မ၏ ချစ်လင်သည် ကျွန်မအပေါ်မှာ လုံးလုံးမှီခိုရပ်တည်နေရပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်လည်း ကျွန်မ၏စိတ်ဓာတ်သည် ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်လာပြီး ယုံကြည်ချက် အားမာန် များပါ ရရှိလာခြင်းဖြစ် ပါသည်။ အားနာတတ်သော၊ ကြောက်ရွံ့တတ်သော၊ သူစိမ်းတစ်ရံစာ များနှင့် တွေ့လျှင် ရှက်တတ်သော ကျွန်မ၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် အမူအကျင့်များလည်း မရှိတော့ပြီ။
မန်ဒါလေ စံအိမ်ကြီးသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်ရောက်ရှိလာသည့် အခါတုန်းကနှင့် လုံးလုံးကြီးသွားပါပြီ။ ထိုစဉ်ကမှုမျှော်လင့်ချက် အပြည့်။ စိတ်အားထက်သန်မှုကအပြည့်။ ပြီး တော့ မြင်မြင်ကရာလူကို မျက်နှာချိုသွေးဖို့လောက်သာ အာရုံထားနေမိခဲ့သည်။ ဟိတ်တစ် လုံး ဟန်တစ်လုံးနှင့် နေရကောင်းမှန်း မသိခဲ့။ ထိုကြောင့်လည်း မစ္စက်ဒင်ဗာလို မိန်းမစားမျိူး က တောင် ကျွန်မ အပေါ်မှာ အထင်သေးအမြင်သေးဖြစ်သည်ကို ခံခဲရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သည်စံအိမ်င်္ကြီး မှာ ယခင်က အိမ်ရှင်မ ရဘက်ကာ မရှိတော့သည့် နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်မကို ဘယ်လိုမြင်ကြ မည်နည်း။
ယခုတော့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ကောင်းစွာ ပြန်မြင်နေမိပြီ။ အဖြစ်အပျက်များ ကိုပြန်လည် သတိရသည့် အမှတ်ရစိတ်က ကုန်ဆုံးလွန်မြောက်ခဲ့သော နှစ်ပရိစ္ဆေဒပေါင်း များစွာကို ပေါင်းကူးတံတား သဖွယ် ပြန်လည် ဆက်စပ်ပေးလိုက်သည်။
ထိုစဉ်တုန်းက ကျွန်မ သည် ကိုယ်ထည်က မာတောင့်တောင့် ဆံပင်က တိုတို အသက် ကငယ်ငယ် မျက်နှာပေါ် မှာ ပေါင်ဒါမရှိ။ ဝတ်ဆင်ထားသည့် အဝတ်အစားများကလည်း ပုံမကျ ပန်းမကျ။ မစွက်ဗန်ဟော့ပါး သွားလေရာ နောက်ပါး မှ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့် လိုက်ပါခဲ့ရသော ဘဝ။
မစ္စစ်ဗန်ဟော့ပါး က နေ့လည်စာစားမည့် စားပွဲဆီသို့ ကျွန်မသို့ ဦးဆောင်ခေါ်သွား သည်။ သူ့အရပ်က ပုပု၊ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် က ဝဝဖိုင့်ဖိုင့်၊ ခွာမြင့်ဖိနပ်စီးထားရာ သူ့ခန္ဓာကုိုယ် အတ္တဘောကြီးကို တည်ငြိမ်အောင် မထိန်းနိုင် မဟန်နိုင် ဖြစ်နေသည်။ ခြေလှမ်း လိုက်တောအခါတိုင်းတွင် ကြီးမားလှသော သူ၏ တင်ပါးဆုံကြီးနှစ်ဖက် က နိမ့်တုံမြင့်တုံ ဖြစ် သွားသည်။ သူ့ခေါင်းပေါ်မှ ဦးထုပ်က အသစ်။ ငှက်မွေးကြီး တစ်ချောင်းက ထိုးထိုးထောင်ထောင်၊ ကျောင်းသားငယ်တစ်ယောက်၏ ဒူးခေါင်း လို ပြောင်ချောနေသော နဖူးကြီးကို ဦးထုပ်က မအုပ်မိ။
လက်တစ်ဖက် က ကြီးမားသည့်အိတ်ကြီးတစ်လုံးကို ဆွဲကိုင်ထားသည်။ ထိုအိတ်ကြီး ထဲမှာ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်များ၊ ဧည့်သည်များနှင့် တွေ့ဆုံရန် အချိန်းအချက်များ မှတ်ထားသည့် မှတ်စု စာအုပ်များ၊ ပြီတော့ ဟောလီဝုဒ်ဖဲမစားရာတွင် ရရှိသည့် အမှတ်များ တေးမှတ်ထား သော စာရွက် များနှင့် ပြည့်လျက်ရှိသည်။ ကျန်လက်တစ်ဖက်က မှန်ပြောင်းကြီးကို ကိုင်လျက်။ ထိုမှန်ပြောင်းကြီးကား အခြားသူ များ၏ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်၏ မဟာရန်သူတော်ကြီးပေ တည်း။
စားသောက်ခန်း၏ထောင့် ပြတင်းပေါက်အနီးရှိ သူထိုင်နေကျ စားပွဲမှာ ဝင်ထိုင်သည်။ ပြီးတော့ မှန်ပြောင်းကြီးကို မ,ကာ သူ၏ သေးငယ်ော ဝက်မျက်စိကလေးများမှာ ကပ်ကာ လက်ဝဲလက်ယာ ရှုိ မြင်ကွင်းများကို စူးစမ်းလေ့လာလေတော့သည်။ ပြီးတော့ မှန်ပြောင်းကြီးကို ကြိုးတန်းလန်းဖြင့် လွှတ်ချ လိုက်ကာ မကျေနပ်သံကလေးများ ရောစွတ်ကာ ပြောလေတော့ သည်။
"နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုလို့ တစ်ယောက်မှလဲ မရှိဘူး။ ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ ဟိုတယ် စရိတ်လျှော့ယူဖို့ အုပ်ချုပ် တဲ့ လူတွေကို ပြောရလိမ့်မယ်။ ဘာအတွက် ဒီမှာ လာတည်းတယ် လို့ သူတို့ထင်သလဲ။ စားပွဲထိုးကောင်ကလေးတွေ ရဲ့ မျက်နှာကိုများ ကြည့်ချင်လို့ လာတည်း တယ်လိုများ ထင်နေသလား"
ပြီးတော့ စားပွဲထိုး ကို သူ့ဘေးကို လှမ်းခေါ်လိုက်သည်။ သူ့အသံစူးစူးရှရှဖြင့် လွှသွား လို လေ ကို ဖြတ်သွားသည်။
ထိုနေရာသည်ကား မွန်တီကာလို အပန်းဖြေစခန်းရှိ ကိုတေဒါဇူး ဟိုတယ်စားသောက် ခန်းမကြီး ဖြစ်သည်။ ကျယ်လွင့်သည်။ ခမ်းနားသည်။ သပ်ရပ်သည်။ သန့်ရှင်းသည်။ ယခု ကျွန်မတို့ လင်မယားနှစ်ယောက် တည်းနေသည့် ဟိုတယ်သေးသေးလေးနှင့်ကား အိမ်သာ နှင့် နတ်ဘုံနတ်နန်းလို ကွာချင်တိုင်း ကွာခြား လှပါ၏။
ပြီးတော့ ဟိုတုန်းက ကျွန်မ၏ ဖော်သဟဲနှင့် ယခုလက်ရှိ ကျွန်မ၏ အဖော်သဟဲတို့ သည်လည်း ကွာချင်တိုင်း ကွာခြားလှပါ၏။
ကျွန်မ၏ ယခုအဖောသဟဲ သည် ဣနြေ္ဒသိက္ခာရှိ၏။ အချိုးအဆက်ပြေပြစ်သော လက်ချောင်း ကလေးများကို လှုပ်ရှားလိုက်ပုံမှာလည်း အေးငြိမ်းလှ၏ ။ ပြီးတော့ မကြာခဏ ကျွန်မ ကို မော့ကြည့် ကာလည်း ပြုံးတတ် ရယ်တတ်ပါသည်။
ဟိုတုန်း က ကျွန်မ၏ အဖော်သဟဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော မစ္စစ်ဗန်ဟောပါးက သည်လိုမဟုတ်။ လက်ချောင်းကြီး များကလည်း တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင် ပုံဆိုးပန်းဆိုး။ ထိုလက်များဖြင့် ဟင်းခွက်ကို လည်း လောဘတကြီးအငမ်းမရနှိုက်တတ်သည်။ အသားဖတ်များကိုချည်း ကျွန်မ က ရွေးနှိုက် နေလေရော့ သလား ဟူသော မသင်္ကာ မျက်လုံးများဖြင့် ဝေ့ဝဲကြည့်တတ်သည်။ သည် အတွက်တော့ သူပူစရာ မလိုပါ။ သူ့ကို မျက်နှာလုပ်မည့် စားပွဲထိုးတွေက တကယ်ဆိုတော့ ကျွန်မက ဘာမျှ မဟုတ်။ မစ္စစ်ဗန်ဟော့ပါး ၏ အစေအပါးတစ်ယောက်မျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း စားပွဲထိုး များက သူ့ကို မျက်နှာလုပ်သည့်အနေဖြင့် ကျွန်မရှေ့ မှာ ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ကို လာချပေး သည်။ ပန်းကန်ထဲမှာတော့ ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့် ဝက်လျှာ။ ပူပူနွေးနွေးလည်းမဟုတ်။ အေးစက်နေပြီ။ တခြား တစ်ယောက်ယောက် က မစားချင် သဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် နာရီဝက်လောက် က ပြန်သိမ်းခိုင်း လိုက်သော ဟင်းများဖြစ်သည်။ သည် လိုဟာမျိုးကိုမှ ကျွန်မရှေ့မှာ လာချပေးရက်ကြသည်။ စားပွဲထိုးတွေ အဖြစ်သဲကြပုံ ကတော့ သြချလောက်ပါသည်။
တောပိုင်း က အိမ်ကလေးတစ်လုံးမှာ မစ္စစ်ဗန်ဟော့ပါးနှင့် ကျွန်မအတူတူ နေစဉ်က အကြောင်းများ ကိုလည်း အမှတ်ရမိပါသေးသည်။ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့် ကျွန်မက ဘဲလ်တီးပြီခေါ်သော်လည်း အိမ်ဖေါ် အမျိုးသမီးက ဘယ်တော့မှ ပေါ်မလာ။ ကျွန်မ၏ဖိနပ်များ ကိုလည်း ဘယ်တော့မှ ယူမပေး။ ယုတ်စွ အဆုံး မနက်ပိုင်း လက်ဖက်၇ည်လာပေးလျှင်လည်း ကျွန်မ၏ အိပ်ခန်းတံခါးအပြင်ဘက်မှာ သည်အတိုင်း ချသွားတတ်သည်။ ကျွန်မ အိပ်ရာကနိုးပြီး တံခါးဖွင့်လိုက်သောအခါ လက်ဖက်ရည် က ရေခဲလို အေးနေပြီ။
ယခု ကိုတေဒါဇူး ဟိုတယ်တွင် နည်းနည်းတော့ တော်သေးသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့ သော်လည်း အများ ကမူ ကျွန်မကို မထီမဲ့မြင် လုပ်တတ်ကြပါသည်။ ဧည့်စာရေးထံတွင် တံဆိပ် ခေါင်း သွားဝယ်သော အခါတွင်လည်း စာရေးက ပြီတီတီလုပ်ချင်ပါသည်။ ဒါမျိုးတွေကို ကြုံရ တော့ ကျွန်မ စိတ်ထိခိုက် ခဲ့ရသည်။ တကယ် ဆိုတော့ ကျွန်မအသက်က အများကြီးငယ်သေး သည်။ အတွေ့အကြုံကလည်း ဘာမျှ မရှိ။ အရိုင်းသက်သက်လေး။ ဘာကိုမဆို စိတ်ထိခိုက် လွယ်သော အခြေအနေမျိုး။
အဲသည်နေ့တုန်း က ကျွန်မစားခဲ့ရသည့် ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့် ဝက်လျှာဟင်းကို မှတ်မိ နေသေးသည်။ ချက်ထားပုံ က ခြောက်ကပ်ကပ်။ အရသာ လုံးဝမရှိ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် "ဒါတွေ မစားချင်ဘူး" ဟု ငြင်းပယ် ဝံ့သော သတ္တိမျိုး ကျွန်မတွင် မရှိခဲ့ပါ။ ဘာစကားမှမပြောဘဲ ကျွန်မ တို့နှစ်ယောက် တိတ်ဆိတ် စွာပင် ကိုယ်ထမင်းကိုယ် စားနေကြသည်။ အဘွားကြီးကလည်း အစာထဲမှာသာ လုံးဝ အာရုံနှစ်မြှပ်နေ သည်။ ပလုတ်ပလောင်းစားရင်း ဟင်းရည်များ သူ့မေး ဖျားပေါ်သို့ စီးကျနေသည်ကပင် ထင်ရှားနေ သည်။
သည်လိုရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် အငမ်းမရဖြစ်နေပုံမျိုးကို ကျွန်မ မမြင်မတွေ့ချင်ပါ။ ထို့ ကြောင့် တစ်ဖက်သို့ မျက်နှာလွှဲ လိုက်မိသည်။
သို့ကလို မျက်နှာလွှဲလိုက်တော့မှ ကျွန်မတို့ဘေးက စားပွဲမှာ ယခင်ရက်များကလို လူသူကင်းမဲ့ မနေကြောင်း သတိပြုမိလေတော့သည်။ အထူးဧည့်သည်တော်ကြီးများကို အရေး တယူဖြင့် ခါးညွတ် အရိုအသေပြု သလို ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်က အရိုအသေပေးပြီး ဧည့်သည်အသစ်ကို ခေါ်လာသည်။ ကျွန်မ တို့နှင့် မလှမ်းမကမ်းရှိစားပွဲမှာ နေရာချထားပေး သည်။ မစ္စစ်ဗန်ဟော့ပါသည် ခက်ရင်းကို ချလိုက်ပြီး မှန်ပြောင်းကို လှမ်းဆွဲသည်။ လူသစ်ကို လှမ်းကြည့်သည့် သူ့အပြုအမူကြောင့် ကျွန်မ အရှက်ကြီး ရှက်သွားမိပါသည်။ သည်အဘွားကြီး စပ်စပ်စုစုနိုင်လှသည်ကို လူသစ်ဖြစ်သူက မသိ။ အစားအသောက် စာရင်း ကိုသာ ငုံ့ဖတ်နေ သည်။ မစ္စစ်ဗန်ဟောပါးက သူ့မှန်ပြောင်း ကို ဖျောက်ကနဲ မြည်အောင်ပိတ် လိုက်သည်။ ပြီးတော့ စားပွဲကိုကျော်ပြီး ကျွန်မဘက်သို့ ကိုယ်ကို ကိုင်းလာသည်။ သူ၏ မျက်လုံးကျဉ်း ကလေးများမှာ စိတ်အားတက်ကြွမှုကြောင့် တောက်ပြောင်နေ သည်။ သူပြောလိုက်သည့် အသံ ကလည်း ကျယ်လောင်လွန်းလှသည်။
"မက်ဇ်ဒီဝင်းတား ဆိုတာ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲကွယ့်။ မန်ဒါလေစံအိမ်ကြီးကို ပိုင်တာ သူပေါ့။ မင်း ကြားဖူး ပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကြည့်ရတာ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ ဖြစ်နေပုံပဲ။ ဟုတ်တယ်နော်... သူ့မိန်းမ ကွယ်လွန် သွားတဲ့ အတွက် သူ့ခင်မျာ အခုထက်ထိ မဖြေဆည်နိုင်ဘူးလို့ အများတကာက ပြောနေတယ်...."
Posted by SHWE ZIN U at 4:39 AM0comments Links to this post
သာဓု ၏ အတာ, အပိုင်း (၄၆) (ဇာတ်သိမ်း)
"ဟေ့ကောင် မင်း ဘယ်သွားဦးမလို့လဲ"
ယခင် မော်လမြိုင်သွားစဉ်ကလည်း ဤလိုပင် ဦးချခဲ့ဖူးသောကြောင့် ကိုထွန်းအောင် က ကောက်ကာ ငင်ကာ မေးလိုက်သည်ကို "မသွားပါဘူး" သို့ဖြေရင်း အတာ ထရပ်ကာ လက်ထဲ တွင် ကိုင်ထားသော စက္ကူအိတ်ကလေးကို သူ့မေမေ အား လှမ်း ပေးလိုက်ရင်းက "အဲဒါ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်လို့ ရတဲ့ ပထမဆုံးလခ မေမေ၊ မေမေ သုံးချင်တာ သုံးပေါ့၊ ကျွန်တော် ကန်တော့ ပါတယ်"
သို့ အတာပြောနေစဉ် မှာပင် မသိန်းမေက စာအိတ်ကလေးကို ဖွင့်ကြည့်ဆွဲထုတ်လိုက်သည်နှင့် ဆယ် တန်နှစ်ရွက်နှင့် ငါးကျပ်တန်တစ်ရွက် ထွက်လာသည်ကို တွေ့ရ၏။ ကို ဆက်ဖတ်ရန်.....
မိဘနှစ်ပါးစလုံး ပင် အတန်ကြာသည်တိုင်အောင် တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ရင်း တွေနေ ကြ၏။ နောက် စက္ကန့်ပိုင်းလောက်အတွင်းမှာပင် ကိုထွန်းအောင် မျက်ရည်ဝေလာ၏။ မသိန်းမေ တွင်မူ ဝေရုံသာမက မျက်ရည်တို့သည် တသွင်သွင် စီးကျတော့၏။
"သား အတာ သားလေး"
မသိန်းမေကလည်း သို့လျှင် ရေရွတ်မိရာမှ ရှေ့ဆက်၍ပြောရန် သူကြိုးစား၏။ သို့သော် နှုတ်ခမ်းသာ တရွရွ လှုပ်နေသည်၊ စကားဆို၍ ဘာတစ်ခွန်းမျှ ထွက်မလာတော့ဘဲ နောက်ဆုံး၌ မျက်ရည်ကလေး တလည်လည်နှင့် ငေးနေသော အတာ ကိုသာလျှင် သိမ်းကျုံးပွေ့ဖက်ကာ ပါးပါးချင်း ပွတ်လျက် မျက် ရည်ချင်းနှောကာ အတောမသတ် ရှိုက်နေလေတော့၏။
ကိုထွန်းအောင် တွင်မူ မျက်ရည်ပင် လည်နေသော်လည်း ပါးစပ်ကမူ ပြုံးပြုံးကြီးကြည့်ရင်း ခေါင်း တညိတ်ညိတ် ဖြစ်နေ၏။ အတာ့ညီမလေး အမာမှာလည်း မျက်ရည်ကလေး အရွှဲသားနှင့် ဝမ်းနည်း ဝမ်းသာ ကလေး ငေးနေရှာ၏။
"သားလေး အတာ၊ မင့်အပေါ် မေမေ စိတ်ထားဆိုးခဲ့သမျှ ခုတော့ မေမေ ရင်ကွဲပြီ သားရယ်၊ မေမေ အသည်းကွဲပြီ"
သို့ပြောလိုက် အတာကလေးအား ဖက်၍ နမ်းလိုက်ဖြင့် မသိန်းမေတွင် သည်းအူပြတ်မျှ နောင်တ ကြီး ရ နေတော့၏။
"မှားခဲ့ပြီ၊ မေမေ မှားခဲ့တာဟာ နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူး သားရယ်၊ နည်းနည်းလေး မဟုတ်ဘူး၊ သား လေး ဟာ ဟိုတုန်းက မလိမ္မာရင် ခုနေ သူခိုးဖြစ်နေမလား၊ ခါးပိုက်နှိုက်ပဲ ဖြစ်နေမလား မသိဘူး၊ အဲသ လောက် မေမေ ဆိုးခဲ့တယ်၊ ငါ့သားအပေါ်မှာ မေမေ"
အားပါးတရ ဖက်လိုက်ပြန်၏။ ရက်ရက်ရောရော နမ်းနေပြန်၏။ ထိုအခိုက်တွင် လမ်းမဆီမှ ရွှီခနဲ မှုတ် လိုက်သော လေချွန်သံနှင့်အတူ "အတာကြီး ဟေ၊ ဟေး အတာ"ဟူသော မောင်မောင်တို့ အသံ ပေါ်လာသောကြောင့် "ကဲ အတာ၊ သွား သွား၊ ဟိုမှာ မင့်သူငယ်ချင်းတွေ လာခေါ်နေပြီ သွားလေကွာ"
ကိုထွန်းအောင်လည်း အတာအား ဤလိုပြောလိုက်မှပင် မသိန်းမေအား မျက်စိမှိတ်ပြလိုက်၏။ အတာ ဆင်းသွား လျှင် ဆင်းသွားခြင်း ကိုထွန်းအောင်လည်း ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နှင့် မသိန်းမေအား ကြည့်နေ ပြီးမှ
"ကဲ ဘယ့်နဲ့လဲ မသိန်းမေ၊ ကျုပ် အစကမပြောဘူးလား၊ ပြောတော့ ခင်ဗျား စိတ်ဆိုးတယ်၊ ခင်ဗျားဟာ စာလည်း မတတ်ဘူး၊ စာမတတ်တော့ ဗဟုသုတမရှိဘူး၊ ဒီတော့ ဘယ်လိုပြောလို့မှ ခင်ဗျား နားမဝင် ဘူး၊ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား" သူ့အမှား သူ ဝန်ခံသလို မသိန်းမေကလည်း ဘာတစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောဘဲ ကိုထွန်းအောင် ကိုသာ တွေ ကြည့်ရင်း နားစွင့်နေ၏။
"သူတို့ကြီးလာ လို့ အလုပ်အကိုင်ရရင် သူတို့သားမယား ရှာကျွေးမှာဆိုတဲ့ စကားနဲ့ပဲ အကြောင်းပြပြီး ခင်ဗျား ဒီကောင်လး ကို လျစ်လျုရှုထားခဲ့တယ်၊ ရက်စက်ခဲ့တယ်"
သို့လျှင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကလေး ပြောလိုက်ပြီးမှ တစ်စုံတစ်ရာကို သတ်ရသလိုဖြင့် ကိုထွန်းအောင် မျက်နှာထားပြောင်းသွားကာ "အေးလေ အမှန်ကတော့ ခင်ဗျားအပြစ်ချည့်လဲ မဟုတ်ဘူး၊ တရားတော်နဲ့ ကြည့်မယ် ဆိုရင် သူ့ အကု သိုလ်ကလဲ တော်တော်ပဲ ကြီးမားပုံရတယ် မသိန်းမေ၊ ခု ကြည့်ပါလား၊ ဒီကောင် အမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက် ရပြီးမှ သူ့ကို မသန်းသန်းတို့က ဘယ်လောက်ချစ်သလဲ၊ ဘယ်လောက် အရေးပေးသလဲ၊ နိုင်ငံခြား တောင်ပို့ပြီး ပညာသင်မယ်လို့ ပြောထားရက်နဲ့ ဒီကောင့် အကုသိုလ်က မကုန်သေးတော့ ကြံဖန်ပြီး ဒီကောင် ပျက်စီးရတယ်"
"မဆိုင်ပါဘူးရှင်၊ ဒီကောင် ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာ ဟိုနိုင်ငံရေးသမားတွေ မြှောက်ပေးလို့ပါ"
ဤတစ်ချီတွင် မသိန်းမေက စောဒကတက်ပုံ အချက်ပိုင်သွားတော့၏။
"ကဲ ထားပါတော့လေ၊ အရေးကြီးတာက သားသမီးရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင် သူတို့ကို တတ်နိုင် သ လောက် ပညာပေး ဖို့က မိဘဝတ္တရား၊ သူတို့က အလုပ်အကိုင်ရလို့ ကျွေးတာ မကျွေးတာက သူတို့ ဝတ္တရား၊ အေး ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ စားရကောင်းစေ၊ ပေးရကောင်းစေဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ဘယ် တော့မှ မထားနဲ့ မသိန်းမေ၊ ကျုပ်ကိုကြည့်၊ ကျုပ်မိဘ ကို တစ်နှစ်နေလို့ တစ်ဆယ် မထောက်ပံ့ နိုင်ခဲ့ဘူး၊ ထောက်နိုင်လောက်အောင် ပဲ ဝင်ငွေက မပြည့်စုံဘဲကိုး၊ ဒါဟာ လောကဓမ္မတာပဲ၊ မိဘဖြစ်သူ က သား သမီးလုပ်စာကို စားရကောင်းစေ ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မျှော်လင့်ပြီး မစားရရင် ဘာဖြစ်မလဲ၊ စိတ် ဆင်းရဲမယ်၊ ငါ့ကို မကျွေးလေခြင်း၊ မပေးလေခြင်း ဆိုပြီး အဲသလို စိတ်ထားမျိုးထားနေသမျှ သားသမီးမှာ ထိခိုက် တတ်တယ်"
ဤတစ်ကြိမ်သာလျှင် ကိုထွန်းအောင်၏တရားကို မသိန်းမေ နာဖော်ရ၏။ သို့အလျောက်လည်း ကိုထွန်း အောင် က ဆက်လက်၍
"ခုနပြောသလို သဘောမထားဘဲ အေးလေး သူတို့ကကျွေးလဲ စားရတာပေါ့၊ မကျွေးလဲ မရေးမကြီး ပါဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးသာထား၊ အင်မတန် စိတ်ချမ်းသာတယ်၊ သူတို့မပေးလဲ ကိုယ်ဘာမှ စိတ်မထိခိုက် ဘူးပေါ့၊ ဒါပေမဲ့လဲ ကဲကြည့်၊ အတာ လို သိတတ်တဲ့ သားသမီးလို ဟာမျိုးကျတော့ ပြောနေစရာ၊ လိုသေး သလား၊ သူ့ဟာသူ သိပြီး သူ့ဟာသူ လာကန့်တော့သွားပြီး မဟုတ်လား။ ဤတွင် မသိန်းမေ၌ မျက်ရည် ကလေး တစမ်းစမ်းဖြစ်လာပြန်၏။
"ဒီကောင် သိပ်လိမ္မာတယ်နော် သိလား၊ ခင်ဗျား ဥပေက္ခာထားပုံနဲ့ဆို တော်ရုံကလေးသာဖြင့် တစ်ခါထဲ အဖတ်ဆယ်လို့တောင် ရမှာမဟုတ်တော့်ဘူး ခုကြည့်စမ်း၊ ခင်ဗျားသူ့အပေါ် ဘယ်လောက်ဆိုးခဲ့သလဲ၊ ဒါပေမဲ့ မိဘဆိုး ကို မွေးကျေးဇူးကို သူမမေ့ဘူး၊ သူရတာတစ်လအစိတ်၊ ခုကစ်ပြားမှ မလျော့ဘူး၊ လာကန်တော့သွားတယ်" မသိန်းမေလည်း ကိုင်ထားသော ငွေအစိတ်ကို ငုံ့တွေတွေကြည့်နေပြီးမှ
"ကျွန်မ မသုံးရက်တော့ပါဘူးရှင်၊ သားလေးကိုပဲ ပြန်ပေးလိုက်မယ်၊ သူပဲသုံးပါစေတော့"
"ဟား ဒီလိုဆိုရင် ခင်ဗျားမှားသွားလိမ့်မယ်၊ သုံးပါ၊ သူပေးတာကို ခင်ဗျားမသုံးရက်ရင် အလှူတစ် ခုခု လုပ်လိုက်၊ အေး သူ့ကိုပေးချင်သပဆို သတ်သတ် ခင်ဗျားပိုက်ဆံထဲက ပေးပေါ့" "ဟုတ်ပါတယ် ကိုထွန်းအောင်၊ ရှင်ပြောသလို ကောင်းတယ် ပြီးတော့"
မသိန်းမေသည် စကားကို ရှေ့မဆက်သေးဘဲ လက်သူကြွယ်တွင်ဝတ်ထားသော နှစ်ပါးသွား စိန်လက်စွပ် ကလေးကို ချွတ်လျက် "ကိုထွန်းအောင် ရော့၊ အတာ့ကိုသွားပေချည်ပါ၊ ၀တ်ထားလို့နော်၊ ခုပဲ သွားပေးပါရှင်၊ ကျွန်မသား လေး ချက်ချင်းလက်ငင်း ၀မ်းသာသွားစေချင်လို့ပါ"
မသိန်းမေ ၏ အသံတွင် မိဘမေတ္တာအပြည့်ပါသကဲ့သို့ ကိုထွန်းအောင် ၀မ်းမြောက် ရွှင်လန်းခြင်း ဖြစ်ရသည် မှာလည်း အနှစ်ချည်းသက်သက် ဆိုသလို တစ်မျက်နှာလုံး ချိုသွားလေတော့၏။
အတာ အလုပ်ဝင်ခဲ့ပြီးသည့်နောက် ဆယ့်လေးငါးရက်လောက် အတွင်းမှာပင် ခင်စိုးလှဖေဖေ သည် အတာ့၏ စိတ်နေသဘောထားကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်စမ်းခဲ့၏။ ကျပ်ပြည့်ရိုးသားသော အတာ၏ ကိုယ့်ကျင့်တရား ကို စိတ်ချသလောက်အောင် သိခဲ့သည့်နေမှစ၍ ဦးလှအောင် အပြင် သွားစရာရှိက အတာ သာလျှင် ပိုက်ဆံသေတ္တာ ကိုင်ရ၏။
ယနေ့လည်း အခြားအလုပ်သမားများ လက်ဖက်ရည်သောက်သွားနေခိုက်နှင့် ဦးလှဆောင် ထမင်း ပြန်စားခိုက် ကြုံကြိုက်နေသောကြောင့် ဆိုင်တွင်အတာတစ်ယောက်တည်းသာ ရှိ၏။ ကုလားထိုင် တစ်လုံး တွင် တစ်စုံတစ်ရာသော အတွေးတွင် ငိုင်နေခိုက် ရုတ်တရက် ဖိနပ်သံ တစ်ခုပေါ် လာသော ကြောင့် အတာလည်း ဖျတ်ခနဲ မော်ကြည့်လိုက်၏။
မမျှော်လင့်ဘဲ ရောက်လာသူမှာ ခင်စိုးလှဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်နှင့် အတာလည်း ပျာပျာသ လဲပင် မျက်နှာ ကို ပြန်ငုံ့ပစ်လိုက်၏။ "ဘာလဲ ကိုတာ၊ အစိုးကို မုန်းသွားပြီလား"
ဤတွင် အတာချက်ချင်း ပြန်မော့လာ၏။ မြင်လိုက်ရသော အစိုး၏မျက်နှာကလေးမှာ ကြည် ကြည်နှင့် သန့်သလောက် တည်တည်နှင့်ခန့်လှတော့၏။ အတာသဘောကျသည်မှာလည်း ဤလို ဣနြေ္ဒမျိုး ပင် ဖြစ်၏။
"ဘယ်သူက မုန်းတယ်ပြောလို့လဲ၊ ဒီမှာ အစိုး၊ အဲဒီစကားတွေမပြောကြရင် ကောင်းမယ်ထင် တယ်၊ ခု ကိုတာ က အစိုးတို့ဖေဖေရဲ့ အလုပ်သမားဖြစ်နေပြီ၊ သူ့အရိပ်ခိုရင် သူ့အခက်ကို" "နေပါဦး ကိုတာ၊ ဘာလဲ ချစ်တယ် မုန်းတယ်ဆိုတဲ့ စကားနှစ်ခုက ချစ်တယ်ဆိုရင် သမီးရည်းစား စကား၊ မုန်းတယ်ဆိုရင် သမီးရည်းစား ခွဲပြဲတဲ့သဘောရယ်လို့ ဒီနှစ်မျိုးပဲ အဓိပ္ပာယ်ထွက်သလား ဟင်"
အတာ ဘာမျှ မဖြေနိုင်။ တစ်ခါတည်း မှိုင်ကျသွားတော့၏။
"အစိုး ကတော့ ဘွင်းဘွင်းပဲ၊ လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ချစ်မိရင်လဲ မုန်းခဲ တယ်၊ မုန်းမိပြီဆိုလဲ ပြန်ချစ်ခဲတယ်၊ ကိုတာ့ကိုတော့ ဟိုစာထဲပါတဲ့အတိုင်းပဲ ဆိုပါတော့၊ အင်း ဒါပေမဲ့ အစိုးဟာ ကိုတာ့ လိုတော့ အချစ်နဲ့အမုန်းကို အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးထဲထားပြီး"
"တော်တော့ အစိုး၊ ကိုတာ နားလည်ပြီ၊ ကိုယ်ကလဲ အစိုးကို အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေအနေ နဲ့အခင်အမင် မပျက်ဘူး၊ ပြီးတော့ ဟိုနေ့က စာဆုတ်ပစ်တဲ့ အပြုအမှုအတွက်လဲ"
"အစိုး ခွင့်လွှတ်ပြီးသားပါ ကိုတာ"
အလုပ်ဝင်ခဲ့ပြီးသည့် နှစ်လမြောက်သောနေ့သည် တနင်္ဂနွေနေ့နှင့် ဆုံနေသောကြောင့် ဆိုင်ပိတ် ၏။သို့သော် ဒေါ်ဒေါ်အေး က တိုက်ပေါ်သို့ခေါ်၍ အတာ့အတွက် ထည့်ထားသော လခငွေအစိတ် ပါသည့်စာအိတ် ကို လှမ်းပေးရင်း "အဲဒါ မင့်ဦးလေး က မင့်အတွက် စပါယ်ရှယ်ပေးသွားတာကွဲ့၊ ဒီပြင်အလုပ်သမားတွေတော့ နက် ဖြန်မှ လခရကြလိမ့်မယ်" "ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ ပြောပါ ဒေါ်ဒေါ်" "အောင်မလေးကွယ်၊ ကျေးဇူးတင်စရာလိုတဲ့ လူတွေမှ မဟုတ်တာ၊ သြ ဒါနဲ့ ဒီနှစ်သင်္ကြန် မှာ မင့်နှမက ကားနဲ့လျှောက်လည်ချင်သတဲ့၊ မင်းတာဝန်ခံပြီး လိုက်ပို့ပေးနိုင်ပါ့မလား အတာ" အတာလည်း အတန်ကြာ တွေနေပြီးမှ "ဒေါ်ဒေါ်အေး သိတဲ့အတိုင်းပါပဲလေ၊ အကျွေးအမွေး ကိစ္စက ကျွန်တော်ရှိမှ ပြီးမှာမဟုတ်လား၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်လောက်တော့ဖြင့်"
"အေးပါ တစ်ရက်တည်းပဲ ဒေါ်ဒေါ်အေး ပြောပါတယ်"
ထိုတိုက်ပေါ်မှ ဆင်းလာခဲ့သော အတာလည်း သူ့အိမ်ပေါ်ရောက်သည်နှင့် သူ့မေမေအား ငွေအစိတ် စလုံးပေးအပ် ရင်း ကန်တော့လိုက်ပြီးမှ "ကျွန်တော်သုံးဖို့ ငါးကျပ်လောက် မေမေ" ဟု ပြောရာမှ မော်ကြည့်လိုက်သည်၌ မသိန်းမေတွင် မျက်ရည်များဝေနေ သည် ကို တွေ့ရပြန်၏။
"ယူပါ သားရယ်၊ မင်းပဲ အကုန်သုံးပါ၊ မေမေ့မှာ ပိုက်ဆံရှိပါတယ်၊ ခု မေမေမြင်းမလောင်းတော့ ဘဲစာတိုက် မှာ စုထားတာတောင် ငွေနှစ်ထောင်ကျော်နေပြီ၊ ငါ့သားပဲ ယူသွား၊ သုံး" သို့သော် အတာက မယူ၊ ငါးကျပ်တန် ကလေးတစ်ရွက် သာ ဆွဲ၍အခန်းထဲမှ လှည့်ဆင်းသွားတော့ ၏။
ထိုနေ့သည် တနင်္ဂနွေနေ့ အတာတို့ ပါတီဌာနချုပ်မှ ဖိတ်ထားသောနေ့ဖြစ်၏။ အကြောင်းရင်း ကား နာဖျားမကျန်း ရှိ၍ ခွင့်ယူထားသော ဌာနချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးနေရာ တွင် နောက်ထပ် ရွေးချယ် လိုက်သည့် အတွင်းရေးမှုးသစ်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးရန်ဖြစ်သော ကြောင့် ထိုထိပ်သီးခေါင်း ဆောင်သစ်နှင့် အမြန်ဆုံး ရင်းနှီးမှုရရန်မှာ အတာ တွင် အလွန်အရေးကြီး၏။ သို့မှလည်း သူနှင့် အကျွမ်းဝင်သည်ဟူ၍ အခြားလူများ အပေါ်တွင် လျှာအရသာခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါလော။
ဖိတ်ထားသည့်အချိန်နှင့် တစ်နာရီသာသာလောက် စော၍ရောက်လာသော အတာသည် ဌာနချုပ် ထဲသို့ လှမ်းဝင်လိုက်သည်နှင့် "ဟေး အတာ၊ ဟာမင်းကိုတွေ့ရတာ ငါဝမ်းသာလိုက်တာကွာ၊ ခုမင်း ဘယ်မှာလဲ ဟင်" သို့လျှင် ရွယ်တူ လူရွယ်တစ်ယောက်က ရုတ်တရက်ဆိုသလို တစ်ဆက် တည်း မေးလိုက်သော ကြောင့် "ငါလား အရင်လမ်းထဲမှာပေါ့ကွ၊ ဒါနဲ့ချစ်အောင်မင်းဘာလာလုပ်တာလဲ၊ ဒီကို" "ဌာနချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးအဖြစ် ငါ့ကို ရွေးကြလို့လေ" "ဟာ မင်းလား၊ အေး နာမည်တော့ ပါသား၊ ငါမတွေးမိဘူးကွာ၊ ကြည့်စမ်း ကြားရတာ ငါသိပ်ဝမ်း သာတာပဲ၊ ငါလဲပါတီဝင်ပေါ့"
"ဟော ငါလဲ မင်းလိုပဲဟေ့၊ တရားဟောတိုင်းပါတာ မင်းကိုး၊ လက်စသတ်တော့ဟင်၊ မင်းက ငယ်ရုပ်နဲ့ သိပ် မတူဘူး၊ အတော်ပြောင်းသွားတယ်၊ ဒါနဲ့ မင်းကောလိပ်မရောက်ဘူးနော်၊ ဘယ်အတန်းက ထွက်လိုက်သလဲ"
"ဟိုက်စကူး ကိုတန်း ကပေါ့"
"ငါတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းကနေပြီး မြို့မကို ကူးတယ်၊ ခြောက်လနဲ့ချည်း မှန်မှန်တက်သွားတာ သုံးနှစ်ခွဲ နဲ့ ကောလိပ်ရောက်သွားတာပဲ၊ ခုငါ ဘီအေ အောင်ခဲ့ပြီလေ" အတာ ဆက်၍ မကြား လိုတော့ပေ၊ ဥာဏ်ချင်း ယှဉ်လိုက်လျှင် အမြဲတမ်း ထိပ်ဆုံးက နေခဲ့သော အတာသည် ယခု ကိုးတန်း သမား၊ မကြာခဏ သူကပင် စာပြပေးခဲ့ရသော ချစ်အောင်ကမူ ယခု ဘီအေ၊ အတာ့ စိတ်လေး ထွေသွားပြီးဖြစ်၏။ ရှက်လည်း ရှက်နေရှာ၏။
သို့နှင့် မိတ်ဆက်ပွဲပြီးသည်ဆိုလျှင် အတာလည်း သုတ်ခြေတင်တော့မည်ဟု ခြေလှမ်းပြင်လိုက် သည်နှင့် ဥက္ကဋ္ဌြိကီး က လှမ်းခေါ်ပြီး ချစ်အောင်နှင့်အတာကို ပိုမိုရင်းနှီးအောင် မိတ်ဆက်ပေးသလို ဖြင့်
"သူကတော့ ဌာနချုပ်မှာ အလုပ်လုပ်ဆုံးပဲ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း သူလာလိမ့်မယ်၊ အဲဒါအတွင်းရေး မှူးက ခိုင်းချင်တာ ခိုင်းပေါ့နော်၊ ပါတီအတွက်ဆို ပိုစတာကပ်ခိုင်းလဲ သူကပ်တာပဲ၊ ဒီလောက် ပါတီကို ချစ်တယ်၊ စိတ်ဓာတ်လဲ "ဘာလဲ ဥက္ကဋ္ဌကြီးက သူ့ကိုမသိဘူးထင်လို့လား၊ ကျောင်းနေဘက်လေ"ဟု ချစ်အောင်က ကြားဖြတ်ပြောလိုက်မှ "ဟာ မသိဘူးမှတ်လို့ မိတ်ဆက်ပေးနေတာ"ဟုပြောရင်း ဥက္ကဋ္ဌကြီးက အတာ အား ပခုံးပုတ်၍ ရယ်လိုက်ပြီးမှ "ကဲ ကိုချစ်အောင်၊ ရှေ့နေ့ဆီပေးဖို့စာကို တစ်ခါတည်းပေး လိုက်ပါလား၊ တနင်္ဂနွေနေ့ကျတော့ အတာ သွားပို့ပေးလိမ့်မယ်၊ သူသွားနေကျပဲ"ဟု ဆက်၍ပြောလိုက်သည်နှင့် ချစ်အောင်လည်း ရုံးသုံးစာအိတ်ရှည်တစ်ခုကို သွားယူလာပြီး အတာ့လက်သို့ လှမ်းပေးလိုက် သဖြင့် အတာလည်း ချက်ချင်းပင် ကိစ္စရှိ၍ ဟူသောအကြောင်းပြချက်ပင် သုတ်သုတ်ကလေး လှည့်ထွက်လာတော့၏။
ပါတီအတွက်ဆိုရင် ပိုစကာကပ်ခိုင်းလဲ သူကပ်တာပဲ၊ ဒီလောက်ပါတီကိုချစ်တယ်၊ အဲဒါသူ့ကိုခိုင်း ချင်တာခိုင်းပေါ့၊ ဟုတ်လား... ယခင်က ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဤလိုချီးကျူးလိုက်တိုင်း အတာသည် မှိုရသော အမှုအရာဖြင့် မျက်နှာကလေး ရွှင် ဘ၀င်ပါ ကြွခဲ့ဖူးသလောက် ယခုတစ်ကြိမ်၌မူ သူ အတော်ကလေး ရှက်သွား၏။ ရင်ထဲတွင် လည်းအောင့်နေ ၏။
ကျောင်းသားဘ၀ကဆိုလျှင် ချစ်အောင်ကို အတာက စာပြပေးခဲ့ရ၏။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကျောက် သင်ပုန်းသုတ် တံမြက်စည်းလှည်း စသည်တို့ကို အတာကခိုင်းလျှင် လုပ်ပေးရသော တပည့် လည်းဖြစ်၏။ ယခုမူ ချစ်အောင်ခိုင်းရာကို သူလုပ်ရတော့မည်။ သူမလုပ်လို၊ ချစ်အောင်နှင့်ဆိုလျှင် အနည်းဆုံးတန်းတူ အဆင့်အတန်းတွင်သာ နေချင်၏။
တငိုင်ငိုင် တငေးငေးနှင့် စိတ်ပျက်လက်ပျက်တွေးရင်း လျှောက်လာခဲ့သောအတာလည်း ဤလို ကပြောင်း ကပြန် ဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းကို အတွေးနက်နက်ဖြင့်ရှာ၏။
ပါတီကောင်းစားရေး အတွက် သူကိုယ်ဖိရင်ဖိကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မှာ ကျောင်းသားဘ၀မှ စ၍ တွက်စစ်သော် လေးနှစ်ကျော် ငါးနှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်၏။ ဋ္ဌာနချုပ်အမှုဆောင်များ အစည်းအဝေး တွင်ပင် သူဝင် ၍ နားထောင်ခွင့်မရ၊ အရေးကြီးသော တရားပွဲများတွင်လည်း သူ့ကို တရားဟော ခွင့်မပြု၊ သူဘာတွေ လုပ်ခဲ့ ရသနည်း၊ သာမန်တော်ရုံ လျော်ရုံ ကိစ္စတွင်သာ တရားဟောရ၏။
အရပ်တကာလည်၍ ပိုစတာကပ် ရသည်။ ကြေညာချက်များကို သတင်းစာတိုက်သို့ လျှောက်ပို့ ရသည်။ ကြော်ငြာလိုက်ဝေ ရသည်။ ပါတီခွဲရှိရာ ရပ်ကွက်များသို့ ညွှန်ကြားလွှာများ လည်ပို့ရ သည်။ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ က ကွမ်းယာ ဆေးလိပ် ၀ယ်ခိုင်းလျှင်လည်း အပြေးအလွှား သွားဝယ် ပေးရသည်။ သို့နှင့်ငါးနှစ် နီးပါး ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား၍ ပါတီကိစ္စများတွင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကူညီ လုပ်ကိုင်ပေးသော်လည်း ယခုထိသူသည် သာမန်ပါတီဝင်အဆင့်အတန်းတွင်ရှိနေသေး၏။
ထို ငါးနှစ်နီးပါးအတွင်း ချစ်အောင်ကို တစ်ကြိမ်မျှ ပါတီတွင် မတွေ့ခဲ့စဖူး၊ ပါတီအတွက်သော် လည်းကောင်း၊ လူထုကိစ္စတွင်သော်လည်းကောင်း စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကိုလည်း တခါ မျှ မကြားမိ ဖူးပါလျက် အဘယ်သို့သော အကြောင်းကြောင့် ပါတီက ချစ်အောင်ကို ဧရာမ ရာထူး ဖြင့်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြသနည်း၊ အတာအကြောင်းရှာ၏။
"ဘီအေ ဘီအေ ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ချစ်အောင်ကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ်ခန့်တာဟာ ဘီ အေ ကိုခန့်တာပဲ၊ ဟုတ်တယ်၊ ပါတီအတွက် ငါအနစ်နာခံပြီး ပိုစတာကပ်တာကအစ မရှက်မ ကြောက် ငါလုပ်ပေးခဲ့တယ်၊ သက်တမ်းအားဖြင့်ဆိုရင်လဲ ငါးနှစ်ပြည့်တော့မယ်၊ ဒါပေမဲ့ ငါ့မှာတော့ အရံအမှုဆောင် အဖြစ်တောင် အရွေးမခံရသေးဘူး၊ ပါတီကလဲ ငါ့ကို ဒီလိုအဆင့်အတန်းနဲ့တောင် ထိုက်တန်ပြီလို့ ယူဆကြ ဟန် မတူသေးဘူး၊ မနေ့တစ်နေ့ကမှ ပါတီဝင်တဲ့ ချစ်အောင်ကျတော့ ဟင်း"
စိတ်ထဲ တွင် အတော်ကလေး အခံရခက်နေသည့်အတိုင်း အတာသည် သို့လျှင် ညည်းညူ ရေရွတ်ရင်း တဟင်းဟင်းနှင့် လျှောက်လာခဲ့၏။
"ဒါ ငါ့အမှားပဲ၊ ငါ့အပြစ်၊ ငါမှ ပညာမတတ်ဘဲ၊ ဘီအေအောင်အောင် မသင်ခဲ့ဘဲ၊ သူတို့ကြွေး ကြော်တဲ့ ကျွန်ပညာ၊ ဒီပညာကိုလဲ ငါဆက်သင်ပြီး ဘီအေ အောင်ခဲ့ရင်"
အတာလည်း တဖြည်းဖြည်းနှင့် အမှန်တရားကို တွေ့လာပြီဖြစ်၏။ မျက်ရည်ကလေးလည်း ဝေ့နေ ၏။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းထွက် ဘီအေကျတော့ ပါတီအတွက် ဘယ်လောက် အနစ်နာခံတယ် ဆိုတာ ရောလုပ်သက်ရော၊ ဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘူး၊ နာမည်နောက်က ပါလာတဲ့ (သူတို့အခေါ် အပြီး) ဒီလို ဘီအေ ဆိုတဲ့ အမြီးကိုပဲ သူတို့တန်ဖိုးထားပြီး ထိပ်ဆုံးကနေရာကိုပေးတယ်၊ ခေါ်တာအောင် ကိုချစ်အောင် တဲ့၊ တောက် ထိုည က အတာ တော်တော်နှင့် အိပ်မပျော်ခဲ့။ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ ယူကြုံးမရဖြစ်ရခြင်း၊ မကျေနပ်ခြင်း၊ နောင်တရခြင်း စသောစိတ်ဒုက္ခ ဝေဒနာကိုသာ မျက်ရည် အပြည့်ဖြင့်ခံစားရင်း မိုးလင်းခါနီးမှ အိပ်ပျော်ခဲ့၏။ နံနက်အိပ်ရာမှ နိုးသည်နှင့် ကိုးနာရီလောက် တွင် ရှေ့နေ့ထံပို့ရန် ပါတီကပေး လိုက်သည့်တာဝန်အရ စာအိတ်ကိုင်ကာ တငိုင်ငိုင် ပင် တွေးရင်းလျှောက်လာခဲ့ပြန်၏။
ကြည့်ရသည်မှာ ယခင့်ယခင်အခေါက်များကနှင့် မတူ၊ သူယခုစိတ်မပါ့တပါ ဖြစ်နေ၏။ ပို့နေကျ အတိုင်း ရှေ့နေ ထံ စာတက်ပေးရမည်ကိုပင် အတာရှက်သလိုလို အသွင်မျိုးဆောင်နေ၏။
ဘာလမ်း(ယခုမဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း)နှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်ရှိ ရှေ့နေများအလုပ်တိုက်သို့ တက်၍ စာပေးပြီး ဦးခေါင်းငိုက်စိုက်နှင့် ပြင်ဆင်းအလာ လှေကားကွေ့တစ်ခုကို ချိုးလိုက်သည်နှင့် တက်လာသူ တစ်ဦးကို ရုတ်တရက်ဝင်တိုးမိ၏။
"ဟာ ဆောရီးဗျာ၊ စိတ်မရှိပါနဲ့နော်၊ မတော်လို့"သို့တောင်းပန်ရင်း မော့ကြည့်လိုက်မိသည်နှင့် အတာ တွင် ပါးစပ်အဟောင်းသား ငေးသွားတော့၏။ "ဟေး သူငယ်ချင်းမင်းအတာ မဟုတ်လားကွ၊ ဟင်"
"ဟုတ်တယ် ရာမာ၊ ငါအတာပဲ" အတာသည် ရာမာအား ခပ်တွေတွေ စိုက်ကြည့်နေရင်းက သို့ပြောလိုက်ပြီးနောက် ချက်ချင်းပင် ခေါင်းကလေးငုံ့သွားပြန်၏။
"မင်း ခုဘာလုပ်နေလဲ အတာ၊ နေတော့ကော အရင်လမ်းထဲမှာပဲလား"
"အေး အလုပ်ကတော့ အင်း ဘာမှ မလုပ်သေးပါဘူးကွာ"
အတာလည်း အမှန်ကို ထုတ်ပြောရမည်ပင် ရှက်နေ၏။ ရှက်မည်ဆိုကလည်း ရှက်စရာပါပေ။
"တွေ့ရတာ သိပ်ဝမ်းသာတာပဲကွာ၊ မင့်ကျေးဇူးတွေ ငါ့မှာအများကြီး ရှိခဲ့တယ်နော်အတာ၊ ငါလေ ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး၊ စကားစပ်မိရင်ပြောပြတာပဲ၊ ဘယ်သူ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ကဲလာကွာ၊ တစ်ခါတလေ တွေ့ရတာ မင့်ကိုငါတစ်ခုခုကျွေးပါရစေ" သို့ပြောရင်း ရာမာက ဆွဲခေါ်၏။ အတာ မလိုက်။
မသိမသာမော်ကြည့်တဲ့ပြီးမှ "မစားပါရစေနဲ့တော့ ရာမာရာ၊ ငါကိစ္စရှိသေးလို့ပါ နောက်မှပဲ"
"အေးလေ၊ သွားစရာရှိလဲ သွားဦးပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ အကြောင်းရှိရင်တော့ လာခဲ့ပါကွာ နော်၊ ဟို တတိယ ထပ်မှာကွ ငါ့ရုံးခန်း၊ ငါခု ရှေ့နေလိုက်နေတယ်လေ၊ သိပ်တော့မကြာသေးဘူး" "အေး"
"ဘာကိစ္စရှိရှိ လမ်းကြုံတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် ငါ့ဆီဝင်ပါကွာနော် အတာ၊ ဟုတ်လား" "မင်း ငါ့ကို ကျောင်းမှာတုန်းက စာသင်ပေးတဲ့ ကျေးဇူးတင်မဟုတ်ဘူး၊ မင်းရဲ့စာကြိုးစားပုံကိုငါ အတုခိုး နည်းယူပြီး မင်းဆုံးမတဲ့အတိုင်း လိုက်နာခဲ့လို့ ငါဒီအခြေအနေရောက်တာကို ဘယ်တော့ မှငါမမေ့ဘူး၊ တို့ရှေ့နေချင်းတောင် ခဏခဏ ပြောပြမိတယ် မင်းအကြောင်း မင်းကျေးဇူး"
"ကဲ ငါသွားမယ် ရာမာ"
အတာ လည်း စကားမဆုံးမီပင် ချာခနဲ လှည့်လိုက်၏။ သို့လှည့်၍ ခြေတစ်လှမ်းဆင်းမိသည်နှင့်ပင် မျက်ရည်တို့သည် အစုလိုက် အပြုံလိုက်ယိုဆင်း လာတော့၏။
ရာမာ ဂဏန်းသင်္ချာမှလွဲ၍ အခြားဘာသာများတွင် ညံ့လွန်းသဖြင့် အချိန်အားရတိုင်း အတာ ကစာ ပြပေးခဲ့သော ရာမာ၊ ဒေါ်ရင်ဂျီကုလားကလေး ရာမာ၊ သင်္ဘောကြီး ကူလီ ဂေါ်ရင်ဂျီကုလားတစ် ယောက်၏သား ရာမာ၊ မဆလာနှင့် သရက်သီး သနပ်ရောင်းသော ဂေါ်ရင်ဂျီ ကုလားမကြီး ၏ သားကလေး ရာမာ၊ တပင်ေ၇ွှထီးကိုပင် (တပင်ရွှေထွန်း) ဟု မပီ့တပီခေါ်သဖြင့် အတာ တို့ကပင် စနေကြ.. ယခုတော့ စတိုင်ထွားနေပြီဖြစ်၏။
လှေကားရင်းတွင် ချိတ်ဆွဲထားသော ၀တ်လုံရှေ့နေ့တို့၏ ဆိုင်းဘုတ်အသီးသီးကြားတွင် မစ္စတာရာမာ အမိန့်တော်ရှေ့နေ ဟူသော ရာမာ့ဆိုင်းဘုတ်ကလေးကို အတာသည် ယခုမှ ရှာ၍ ငေးကြည့်နေ မိ၏။ နောက်ကျလာသော မျက်ရည်များကြောင့် မြင်နေရသော ဆိုင်းဘုတ်ကလေး ဝေးသွားမှပင် အတာ ချာခနဲ လှည့်ထွက်လာခဲ့၏။ ရှက်လိုက်သည်မှာလည်း ပြောစရာမရှိ။
၀တ်လုံအင်္ကျီ ကို အလွန်သဘောကျပြီး တောင့်တောင့်တတ ၀တ်ျချင်ခဲ့သော အတာ၊ သူကြီးလျှင် ၀တ်လုံ လုပ်မည်ဟု ရင်ကလေးကော့၍ ခပ်ကြော့ကြော့ကြုံးဝါးခဲ့သော အတာသည် ယခု သူလုပ်နေရ သော အလုပ်ကိုပင် ထုတ်မပြောဝံ့သော အခြေသို့ ရောက်နေရှာပြီဖြစ်၏။
"မင်း ခု ဘာလုပ်နေသလဲ"ဟူသော အမေးမျှကြောင့်သာ အတာသက်သာရာရခဲ့၏။
"မင်းခု ဘာလုပ်နေသလဲ၊ လခရောကောင်းရဲ့လားကွ"ဟူ၍သာ အမေးခံရပါက အတာရူးသွား မည်လား ပင် မပြောတတ်။
မျက်ရည် ကို သူထိန်း၏ မရ၊ တတွေတွေသာ ကျနေ၏။ သို့နှင့်ပင် မျက်ရည်ကိုသုတ်ရင်း သက်ပြင်း ချရင်းဖြင့် ပြန်လာခဲ့သော အတာ လည်း လမ်းထပ်သို့ ရောက်သည်နှင့် အိမ်ပေါ်သို့ ခပ်သုတ်သုတ်ပြေး တက်သွား၏။ သူ့ဘိုးဘိုး၏ ဆုံးမစာကော်ပီစာအုပ်ကလေးကိုထုတ်လျက် သွက်သွက်ကလေး လှန်ကြည့် လိုက်၏။
"ငါ့မြေး ကိုယ်နဲ့မတန်တာ ဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့၊ မင့်အခြေအနေဟာ တစ်ထည် တစ်ကျပ်တန် လုံချည် သာ ၀တ်နိုင်တဲ့ဘ၀ဆိုရင် သူများဆီက တစ်ဆယ်တန်ကို ငှားမ၀တ်နဲ့၊ မကြွားချင်နဲ့၊ မင့်ကို မသိတဲ့ လူတွေက အထင်ကြီးသွားလို့ မင့်မှာ ဘာမှတိုးမလာဘူး၊ မင့်အဖိုးတန်မ၀တ်နိုင် တာကို သိပြီးသားလူတွေ က အထင်သေးသွားရင် အဲဒါမင့်အဖို့ ဆုံးရှုံးခြင်းပဲ၊ ကိုယ်နဲ့တန်သလို နေ၊ ကိုယ်နဲ့ တန်သလောက် ၀တ်၊ စား၊ မကြွားချင်နဲ့၊ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စ၊ ကိုယ်နဲ့မတန်သေး တဲ့ဘယ်လို ကိစ္စ မှာပဲဖြစ်ဖြစ် မထင်ပေါ်ချင်နဲ့၊ ဘ၀င်မမြင့်နဲ့" သူဖတ်နေသောစာများပေါ်တွင် မျက်ရည်သည် တပေါက်ပေါက် ကျနေ၏။
ချက်ချင်းပင် အတာလည်း စာအုပ် ကို တရိုတသေပိတ်၍ အိမ်ပေါ်မှ ရိပ်ခနဲ ဆင်းသွား၏။ သူ့ဒေါ်ဒေါ်သန်းတို့ ပိရိက္ခရာ ဆိုင်ထဲသို့ပင် ခပ်သုတ်သုတ်လှမ်းဝင်သွား၏။ မြင်ရတွေ့ရသမျှသော သူ့ဘွားဘွား၊ သူ့ဒေါ်ဒေါ်သန်းနှင့် တကွ အားလုံးသော ကျေးဇူးရှင်ဟူသမျှတို့ကို နောင်တနှင့် ယှဉ်သော ကန်တော့ခြင်းဖြင့် အသီးသီး ဦးချလိုက်ပြီးမှ သူ့အမှားကို ၀မ်းနည်းပက်လက် မျက်ရည် တယိုယို အတာ သည် ငိုရင်းနှင့် တောင်းပန် လိုက်၏။
"ကျွန်တော့်ကို ကျောင်းပြန်တာပေးပါ ဒေါ်ဒေါ်၊ ကျွန်တော် ကျောင်းပြန်နေတော့မယ်၊ စာတတ်အောင် သင်တော့ မယ်၊ ပညာရဲ့တန်ဖိုးကို ကျွန်တော် ကျွန်တော်" အတာသည် စကားကိုပင် ရှေ့မဆက်နိုင၊ မျက်ရည်အဖြိုင်ဖြိုင်နှင့်ရှိုက်နေ၏။
"အေးအေး၊ ဒေါ်ဒေါ်သန်း ၀မ်းသာလိုက်တာ အတာရယ်၊ မင်းခုလို အချိန်မီနောင်တ ရလာတာ ကို ဒေါ်ဒေါ်ဘယ်လို ၀မ်းသာမှန်းမသိဘူး၊ ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်၊ ဆက်သင်ပေါ့ကွယ်၊ ဟိုတုန်း ကလဲ ပြောထားသား၊ မဟုတ်လား၊ ဘယ်အချိန်မဆို မင်းသင်ချင်သပဆိုရင် လာပြောလှည့်လို့၊ ကဲမင်း ဘယ်အထိ သင်မလဲ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် သွားဦးမလား သွား၊ ဒေါ်ဒေါ်ပို့ပေးမယ် ဟုတ်လား"
သို့လျှင် ရှာမရှားသော စေတနာဖြင့် အတာ့ကို ပြောနေသော ဒေါ်ဒေါ်သန်းမှာလည်း မျက်ရည်ဝဲ နေ၏။ ဘွားဘွားနှင့် တကွ တစ်အိမ်သားလုံးတွင်လည်း မျက်ရည်ရွဲနေ၏။ သို့သော် အတာ ကျောင်းထွက်စဉ်က ယိုခဲ့ ဖူးသော မျက်ရည်ပူမျိုးမဟုတ်၊ နှစ်နှစ်သိမ့်သိမ့်ဖြင့် စိမ့်ထွက်လာသော အလွန်အေးမြလှ သည့် မေတ္တာရေကြည်သာ လျှင် ဖြစ်၏။
"ကဲပါကွယ်၊ ငါ့မြေး အတော်စိတ်ထိခိုက်သွားပုံရတယ်၊ ငိုလိုက်ရတာလဲ မောလို့၊ လိမ္မောရည် ကလေး တစ်ခွက်လောက် ဖောက်တိုက်လိုက်ကြပါကွယ်"
သူ့ဘွားဘွား ကလည်း အင်္ကျီစဖြင့်မျက်ရည်တို့ရင်းသို့လျှင် ကြင်နာလိုက်လေသေး၏။
ကမ္ဘာလှည့်၍ပင် ရှာရှာ အတာသာလျှင် အို၍သေချိမ့်မည်။ ဤလိုကျေးဇူးရှင်မျိုးကိုကား တွေ့လိမ့် မည်မဟုတ်တော့ပေ။ အတာလည်းထိုနေ့မှာပင် သူ့အလုပ်ရှင်ဖြစ်သော ဦးလှဆောင်ထံသွား၍ အကြောင်း အကျိုး အမျိုးမျိုးရှင်းပြရင်း အလုပ်မှ ထွက်ခွင့်တောင်း၏။
"ဒီမှာ အတာရ၊ မင့်အသိဥာဏ် မင်းဦးနှောက်နဲ့ မင့်ပညာအရည်အချင်းကို သူများသိတာထက် ဦးလေး ပိုပြီး ရိပ်မိတယ်ကွ၊ ဦးလေးကိုယ်တိုင် ပညာထူးချွန်ခဲ့တဲ့သူမို့ မင့်ကိုဦးလေး အတော်ပဲ စိတ်ဝင်စား ခဲ့တယ်၊ နောက်မင်း ကျောက်ထွက်လိုကတယ်လဲ ကြားရော သူများတွေ စိတ် မကောင်း ဖြစ်တာထက်ဦးလေးမှာ ပိုပြီး ထိုခိုက်သွားတယ် သိလား၊ အေးခုလို မင်းပညာဆက်သင်မယ် ဆိုတော့ လဲ သူများတွေထက် ရှေ့ဆုံးက ၀မ်းသာမဲ့လူဟာဖြင့် ဦးလေးပဲလို့သာ မင်းမြဲမြဲမှတ်ထား လိုက်ပေတော့ အတာ၊ ဟုတ်လား"
သို့ အစစအရာရာ အဆင်ပြေခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း အတာတွင် ၀န်ချတောင်းပန်ရန် ကိစ္စတစ်ခု သည် ကျန်နေသေး၏။
အစိုးမကျေနပ်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်တွေ အပြုအမှုတွေ ကို ဒီနေ့ကစပြီး ပြုပြင်သွားတော့မယ်ဆိုတာ ခု ကိုတာ ကတိပေးပါပြီ၊ ပြီတော့ အစိုးအဓိကထားပြီးပြောနေတဲ့ ပညာကိုလဲ ဆက်သင်ပါတော့ မယ်။
အဲဒီတော့ ကိုတာ့အပေါ်မှာ ထိုထို မကျေနပ်မှုတွေကြောင့် ခပ်တန်းတန်း၊ ခပ်တည်တည်လုပ်နေ တဲ့အစိုး ရဲ့ ခုအမူအရာတွေ အစား ကိုတာ့ကိုမြင်လိုက်တိုင်း အရင်ကလို ကြည်လင်ရွှင်ပျနေတဲ့ အစိုး မျက်မှာ ကလေးကို....
အစရှိသဖြင့် ဤလိုတောင်းပန်စာတစ်စောင်ကိုမူ သူရေးရပေဦးမည်၊ ရေးလည်း အမှန်ရေးပေလိမ့် မည်သာ။
Posted by SHWE ZIN U at 4:05 AM6comments Links to this post
Labels: သာဓု ၏ အတာ